3497s ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးများနှင့်ကျန်းမာရေးအရာရှိများသည် COVID-19 update ကို - မတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ images and subtitles
ငါတို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့လိုတယ် ခရီးသွား - တင်သွင်းမှု၏သက်ရောက်မှု ပြ.နာများ။ သူတို့အားလုံးအဘို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ခြင်း၊ ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိတယ် ခက်ခဲပြီး WE ငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ သင့်ရဲ့ပူဇော်ရာယဇ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခြားသူများကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ [ပြင်သစ်စကားပြော] >> (ဘာသာပြန်၏အသံ) သင်လုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်လက္ခဏာမျှမရှိစေရ အပြင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့အပြင် GO မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအနည်းဆုံးသင်နေထိုင်ပါ အခြားသူများထံမှနှစ် ဦး ကိုမီတာ။ အစဉ်အမြဲအဖြစ်, ထိတွေ့ထိမိပါဘူး မျက်နှာပြင်တံခါးလက်ကိုင်ကဲ့သို့၎င်း ပြီးနောက်လက်များကိုဂရုတစိုက်ဆေးကြောပါ သင်အိမ်သို့နှင့်အဖြစ်မကြာမီထွက်ခွာမည် သင်သည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့သူတွေ ရောဂါလက္ခဏာများ, မည်သို့မည်ပုံ ရာမသူတို့, သင်နေရမည် အားလုံးအချိန်အိမ်မှာ။ အွန်လိုင်းကိရိယာများကသင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည် အကယ်၍ သင်သာလိုအပ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ပါ အကဲဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည် တစ် ဦး က COVID-19 စမ်းသပ်မှု။ >>> AT ဆိုတာဘာလဲကြည့်ပါ CANADA.ca - သွားနိုင်ပြီ အပြင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့ပြင်ပ သင်နှစ်မီတာအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည် အခြားအချိန်များအားလုံးထံမှ, သို့သော် AS ဆက်သွယ်မှုကိုအစဉ်မပြတ်ရှောင်ပါ လက်နှင့်တူန်ဆောင်မှုများ လက်ကိုင်နှင့်သင့်လက်များကိုဆေးကြောပါ သင်အိမ်နှင့် AS မထွက်ခွာမီ သင်ပြန်လာပြီမကြာခင်မှာပဲ။ >>> သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောသူတို့အဘို့ ရောဂါသည်မည်သည့်အရာကိုပျော့ပြောင်းစေသနည်း သင်မှတ်မိရမယ် အားလုံးအချိန်အိမ်မှာရှိနေဆဲ။ ကူညီရန်အတွက်အွန်လိုင်းကိရိယာများရှိပါသည် သင်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှု COVID-19 သည်။ >>> ONE ON ထဲကစစ်ဆေးပါ CANADA.ca ။ >>> အခုအချိန်မှာအလွန်ထူးခြားသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးသောအချိန် မှန်အောင်လုပ်။ ကျနော်တို့ဒီနည်းကို DONE GET လိုအပ်ပါတယ်ရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားကိုကုလားအုတ်စီပါ။ မာစီ။ >>> အိုကေ၊ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ DR ။ NJOO ။ အခုတော့ဝန်ကြီးထံမှနားထောင်ပါလိမ့်မယ် ဌာနေဝန်ဆောင်မှုများအမှတ်အသား၏ Miller ။ မာကု >>> [ပြင်သစ်စကားပြော] >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): ကောင်း နေ့လည်ပိုင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >>> ပထမ ဦး ဆုံး Nation INUIT AND မက်ဒီအက်စ်အများစုဟာ ကနေဒါရှိအားနည်းသောအုပ်စုများ၊ အထူးသဖြင့်ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ဝေးဝေး FLY-IN နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းများ ထူးခြားအားနည်းချက်။ AND ငါငါ့အ REITERATE ချင်တယ် အားဖြင့်မျှဝေတစ် ဦး တည်း ဦး စားပေး ကနေဒါအစိုးရသည် ဌာနေကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှု လူတွေ [ပြင်သစ်စကားပြော] >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): WE COVID-19 ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ ကနေဒါရှိအခြေအနေများတိုးတက်နေသည် လျင်မြန်စွာ။ >> COVID-19 စီးပွားရေး BY ကြေညာခဲ့သည်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ် ကာလအပိုင်းအခြားနောက်ဆုံးအပတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည်စီမံပေးနေသည် $ 305 သန်းတိုက်ရိုက် TLOI ပထမ NATIONAL INUIT AND METIS သူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ လုပ်ဖို့အမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် သူတို့ဘာကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုသလဲ အကျပ်အတည်းကာလ၌လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေသတ်မှတ်ချက် ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံများနှင့်အတူဆွေးနွေးမှုများ INUIT AND - ဦး စားပေးကာလ ဒီနည်းကိုကူးစက်ရောဂါ။ >>> ဒီရန်ပုံငွေစီးဆင်းလိမ့်မည် Indigenous တိုက်ရိုက် အများဆုံးနှင့်ဆက်သွယ်သောရပ်ရွာများ လိုက်လျောညီထွေရှိအောင်ကူညီရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဒေသတွင်းလိပ်စာတုံ့ပြန်မှု လိုအပ်ချက်များ။ WE ဒီနည်းကိုမြန်ဆန်စွာနဲ့လုပ်ပါလိမ့်မယ် အရေးတကြီးသဘောထား။ >>> ငါဒီနည်းကိုအလေးပေးချင်တယ် ဘဏ္Nာရေးသူနာပြုတစ် ဦး တည်းသာ WE ပထမ ဦး ဆုံးအဘို့အစဉ်းစားနေကြသည် နိုင်ငံများ, INUIT နှင့် METIS ။ >> ဒီနည်းကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ, အစားအစာထောက်ခံမှု ပံ့ပိုးမှု, ကလေးများအတွက်အကူအညီနှင့် နေသောသူတို့ကိုကူညီပါ အလုပ်လက်မဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့သို့မဟုတ်ပင် အရေးပေါ်ကြားဝင်ဝန်ဆောင်မှု။ ့ဖွင့်။ >>> ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီရလိမ့်မည် အခြေစိုက်စခန်းပမာဏ လူ ဦး ရေ, အဝေးမှနှင့် ရပ်ရွာကောင်းကောင်း။ INUIT ဆိပ်ကမ်းသည် ၄၅ သန်း တစ်ခုချင်းစီကိုစီးဆင်းလိမ့်မည် လေး INUIT မြေယာတောင်းဆိုမှု AN မှတဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ အိုင်တီကဆုံးဖြတ်ခွဲဝေ AND မက်ဒီစ်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး ဆောင်မှု အဲဒီမှာသန်း 30 သန်းရှိလိမ့်မည် အစိုးရတစ်ခုစီမှစီးဆင်းလိမ့်မည် အဖွဲ့ဝင်။ အနားယူ AT ကိုဒေသသို့သွား သူတို့ကိုကူညီပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်း ဝေးနေတဲ့ WHO က [ပြင်သစ်စကားပြော] >> (အသံ) FU သည်ရန်ပုံငွေကိုထပ်ဆောင်းထားသည် ပြီးသားကြေငြာခဲ့သည် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အိုင်တီကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြADနာများကိုဖြေရှင်းရန် ဥပမာအားဖြင့်ပေး FOR ဥပမာ ကိရိယာနှင့်အရေးပေါ်စီစဉ်ခြင်း အထောက်အပံ့။ >>> BY ယူအတိုင်းအတာ သူတို့ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသိုင်းအဝိုင်း သူတို့ပိတ်ပစ်မှလူ ဦး ရေ ဒေသခံကြေညာရန်နယ်နိမိတ် အရေးပေါ်အခြေအနေ။ ငါသူတို့အသိအမှတ်ပြုချင်တယ် အရေးကြီးသောအလုပ်နှင့်ခွန်အား သူတို့ပြပေမယ့်ငါ့ကိုကြကုန်အံ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ဒီနည်းကို IS စတင်။ နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြစ်လိမ့်မည်ငါတို့သိကြ၏ လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ငါတို့လုပ်လိမ့်မည် ဌာနေလူထုမပါ ၀ င်ပါ နောက်မှာချန်ခဲ့သည်။ ငါတို့အစိုးရဒီမှာ ဤအချိန်ကာလအတွင်းသင်ကူညီပေးပါ။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >>> အိုကေ။ သငျသညျအများကြီး, မာကုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ငါတို့ထံမှနားထောင်ကြလိမ့်မည် အသိုင်းအဝိုင်းဝန်ကြီးနှင့် အမွေဆက်ခံသူမစ္စတာစတီဗင် GUILBEAULT, ကြမ်းပြင်သည်သင်၏ဥစ္စာဖြစ်၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >> ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါတို့ထင် အချိန်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲ လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသသည် ကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုပြီးဂရုစိုက်တယ် အခြားတစ်ခု၏။ ဒီနည်းကရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် လျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်နေသည်။ ကဏ္ S အားလုံးပါ ၀ င်ရမယ် အကောင့်ထဲသို့ယူ။ အဲဒီမှာ WHO ကဂျာနယ်လစ်ရှိပါတယ် ပုံမှန်အခြေအနေနှင့် အကျပ်အတည်းတွင်အထူးသဖြင့် အခြေအနေများသည်အတွေ့အကြုံရှိသည် သူတို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအခက်အခဲများ ဆုံးရှုံးမှုအေဒီဝင်ငွေဆုံးရှုံး။ >> နိုင်အောင်ကနေဒါနိုင်သလား ကောင်းပြီအရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ COVID-19 သို့။ ဤသည်အစိုးရ၏ဘာကြောင့်လဲ ကနေဒါချက်ချင်းလက်ငင်းယူ ဒီတော့ကနေဒါဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ သတင်း၏အရင်းအမြစ်များ။ >>> [စကားပြော FRENC] >> (Trato ၏အသံ ငါကြေညာဖို့ဝမ်းသာပါတယ် ငါ၏အကောလိပ်၏ BEHALF ကနေဒါနိုင်ငံအခွန်ဝန်ကြီးဌာန လွတ်လပ်သောကော်မတီကသော သော CRA နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေတယ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအခွန်သွားနေသည် INOUNCE တိုင်းတာမှုများ 2019 ဘတ်ဂျက်။ သူတို့ကယခုတရားဝင်, ပို။ ဖြစ်ကြသည် သန်း ၃၀ ကိုအခြေခံသည် တစ် ဦး ၌ငါတို့အစိုးရအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည် အမျိုးသားရေးအသိပညာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး COVID-19 အကြောင်း, ငါတို့ - ဒီနည်းကိုလိမ့်မည် ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည် မီဒီယာဆိုတာအိုင်တီရဲ့တီဗီ၊ သတင်းစာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်း။ >>> ဒါကြောင့်ဖွင့် ဒီနည်းကိုကမ်ပိန်းအားဖြင့် Generated ဘဝအသစ်ကိုအသက်သွင်းနိုင်သည် မီဒီယာ, ပြည်သူ့ဝန်ကြီး အလုပ်လုပ်ပုံ FILE SO အလုပ်လုပ်သည် ဒီနည်းကိုလျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သလား။ >>> သတင်းအချက်အလက်များ AT စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး TI M ကဒီနည်းကိုပွိုင့် ကနေဒါ၏အစပြု ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့, တော်ဝင် မိသားစုရူပဗေဒကောလိပ်နှင့် မိသားစုရူပဗေဒ၏ကောလိပ် ကနေညှိနှိုင်းကနေဒါ၏ ကနေဒါပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ASSOCIATION နှင့်ထောက်ခံပါတယ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်နှင့်ကြော်ငြာ OR အေဂျင်စီ။ >>> သူတို့ပြင်ဆင်နေကြသည် အများပြည်သူကျန်းမာရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ကနေဒါနှင့်အတူမိတ်ဖက် လေကြောင်းရန်မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း အိုင်တီ >>> ဤသည်ကိုဘယ်လိုသတိပေးသည် ကနေဒါမှစုရုံးနိုင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူညီရိုင်းပင်းပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ချက်ချင်းဖြစ်သောကြောင့် ငွေရရှိမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည် အယ်ဒီတာများနှင့်ထုတ်ဝေသူများ ရိုးရှင်းစွာနေရာချခြင်း ကနေဒါစာအုပ်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ် ရန်ပုံငွေနှင့်ကနေဒါကာလ အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆိုလိုသည်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ဤအစီအစဉ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် R2ဆန့်ကျင်သောအပတ်အနည်းငယ်အနည်းငယ် နောက်လအနည်းငယ် \_ t ဤအတိုင်းအတာကိုကောင်းစွာယူပါ ကနေဒါအာမခံနိုင်သေချာပါစေ ဆက်စပ်အချက်အလက်အချက်အလက်များ COVID-19 နှင့်မီဒီယာကိုထောက်ပံ့သည် နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မာစီ။ >>> အိုကေမာစီ၊ Stephen ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Stephen ။ ယခုငါတို့ငါတို့ထံမှနားထောင်ပါလိမ့်မယ် ဘဏ္MINာရေးဝန်ကြီး။ >>> ဘီလ်, ပေးပါ။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >>> [အသံမရှိ] >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် သငျသညျသောအပေါငျးတို့သရန် နောက်ဆုံးညအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ တညီတညွတ်တည်းသဘောတူညီချက်ရယူပါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေ့ပြောင်းခွင့်ပြုသည့်ဥပဒေ WE တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့ရွေ့ရမည်ကိုသိထားပါ ကာလအတွင်းကနေဒါထောက်ခံမှုနှင့်အတူ ထူးခြားတဲ့အချိန်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကြားသကဲ့သို့ငါ အထူးစိန်ခေါ်မှုများ လိုအပ်သည် တိုင်းတာခြင်းနှင့်မည်သို့ Indeed ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေပြီလဲ ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ရှေ့ဆက်ချခြင်း ကနေဒါ, ငါတို့အကျိုးကျေးဇူးများ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ရှေ့ဆက်ချခြင်း စီးပွားရေးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့ရှေ့ဆက်ထားပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး။ ဒါနဲ့ငါလမ်းလျှောက်ဖို့လိုပါတယ် ငါတို့ဘယ်မှာလဲ။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်သဘောပေါက်ပြီ အလွန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအပတ် OUT နေသောကနေဒါထောက်ခံမှု အလုပ်ဖြစ်သူ၊ ဖျားနာသူ၊ တစ် ဦး ၌ရှိသည် သူတို့ဘယ်မှာအခြေအနေ သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသနည်း သူတို့နေသောကြောင့်အိမ်မှာပါပဲ မိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ မိသားစုများတစ်ခုမှာရှိခြင်း အရေးပေါ်အကျိုးခံစားခွင့်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရွှေ့ ကြိုတင်အိုင်တီတစ်ခုနှင့်အတူ ကနေဒါအရေးပေါ်အကျိုးကျေးဇူး IDEA တွင်တုံ့ပြန်မှုအကျိုးကျေးဇူးသည် ငါတို့ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသွားကြသည် ကနေဒါတိုင်းတွေ့ရှိချက် ဘယ်နေရာမှာအခြေအနေမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ သူတို့ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ် $ 5,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏လွန်ခဲ့သော 12 လ သူတို့သည်အဘယ်သူမျှမဝင်ငွေရှိသည် COVID-19 ၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်သလား လေးလအတွက်တစ်လဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်နေတာသေချာပါတယ် ငါတို့လူတွေကိုတံတားဖွင့်နိုင် ဒီနည်းကိုခက်ခဲတဲ့အချိန် ဒီတော့သူတို့ကသူတို့အရင်းအမြစ်များရှိသည် သူတို့လိုအပ်, သူတို့ မိသားစုများ။ WE ဒီနည်းကိုနည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည် အိုင်တီလုပ်အားခပေးချေသည် အလုပ်ရှင်များသို့တိုက်ရိုက် လူတွေ။ >>> ဒီတော့ဒီနည်းကိုဆိုလိုတာကဘာလဲ အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်အတွက်တော့မဟုတ်ပါ အလုပ်အကိုင်ကိုသီးခြားခွဲထားရမည် သူတို့ထဲကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်း။ ဒီနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်ပါပဲ အလုပ်ရှင်များကိုထောက်ပံ့။ သူတို့တစ်တွေအခြေအနေမှာဖြစ်လိမ့်မည် ဒီနေရာမှာအလုပ်ရှင်မရှိရင်ဘယ်မှာလဲ FROM မှပိုက်ဆံကြာကြာခံ သူတို့အာမခံနိုင်ပါကုမ္ပဏီ ဒီအလုပ်ရှင်နိုင်လိမ့်မယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းဖြင့်လျှောက်ထားပါ တစ်လအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ရရှိသည် လေးလ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးအကြီးဆုံးစဉ်းစားသည် အရေးကြီးတယ် သင်တန်းကျော်ငါတို့ဘာပါတယ် နောက်ဆုံးအပတ်၏သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည် ဒီအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်နိုင်ပါတယ် ပို့ဆောင်တစ် ဦး ၌အပ်ရနိုင် ရလွယ်ကူပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်း လူတွေရဲ့အိတ်ထဲမှာပိုက်ဆံ မြန်။ >>> လုပ်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်နေပြီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ DONE ဖြစ်စေခြင်းငှါ, WE ပစ်မှတ်ထားပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်6ပြီ ၆ ရက်အပတ် လူတွေဒီနည်းကိုအပ်။ >>> အရေးကြီးပါတယ်ရဲ့ လုပ်ရန်နောက်ထပ်လုပ်ရန်သေချာစေရန် ငါတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်သောလူများ အလွန်ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် ငါ့အသင်းကလုပ်နေပြီ၊ Carla QAULTROUGH, ငါ့ကောလိပ် DEANNE အခုအချိန်မှာ။ ငါတို့၏အလုံးစုံအတွက်ဒီနည်းကိုဆိုလိုတာက စီးပွားရေး, ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှု ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်နည်းကိုဆိုလိုသည် ဒီနည်းကိုလုံးလုံးရန်ပုံငွေရှာ ဗဟိုအစိုးရနှင့်သော ဆိုလိုသည်မှာခန့်မှန်းချက် စီးပွားရေးအမျိုးအစားများ ကျွန်ုပ်တို့ပေးနေသည့်ထောက်ပံ့မှု သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည် သူတို့သည်နောက်ဆုံးအပတ်ရှိခဲ့သည်။ >>> SO ထက် RATHER တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုမျှော်လင့် ကနေဒါနှင့်အသေးစားရန် WE $ 27 ဘီလီယံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သောအခုချက်ချင်းမျှော်လင့်ပါတယ် တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မှုကိုဘတ်ဂျက်ရလိမ့်မည် တစ် ဦး ကဒါ $ 52 ဘီလီယံ သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုကြောင့် စကေးနှင့်သိသာထင်ရှားသော ဒီအကျိုးကျေးဇူးများကိုလူတွေ။ ဒါဆိုငါတို့ဘယ်လောက်ကြည့်နေလဲ $ 52 ဘီလီယံအတွင်းရှိ DONON မျှော်လင့်ထားသည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မှု အဲဒီမှာရဲ့ $ 55 ဘီလီယံရှိပါတယ် အခွန်ဘဏ္Fာရေးများတွင်ငါတို့ပြောပြီ မရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ တစ် ဦး ချင်းစီမဟုတ်သလိုကော်ပိုရေးရှင်း သူတို့ဆပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလိမ့်မည် သြဂုတ် ၃၁ မတိုင်မီဝင်ငွေခွန်။ SO ၏စုစုပေါင်း Package ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးထဲသို့ $ 107 ဘီလီယံ။ ငါတွင် TIME နေ့ကိုလွန် JEEPS FINANZA နှင့်အတူဖုန်း ငါမတိုင်မီဝန်ကြီးများ နှင့်ဖုန်းတွင်အချိန်ဖြုန်းခဲ့သည် JEEPT ဘဏ္MINာရေးဝန်ကြီးများနှင့်ငါ ကနေဒါဆိုတာကိုမင်းပြောပြနိုင်သလား အရမ်းယူ, ငါပြောနိုင်ပါတယ်, သင့်လျော်ပေမယ့်လည်းသိသာထင်ရှားသော တုံ့ပြန်ရန်ချဉ်းကပ်မှု ကျနော်တို့မမြင်နိုင်သောအခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရသည် [ပြင်သစ်စကားပြော] >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): ငါကစားစရာ US ရှိရန်အရေးကြီးသည် လူတွေဘယ်မှာအခြေအနေ၊ သူတို့၏အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိစေ၊ သူတို့ဝင်ငွေမရှိကြပါဘူး သူတို့ကိုလာမည့်လေးလ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ရှိရန် လေးလ။ ဆိုလိုတာကတိုက်ရိုက်လုပ်အားခ လူတွေအများကြီးနှင့်လည်းလိမ့်မည် ကုမ္ပဏီများကိုကူညီပါ။ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ >>> ဒီတော့ဆက်သွားမယ် ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကြည့်နိုင်ကြောင်းကြည့်ရှုရန် - သို့သော် ဤတိုင်းတာမှုများနှင့်အတူယခုချက်ချင်း ငါတို့ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ် လူတွေအတွက်အကူအညီ တိုက်ရိုက် 52 ဘီလီယံစုစုပေါင်း ထောက်ပံ့မှုနှင့်အခွန်နှင့်အတူ သီးခြားအတွက်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သူတို့ယူနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီများ သူတို့ရဲ့အခွန်ပေးဆောင်ရန် 31 သြဂုတ် နောက်ထပ် 55 ဘီလီယံအထိထိုး စီးပွားရေးသို့ဝင်ငွေ။ >>> အိုင်တီစုစုပေါင်းရဲ့ $ 107 ဘီလီယံ။ >>> ဒီတော့ငါတို့ကြည့်ရှုနိုင်သလားဘယ်လိုကြည့်လို့လဲ ဒီနည်းကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် Aggressive Be ယနေ့အခြေအနေ။ >>> အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ AND ငါသင်တန်းမှငါ သင့်မေးခွန်း၏အဖြေ။ >> ငွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် AND အားလုံးကောလိပ်များနှင့်ငါတို့ IndEED နေကြသည် သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေရန်အဆင်သင့်။ >>> ကြီးစွာသော WE နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် ဖုန်းနှင့်နောက်သို့မေးခွန်းများ အခန်း။ SO အော်ပရေတာ။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မာစီ။ ဤအချိန်တွင်စာနယ်ဇင်း STAR 1 ကိုနှစ်သက်ပါ သင်၌မေးခွန်းရှိပါက။ အဲဒီမှာတစ် ဦး အတိုချုပ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ရှည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပထမမေးခွန်းကနေ THE မှ "KRISTY Kirkup AND MAIL ။ " >> မေးခွန်း - နေ့လည်ခင်းကောင်း ထပ်လုပ်ခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီနေ့ ကျန်းမာရေးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် ဝန်ကြီးကအပေါ်ထပ်သို့ပြောသည် ညဥ့်နက်၏ AS သော quarantine ၌ပါဝါ အသုံးပြုရန်သွားတော့မည် အခြားခရီးသွားများသေချာအောင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများသွားနေကြသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်လက်အောက်ခံရန် ၁၄ နေ့အထီးကျန်, ငါ့မေးခွန်း IS ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ်အတွက်၊ ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောနိုင်ပါသလား အစိုးရအခုအချိန်မှာဒီယူ သောကြောင့်သေချာစေရန်အဆင့် FOR ဒီနည်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားစီ နယ်လှည့်ခရီးသည်များသည်လွတ်လပ်မှုရှိသည် AND သင်တစ် ဦး စီစဉ်နေကြသည် ဒီနည်းကိုနှင့်အတူလိုက်ရန်စည်းရုံးရေးကိရိယာ ဘာကြောင့်လဲ ပြည်သူ့ရဲလား >> အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်းနှင့်ငါ့ကိုပဲကြပါစို့ သောဟုတ်သည်, ကျန်းမာရေး REITERATE ပါဝါကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဝန်ကြီး သူအောက်မှာရှိခဲ့ပါတယ် AT စတင်စ quantantine လှုပ်ရှားမှု တစ်ညဉ့်နက်ဖို့ယနေ့ည Mandatory 14-Day ကာလ လူအားလုံးအပေါ်အထီးကျန်မှုတွေ ပြင်ပကနေဒါမှကနေဒါသို့။ ဒီစာစောင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည် Coronavirus မှာအရှည် တနင်္လာနေ့တွင်ဗီရိုကော်မတီ။ ကနေဒါနိုင်ငံသားအားလုံးအလုပ်လုပ်ကြပြီ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန်အလွန်ခဲယဉ်း သူတို့ရဲ့ရူပဗေဒအကွာအဝေး ဘဝနှင့်ငါတို့သည်တစ်ချိန်ကအဘို့, အခုဆိုရင်ချက်ချင်းအကြံပေးခဲ့သည် ကနေဒါသို့ရောက်ရှိလာသောလူများ မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန် ၁၄ ရက်အထိ သူတို့ရဲ့ပြန်လာ။ WE အခု IS ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပြီ ထိုအတိုင်းအတာစေရန်အချိန် မန္တလေး။ ငါတို့အားလုံးကိုတကယ်ပဲတန်ဖိုးထားတယ်ထင်ပါတယ် ရှိသည်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီနည်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားစီ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှု ကနေဒါ။ AND ငါ DR သို့လှည့်စေခြင်းငှါ NJOO TO ကမ်းလှမ်းချက် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် အများပြည်သူကျန်းမာရေး AURORA ရှုထောင့်? >> ဟုတ်ကဲ့။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမှရှာဖွေပါ ရှုထောင့်ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲ အချိန်ကောင်းတွေ၊ အရေးကြီးတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး SO တစ် ဦး ချင်းစီဖော်ထုတ်မထားဘူး အခြားအလားအလာများ အများပြည်သူလည်းအများပြည်သူ ၁၄ ရက်၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူ AN အတွက်အပြင်ဘက်ကန့်သတ်ဖြစ်ခြင်း ထိုမျှလောက်လေးစားခြင်းဖြင့်ပေါက်ဖွားသောကာလ ထိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအခြေခံမူ ၀ န်ကြီးဌာနကလည်းပြောကြားခဲ့သည် ထပ်ခါတလဲလဲလာခရီးသွားများ ကနေဒါသို့ပြန်သွားသင့်သည် နေရာတိုင်းမှာကြောင့်ဖော်ထုတ်ခံခဲ့ရသည် COVID-19 SO ကမ္ဘာပေါ်တွင် သင်အိမ်သို့လာတဲ့အခါအိုင်တီပါပဲ သင်၏အပေါင်းအဖော်များကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသည် ကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်မိမိကိုယ်ကိုသီးသန့်ဖယ်ထားခြင်းဖြစ်သည် ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုပဲ အထူးသဖြင့်ထံမှအဆင့် ပြည်သူ့ရှုထောင့်။ >>> ငါ PRIM ခဲ့ ADD ပါလိမ့်မယ် ဝန်ကြီးနှင့်အတူတစ် ဦး ကခေါ်သံ LED သုာန်များ ဒီနည်းကိုအစောပိုင်းနယ်မြေများ။ ကျနော်တို့ PROVINES မြင်ကြပြီ တက်ပြီးနောက်ထပ်ယူ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ရှင်းလင်းသောတိုင်းတာမှုများ နှင့်အချို့သောပါဝင်သောနယ်မြေများ ပြည်နယ်နှင့်နယ်မြေများ ခရီးသွားလာရန်ကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း အပြင်ဘက်မှ AND နယ်မြေ။ ငါနားလည်သဘောပေါက်အားလုံးကနေဒါ ဒါကလေးနက်သော IS အခြေအနေ။ အိုင်တီမတိုင်မီအိုင်တီဆိုးရလိမ့်မည် ပိုကောင်း။ ကျနော်တို့ကံကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့်တင်းကြပ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု WE PROFSUT ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ရန်လိုသည် DR ထံမှကြား၏ ကို AT မှာ NJOO ဒီနည်းကို၏အစ, ပြားချပ် THE CURVE AND THE CURVE စီစဉ် AND ဒီနည်းကိုမဖြစ်မနေအထီးကျန် အမေရိကန်လုပ်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ဆက်တွဲ။ >> မေးခွန်း: ငါသည်အံ့ AS ခြင်းခံခဲ့ရသည် ဘဏ္FINာရေးဝန်ကြီး WE သင်၏ဌာနကိုနားလည်ရန် အကြောင်းဘဏ်အကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည် ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုငွေခွဲဝေပါ အထူးသ။ ၀ န်ကြီးချုပ်ဆိုပါစို့ ကျွန်ုပ်တို့အားသတ်မှတ်ထားသောအမေရိကန်တစ် ဦး ကိုပေးပါ ဒီဟောပြောချက်တွေဘယ်လို UPDATE သွား။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘဏ်စနစ်သည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကနေဒါ FOR ခွန်အား၏။ ငါယုံကြည်သည် တွင်အပြင်းထန်ဆုံးဘဏ်စနစ် ကမ္ဘာ။ အတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးသည် စေရန်ဘဏ်စနစ်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား လိုအပ်အားလုံးအရွယ်အစား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ >>> ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသည် LITERALLY အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြ လတ်တလောနေ့တွေတစ်နေ့လုံးည ကျွန်ုပ်တို့မရှိကြောင်းသေချာစေရန် WE သောတစ်ခုတည်းသောထောက်ခံမှု နောက်ဆုံးအပတ်, စီးပွားရေးပြီးစီး ချေးငွေရရှိနိုင်သောအစီအစဉ်, THE စီးပွားရေးနောက်ကျော ကနေဒါဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် AND ပို့ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်ပိုရေးရှင်း အသေးစားစီးပွားရေးနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေများပေမယ့် ထို့အပြင်ဘဏ်များအတွက်စွမ်းရည် အားလုံးအရွယ်အစားအပေါ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ စီးပွားရေးချေးငွေအမျိုးအစား သူတို့ GET လိုအပ်မယ့်နေကြသည် အခက်အခဲတစ်ခုကြုံတွေ့ရ။ ငါသူတို့ဆွေးနွေးချက်များကိုပြောပါလိမ့်မယ် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ နှင့်ဘဏ်များအလုပ်လုပ်နေကြသည် အမေရိကန်နှင့်အတူတကွ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မဟုတ်ပါဘူး မည်သည့်အရာမျှအစီရင်ခံရန် IN IN အတိအကျ parameter ၏စည်းကမ်းချက်များ ဘယ်လိုရှေ့ကိုရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ ငါနောက်ဆုံးသူတို့ရှိတဲ့အခါ ငါလာမယ့်ပါလိမ့်မယ် ပွင့်လင်း AS ပွင့်လင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အော်ပရေတာ, နောက်မေးခွန်း, ကျေးဇူးပြု။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လာမည့်မေးခွန်းသည်စာပေမှဖြစ်သည် ကနေဒါစာနယ်ဇင်းမှ DIB ။ သွားကြ, သငျ့လိုင်းကို IS ဖွင့်လှစ်။ >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မစ္စတာ MORE Morene, ငါတစ် ဦး ရှိသည် အကျိုးကျေးဇူးအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်း၊ လူတိုင်းပြောဆိုသည့်မေးခွန်း ရန်ပုံငွေများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် တချို့လူတွေကဒီမရကြဘူး အနည်းဆုံးသုံးပတ်အတွင်းရန်ပုံငွေ အနည်းဆုံး။ ဒီတော့သင်လုပ်မယ့်အရာ လူတွေသူတို့ရပြီသေချာသည် ရံပုံငွေများ? လူတိုင်းကိုသင်ရောက်ရှိနိုင်သလား။ >> အဖြေ: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလွန်အရေးကြီးပါတယ် မေးခွန်း။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်နှင့်အပတ်များအတွင်း ကျနော်တို့သေချာစေရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ငါတို့ရိုးရှင်းပြီးနိုင်သလား WE သောဤထိရောက်သောချဉ်းကပ်နည်း လျင်မြန်စွာရန်ပုံငွေရနိုင် လိုအပ်သောကနေဒါ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအခြေအနေ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းစနစ်အနည်းငယ်သာတွေ့ရှိခဲ့သည် ဖွစျနိုငျသောဖက်ဒရယ်အစိုးရ အလွန်ထိရောက်မှုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါ ချဉ်းကပ်လျင်မြန်စွာ။ အိုင်တီရက်အနည်းငယ်ယူ။ ငါသေချာပါတယ် ငါတို့သေချာအောင်ရှိသည် စနစ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ >>> AND ငါ၌ငါသိ၏ ဒီနည်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှမြန်အောင်လုပ်ပါ AND ငါတို့လိုချင်အတိအကျပါပဲ လုပ်ရန်။ ယနေ့ငါတို့အထင်ထိုအပတ် BEပြီ ၆ ရက်မှာငါတို့ဖြစ်လိမ့်မယ် ဤရန်ပုံငွေများကိုပေးပို့နိုင်ပါ ကနေဒါ။ >>> သို့သော်အသစ်တစ်ခုရှိလျှင် - အသစ်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပေးမည် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့။ သိဖို့တကယ်အရေးကြီးတယ် ငါတို့တစ် ဦး လုံး၌လုံးဝပါပဲ အခြေအနေ - ဒီဟာအများဆုံးပါ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခု နေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့် Carl QAULTROUGH SYSTEMS ကိုကြည့်နေကြသည်။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် မြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အိုင်တီနောက်ထပ်ယူလိမ့်မည် သုံးပတ်။ >> မေးခွန်း: ငါတို့စကားပြောနိုင်ရင်တောင် ဖြစ်နိုင်သည်ဆယ်ရက်ပတ်လုံးအကြောင်းကို 6ပြီ ၆ ရက်နေ့တွင်ထပ်တိုးခဲ့သည် ၀ န်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့သလို ဒါကြောင့်ပင်ဆိပ်ကမ်းရှိနိုင်ပါတယ် AND အိုင်တီအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ။ သငျသညျမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်သလား။ ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသေးတယ် အဆိုပါ Quantant ဝန်ကြီး HAJDU ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ပေးသည် အမေရိကန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ သင်ဘာလုပ်မလဲ ဒီ quarantine စည်းကြပ်? ငါမိန့်မှာထားကြောင်းနားလည်ပါတယ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ Quantantine သို့သော်သင်ဖို့ဆိုလိုတာက ဝင်သောလူများကိုစစ်ဆေးပါ တိုင်းပြည်နှင့်နောက်သို့ -Up ရန် ပြီးနောက်သူတို့ကို 14 ရက်အတွင်း သူတို့နိုင်ငံသို့ဝင်? >> အဖြေ: သင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်း။ quarantine နှင့်အတူ, ဒီနည်းကိုအပြောင်းအလဲ IS ။ အခုဆိုရင်ငါတို့အကြောင်းတစ် ဦး ကအကြောင်းပြောနေတာပါ mandantory quarantine နှင့်, သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် လိုက်နာရန်နေရာများတွင်ယန္တရားများ Quantantine ။ သောခရီးသွားများအတွက်အားလုံးဖြစ်လိမ့်မည် ABROAD မှပါ ၀ င်သောခရီးသွားများ အမေရိကန်မှလုပ်သားများအတွက်မှလွဲ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူလုပ်သလဲ အလားပဲ။ >> သူဆိုသည်မှာအဘယ်ယန္တရားများ။ >> အဖြေ: ငါကြိုက်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်ကိုမှတ်သားပါ မပြောင်းလဲပါ ရက်အနည်းငယ်လောက်တိုင်ကျွန်တော်တို့အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့တယ် အထက်မှခရီးသွားများအားလုံး သူတို့တစ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားထား ကနေဒါ။ ပြောင်းလဲမှုယခုအချိန်အထိ IS ယနေ့ညဥ့်, Quantantine မသင်မနေရဖြစ်လိမ့်မည်။ >> မေးခွန်း: သို့သော်မည်သို့သောယန္တရားများ သင်အကြောင်းမေးနေပါသလား။ PER နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောလိပ်ကျောင်း။ >>> နောက်လာမည့်မေးခွန်းကလာပါသည် AL-THEA ။ သင်၏လိုင်းကိုဖွင့်ထားသည်။ >>> သင်မဖြေပါ။ မည်သည့်အကောင်အထည်ဖော်မှုစနစ်များ AR လူတွေအိမ်မှာနေကြတယ် အဆိုပါ Quantantine နေခြင်း? အိုင်တီ WT ယနေ့ည၏တရားဝင်တာဝန်ဖြစ် ကနေဒါမှလူများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ဖို့ကနေဒါအပြင်ဘက် ၁၄ ရက်အတွင်း။ ငါ ESSENTIAL အလေးပေးချင်တယ် လုပ်သားများအဖြစ်ထုတ်ပယ်နေကြသည် ခိုင်ခံ့သောအကြံဥာဏ်နှင့်အတူပြCASနာ ဝန်ကြီးချုပ် FROM မှ အချို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရုံး နေ့ရက်များ။ အထူးသတ်မှတ်ချက်များ ပြစ်ဒဏ်များနှင့်အာဏာတည်ခြင်း ယန္တရား, ငါတို့ပေးလိမ့်မည် သင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပို ဒီနေ့ >> မေးခွန်း: အိုကေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်အမှန်စင်စစ်ငွေအတွက်ဖြစ်ပါသည် မနော်။ ငါငွေကြောအကြောင်းပြောဆိုချင်တယ် မနေ့ကငွေကောက်ခံ။ မင်းကိုဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသိချင်တယ် ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင် ပါလီမန်အားတောင်းဆိုရန်စိတ်ကူး အခွန်ကောက်ရန်နှင့်ငွေမဖြုန်းရန်ပါဝါများ အဆုံးတိုင်အောင်သူတို့၏အတည်ပြုချက် ဒီနှစ်မှာတောင် 2021 မဟုတ်ပေမယ့်နောက်တစ်ခု နှစ် သင်ထင်ခဲ့တဲ့အရာ ဒီနည်းကိုဆီလျော်စွာတုံ့ပြန်ပါ အကျပ်အတည်းလား >> အဖြေ: ကောင်းပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်း။ AND ငါငါစတင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ် ပြောတာနှင့်အတူငါနှစ်သက်ပါတယ် ကျနော်တို့နောက်ဆုံးညနောက်ဆုံး၌ရရှိသော ဒီမနက် ၆:၀၀ နာရီမှာ အခြားနှင့်အတူတညီတညွတ်တည်းသဘောတူညီချက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့သို့ရှေ့ဆက်ဖို့အစိတ်အပိုင်းများ ကနေဒါနိုင်ငံသားများအတွက်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်။ ဒီနည်းကို AN ဆိုတာငါတို့သိတယ် အထူးအချိန်အတွက်စိန်ခေါ်မှု လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ရန်လိုသည် လျောက်ပတ်စွာ။ ကျနော်တို့ရပြီသောငွေတောင်းခံ System မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့တ သောသူတို့အားရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည် ငါတို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်။ ငါပြောနိုင်ရာနောက်ဆုံးအပတ် သငျသညျအကြှနျုပျကိုကြားကနေဒါမှပြော၏ ငါတို့ဘာပဲလုပ်လုပ်ငါတို့ သူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ယူ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုဤအကူအညီဖြင့်ထောက်ပံ့ပါ အချိန်နှင့်သင်ဘာကိုစိန်ခေါ်သည် မြင်နေကျနော်တို့ငါတို့ရွှေ့အဖြစ် ကျနော်တို့လုပ်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မည် လျင်မြန်စွာရွှေ့နိုင်စွမ်းရှိသည် အခက်အခဲများ၊ အဖြစ်အပျက်များကိုတုံ့ပြန်ရန် မြားစှာသောဖြစ်ရပ်များ လုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲ, ငါတို့ဘာ ကနေဒါတွင်တစ်ခုတည်းသောမမြင်ရပါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသောသော ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စများ ကွဲပြားခြားနားသောအပတ်, သိသိသာသာကွဲပြားခြားနား ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်ပြISနာများမှဖြစ်ရပ်များ မတိုင်မီအပတ်။ ကနေဒါကအမေရိကန်ကိုမျှော်လင့်နေသည် ဒီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပြင်ဆင်နေ စွမ်းရည်ရှိသည်ဖို့အခက်အခဲများ လျင်မြန်စွာရွှေ့ဖို့, ရှိသည်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန် WE အကြောင်းပြချက်တစ်ခု MOMENT ရဲ့အသိပေးစာပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်နေရာတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည် အကြောင်းကြောင့်တစ် ဦး က PROVINCE ထောက်ခံပါတယ် ငါတို့ရှိသည်သောသူတို့၏အခြေအနေ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့စွမ်းရည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သေချာစေရန်ရှာကြသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည် သော။ ဤအရာအချို့ကိုငါတို့သိကြ၏ အာဏာပိုင်များကိုလိုအပ်လိမ့်မည် ထူးခြားတဲ့မြန်နှုန်းတစ်ခု၊ ယနေ့ခေတ်စကားပြောကြားခြင်း US ဖို့လိုအပျသောအကြောင်း ဒီနည်းကိုအသေးစိတ်ဖြင့်သင်တို့ဆီသို့ပြန်သွားပါ နေ့လည်ခင်းအရေးကြီးသောအစီအမံများ။ ကျနော်တို့လုပ်ဖို့အမိန့်များအလုပ်လုပ်နေကြသည် ကျနော်တို့စွမ်းရည်ရှိသည်သေချာအောင် ကနေဒါကာကွယ်ပေးရန်, GET ဒီနည်းကိုမှတဆင့်မိမိကိုယ်ကို ဒီနည်းကိုဒီနည်းကို၏ထွက်လာဒီနည်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုမျှော်လင့်ထားပါသလား အချိန်, သို့သော်တစ် ဦး အတွက်ခေတ္တခဏ ဒီနည်းကိုနှင့်အတူထဲကလာ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနဂိုအတိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့မသိမသာမသိပါ ဖြစ်စေနက်ရှိုင်းသောဖြစ်စေ အခက်အခဲကာလနှင့် ငါတို့ဘာကြောင့်စိတ်အားထက်သန်ရတာလဲ အတူတူအလုပ်လုပ်အတူတူ ကျနော်တို့ဆက်လက်သေချာစေရန်အစိတ်အပိုင်းများ တုံ့ပြန်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည် အလွန်အချိန်ဇယားဖို့နည်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသောအခက်အခဲတိုင်း။ >>> အခန်းသုံးခန်း ဖုန်းများမပြန်မီ။ >> မေးခွန်း: ဂျူလီဗန်ဒူဆန်၊ မစ္စ Frereand, Donald TRUMP အမေရိကန်သမ္မတကြည့်နေသည် AN ဟူသည်အီစတာဆီသို့ 12 ,ပြီ, သူအမေရိကန်လို အလုပ်မှာ E-BACK အလုပ်လုပ်။ ကနေဒါနိုင်ငံသားများမျှော်လင့်နိုင်သည် နောက်ကျော - အလုပ်အတူတူအချိန်တွင်? >>> မေးခွန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂျူလီ။ >>> ကနေဒါရှိကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်နည်းသည် နှင့်အညီအလွန်လှုပ်ရှားပါ သိပ္ပံနှင့်အကွံဉာဏျနှငျ့အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးချွန်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ရုံး။ ကနေဒါနိုင်ငံသားများစွာသည်ယနေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည် အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိ၏ သူတို့ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကနေဒါ။ လုပ်ဆောင်နေကြသူကနေဒါ FOR မရှိသောအလုပ်သို့မဟုတ်နိုင် အိမ်မှအလုပ်လုပ်, ငါတို့လိုအပ်ပါတယ် ဒီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး၏အလေ့အကျင့် ငါတို့ချနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန် THE CURVE သို့မဟုတ်ကာလ၌ DR ။ NJOO နှင့် TAMM ခဲ့ကြပြီ အသုံးပြုခြင်း, CURVE AND ငါ ငါတို့ရှိသမျှသည်တန်ဖိုးထားကြောင်းသိမှတ်ကြလော့ ငြင်းခုံပြီးနောက်ဆက်ဆက် ပါလီမန်နောက်ဆုံးည, WE နောက်ထပ်အိုင်တီတန်ဖိုးထားပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးလာ စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည်ယူ။ , ဒီအကြောင်းကိုသင်နောက်ထပ်ကြားရပြီ၊ အလွန်အရေးပါတိုင်းတာရန် ဒီနည်းကိုမှတဆင့်ကနေဒါထောက်ခံပါတယ် အချိန်, ငါမူကားငါကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ် ကနေဒါကိုပြောပါနဲ့ငါထင် ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရရှိသည် IS ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်ပိုကောင်း ကနေဒါနှင့်အလယ်အလတ်၏ ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးအတွက်ပိုကောင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကိုလေ့ကျင့်ရန် အခု CURVTEN နှင့်ဖို့ ဒီနည်းကိုရနိုင်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလများတွင် ငါလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာစဉ်းစား လုပ်နေကြသိပ္ပံနောက်လိုက် အခြေအနေဘယ်လိုကြည့်ပါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ငါတို့နေသောအရာကိုပါပဲ သွားမယ့်နှင့် DR ဖြစ်နိုင်သည်။ NJOO တစ်ခုခု add ချင်တယ်။ >>> သင်ကြည့်ရှုလျှင်ဆက်ဆက် သိပ္ပံနှင့်အထောက်အထားနှင့် အခြားအတှေ့အကွုံမြား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများ THE COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ, ငါပြောနိုင်ပါတယ် သောနေ့ရက်ကာလနှင့်အပတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းကိုဒီလပေါင်းများစွာ ရောဂါကူးစက်ခံရလိမ့်မယ် အများပြည်သူကျန်းမာရေးမှအထူးသဖြင့် ရှုထောင့် WE N စဉ်းစားပါ အိုင်တီအနည်းငယ်ကျော်သွားဖို့သွားမယ့် နေ့ရက်များသို့မဟုတ် SO ။ >> မေးခွန်း: ဒီအစီအစဉ်တွင် သက်ရောက်မှုဖို့မျက်စိကန်းသောစည်းကမ်းချက်များ သင်၏အစီအစဉ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်၏ THE ကိုမျက်နှာပြင်တက်ဖို့ လူတိုင်းအတွက်နယ်နိမိတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်သမားများပါဝင်သည်? >> အဖြေ: ကောင်းပြီ, ငါငါထင် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြေညာခဲ့ကြတချို့စဉ်းစားပါ အဆင့်မြင့်သောနယ်နိမိတ်တိုင်းတာမှုများ အလွန်အရေးကြီးသောသူတို့သည်။ လိုအပ်သော Quantantine ငါ ထိုသူတွေအကြောင်းပြောချင်တယ် ငါယုံကြည်စိတ်ချရသောနယ်နိမိတ်တိုင်းတာမှုများ ကနေဒါဒီလောက်များတယ်။ ကနေဒါလူမျိုးတွေဟာကြီးပြီးလူတွေပါ စစ်မှန်သောပုဂ္ဂိုလ်လုပ်နေခဲ့ကြပြီ မိမိကိုယ်ကိုသီးခြားထားရန်အနုပညာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကိုလေ့ကျင့်ရန်။ ငါစဉ်းစားတူညီတဲ့အချိန်တွင် အမေရိကန်သွားနှင့်ခံစားရလိမ့်မယ် Mandant Quantantine နှင့်အတူပိုမိုလုံခြုံသည် ကနေဒါတွင်ဝင်သောမည်သူမဆို။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစည်းကမ်းချက်များ၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် သင်ဘာလုပ်သနည်း ဥပမာပေးရမယ် ငါတို့တစ်ခုခု, ကုန်တင်ကားများ အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည် စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်သမား ဦး ဆောင်သူများ အလွန်အမင်း။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှီခိုရသည် ကဲ့သို့သောအဓိကထုတ်ကုန်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံရှိအစားအစာများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးများနှင့် သူတို့အားကုန်ပစ္စည်းများမကြာခဏရောက်လာ ကားလမ်း ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်သည် ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေအကြောင်း သူတို့အားအထူးဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးမှုပါဝင်သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးကိုကုသသည် AND ဤသည်ဝန်ကြီး HAJDU ဘာလဲ ယနေ့ကြောင်းပြောခဲ့သည် quarantine လျှောက်ထားမည်မဟုတ်ပါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများ။ ကျနော်တို့နားလည်မှု, သင်တန်း၏ ကမ္ဘာ့အခြေအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်တွင် FLU သည် ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေနှင့်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်မပြတ် AND BY ဖြစ်ကြသည် တစ်ချိန်လုံးငါဆိုလိုတာပါ နာရီ, ပြန်လည်သုံးသပ်အပိုဆောင်း တိုင်းတာမှုများပါ ၀ င်သည့်တိုင်းတာမှုများ နယ်နိမိတ်။ >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Dylon ။ >> ဒေါက်တာတောင်းပန်ပါတယ်ငါနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် ဝန်ကြီး Miller ကျနော်တို့ကြားနာပါတယ် တစ် ဦး စွမ်းရည်လွှဲပြောင်းအကြောင်း တောင်ပိုင်း, သောဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည် RES ROM RESROM ROM RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES ER RES RES RES RES RES လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ် Tele- ကျန်းမာရေး၏အားပေးမှု IS ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ DOCTORS မှလာရှိပါတယ် ဖြည့်စွက်ရန်နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်တယ် သော - >> Answe ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Dylon AND ထူးချွန်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုအစီရင်ခံပါ အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စများ။ REALTIES ၏နံပါတ်ရှိပါတယ် သောဌာနေအသိုင်းအဝိုင်းရင်ဆိုင်နေရ သူနာပြုများ၏ရှားပါးမှုပါဝင်သည် နှင့်ဆရာဝန်များနှင့်၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ကျွန်တော်နှင့်အတူဆွေးနွေးမှုများ ဌာနေလူမှုဆက်သွယ်ရေး INUIT ကြည့်ရှု METIS နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံများ စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ဆိုတာဘာလဲနှင့်ဘယ်လို အများဆုံးဖြည့်စွက်ရန် လျင်မြန်စွာအပြုအမူ။ ဒီနည်းကိုလက်ရှိဆွေးနွေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ တစ် ဦး မှအဖြေကိုငါမှဆြငျးပါလိမ့်မယ် တိုက်ရိုက်မေးခွန်းတွေအများကြီးပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်စွမ်းရည်ကိုရှာဖွေပါ THE - နှင့်ထောက်ပံ့အမြန် OR သောသတင်းစကားထဲက အများကြီးဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူလာ ငါရသောဘဏ္RESာရေးအရင်းအမြစ်များကိုကျော် ဒီနေ့မင်းစကားပြောပေမယ့်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းမြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာနှင့် ဆရာဝန်ရရှိရန်စွမ်းရည်နှင့် RAPID တွင်ဆိုဒ်ရှိသူနာပြုများ အကောင်းဆုံးလိမ့်မည်တစ်လမ်းအတွက်ဖက်ရှင် သူတို့အားအသိုင်းအဝိုင်းအစေခံ။ ကြွင်းသောအရာ TOM အဖြေကိုငါလွှတ်ပါလိမ့်မယ် မေးခွန်း။ >>> မင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်း, ကြှနျုပျတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည် PHYSICIANS ၏ကွန်ယက်နှင့် သူနာပြုများနှင့်အခြားကျန်းမာရေး သူတို့ကိုအမိန့်မှာရှိတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရှာဖွေမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် စွမ်းရည်သည်ရပ်ရွာလိုအပ်သည် သော။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >> မေးခွန်း: DR အတွက်မေးခွန်း။ NJOO, ငါတို့ဖြစ်ကြောင်း PROINCES ရှိသည် ဂြိုလ်တု LABS သို့ပြောင်းရွှေ့ သူတို့ရဲ့ဗဟို Labs မှ။ အရာအားလုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားရေး Lab ကအတည်ပြု? ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစံနှုန်းကားအဘယ်နည်း ရလဒ်များမှရလဒ်များပြန်သွား နှင့်လက်ရှိနောက်ခံကဘာလဲ ကို AT စမ်းသပ်ခံရဖို့နမူနာ၏ MNL ။ >>> စမ်းသပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ အစပျိုး, အစ ဇန်နဝါရီလအတွင်းအခြေအနေ ဓာတ်ခွဲခန်းအားလုံး ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုပြီးပြီ MIKRO ဇီဝဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း။ ထင်ရှားသောအရာဆိုတာထင်ရှားပါတယ် ငါတို့အကြားကောငျးတဲ့စုဆောင်းမှု အတွင်းခန်းနှင့် Provinces နှင့်နယ်မြေများနှင့် NOW ကကျွန်ုပ်တို့တွင်စည်းမျဉ်းများစွာရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်အရာရှိသည် အကဲဖြတ်အတည်ပြုနိုင်အောင်မရှိပါ သောစမ်းသပ်နိုင်သူရှိဖို့လို အယ်လ်ဘာတာလျှင် MNL တွင်အတည်ပြုသည်။ အွန်တိုရီယို, Quebec, ကြောင်းအတည်ပြု သောအတည်ပြုသည်, အိုင်တီမပါ DMNL သွားရန်ရှိသည်။ ကူညီပေးဖို့ မသေးသောသေးငယ်တဲ့စီရင်စုများ သောစွမ်းရည်နှင့်ဆက်ရှိနေရှိသည် လှည့်ပတ်ပတ်လည်စည်းကမ်းချက်များ၌ တစ်ခါသူတို့အိုင်တီရပြီ တစ်ရက်ထက်နည်းနည်းယူ။ >>> အိုကေ။ မတိုင်မီနောက်ဆုံး FOR ခန်း ဖုန်းကိုပြန်သွား။ ကယ်လီ, REUTERS ။ >> မေးခွန်း: ကျွန်ုပ်၏ပထမမေးခွန်း DR FOR IS NJOO, အိုင်တီခွင့်ပြုသည် အသုံးပြုရန်နှင့်ရောင်းချရန်အစိုးရ မူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှု တုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်။ >>> ငါအံ့သြစရာဒီနည်းကိုလုပ်ပါတယ် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်၎င်းကိုခဲစေနိုင်သည် မသင်မနေရလိုင်စင်များကို? >> ငါ၏အနယ်ပယ်ထဲက ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည် ကနေဒါဒါပေမဲ့သင်ကြည့်နေရင် လိုင်စင်ချထားပေးသောစည်းကမ်းများကျွန်ုပ်မပါ ၀ င်ပါ အဖြေတစ်ခု။ >>> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသိသာသာသိကျွမ်းသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး HAJDU ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတည်ပြုခဲ့သည် အသစ်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းပညာ SO ငါ POSTURE PUTTING သို့စကားပြောနိုင်သည် ၏စည်းကမ်းချက်များရှေ့သို့ လော်ရာချဉ်းကပ်နည်းစမ်းသပ် အထူးလိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ ငါမပြောနိုင်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သော။ >>> တစ် ဦး ကိုရိုက်ကူး Worth ။ [ရယ်သံများ] >> မေးခွန်းမေးခွန်း - ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်သည် ဝန်ကြီး MORNEAU, သင်ကပြောခဲ့ပြီ အဲဒီမှာသွားမယ့် အပိုဆောင်းအကူအညီနှင့်အပိုဆောင်း တိုင်းတာခြင်းလာ။ ငါဘယ်အချိန်မှာသင်သိနိုင်အံ့အံ့သြတယ် ဒီအကူအညီနဲ့ဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင် အိုင်တီ၌ရှိမယ့် Areas ငါတို့မြင်သွားကြသကဲ့သို့ကောင်းစွာ စွမ်းအင် Package? >> အဖြေ: ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ ငါတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသေချာသွားပါ အရေးပေါ်နှင့်အရေးကြီးဆုံး ကျွန်ုပ်တို့ထံမှပထမနှင့်အဘယ်အရာထုတ်ပေးသနည်း ကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီအမြင် အဲဒီမှာကနေဒါဖြစ်လိမ့်မည်, ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကနေဒါအများအပြား ဝင်ငွေမရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖြစ်နိုင်ပြီးသောအတိတ်တွင် လာမည့်နေ့များနှင့်ဘာကြောင့်လဲ ကျနော်တို့သောပထမ ဦး ဆုံးထားပါတယ် THE AGENDA တော်တော်လေးကိုအရာ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြောခဲ့တယ် သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောကျပံ့ဖို့ ဘယ်မှာမှဤအချိန်ကိုဖြတ်ကူးနိုင်သလား WE GET တဲ့အခါငါတို့ယနေ့ဖြစ်ကြသည် ဒီစာစောင်မှတဆင့်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည် Multiple Front တွင်အလုပ်လုပ်ရန် တူညီတဲ့အချိန်။ ကျွန်ုပ်တို့သေချာစေရန်လိုအပ်သည် ဘဏ္FINာရေးလုံလောက်သောပြီ လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီများအတွက်စွမ်းရည် သောအချိန်ဖြစ်နိုင်သမျှဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲ ကျနော်တို့လုပ်ရန်ဘဏ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် ချေးငွေရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာသည် အသေးစားနှင့်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ AND အိုင်တီငါတို့ဖြစ်ရမည်ဆိုလိုတာက တစ်ခုတည်းမဟုတ်အကြောင်းစဉ်းစား ကုမ္ပဏီများ၏အကြေးခွံဒါပေမယ့်လည်း အထူးကဏ္Sများ။ သငျသညျဖော်ပြလိုသောဓာတ်ငွေ့လို ရေနံကဏ္,၊ စွမ်းအင်ကဏ္ IT သောကဏ္ECTတစ်ခုဖြစ်သည် အထူးသဖြင့် Hard HIT ကြောင့် သူတို့နှစ် ဦး စလုံးထုတ်ပေးရှိသည် COVID-19 အခက်အခဲနှင့် ဓာတ်ငွေ့၏နိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့် OPEC ၏ရလာဒ်အဖြစ် OIL ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ဒါငါတို့ AT ရဲ့ဆိုလိုတာကငါတို့သိတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာများ၏ရှေ့မှောက်နီး နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခံရဖို့လိုပါတယ် သောသူတို့သည်အသေးစား AND သောအလယ်အလတ်အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကဏ္အထူးသဖြင့်ဖြစ်ကြသည် အားနည်းချက်။ ဒါပေမဲ့ငါသေချာအောင်ချင်တယ် လူတွေအိုင်တီယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက် ကျနော်တို့ကြည့်ရှုပါကဏ္များ THE မှာလေကြောင်းကဏ္ S IS ဆေးရုံကဏ္ S ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ခြင်း၊ သူတို့အဘို့အပ်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရှိသည်လိမ့်မည်သည့်အခါစည်းကမ်းချက်များ၌ ပြောရန်။ ထဲမှာ, veneer ပြောပြသည် ကျနော်တို့ပေးချင်သောနေ့ရက်များ နားလည်မှုပိုပြည့်စုံသောလူများ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများလိမ့်မည် အကောင်းဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိလျှော့ချထားသည် ဒီအခက်အခဲအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အချိန်။ ဒီနေ့ငါအမေရိကန်ကြားသိတာကိုငါစဉ်းစားမိတယ် IS မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောငါတို့မဟုတ် လူတွေရရှိရန်အာမခံချက် လေးလအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သို့ဖြစ်သော်လည်း၊ သောအရာတစ်ခုခု ကုမ္ပဏီများတိုက်ရိုက်အားသာချက် ကုမ္ပဏီများမလိုအပ်သောကြောင့် သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုခွဲခြားရန် သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ။ သူတို့မပြောနိုင်လောက်အောင်လိုသေးတယ် ဤအချိန်အတွင်းသင်ပေးဆပ်ပါ အဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါတစ် ဦး လူများအားတိုက်ရိုက်လုပ်ခပေးချေမှု၊ သူတို့တတ်နိုင်သမျှအလုပ်ရှင်များ တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအသက်ရှင် ဒီနည်းကို Done, သူတို့ပြန်သွားနိုင်သလား သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့် ကျနော်တို့ဝေဖန်စဉ်းစားပါ အရေးကြီးတယ် >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သုံးယူသွားတော့မည် ပြင်သစ်တွင်မေးခွန်းများ စတင်။ [ပြင်သစ်စကားပြော] >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Mr. MORNEAU၊ ငါကြိုက်လိမ့်မယ် သင်၏ပထမဆုံးအကူအညီကိုနားလည်ပါ ကြေငြာချက်တစ်ပတ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ပြီးပြီသင် WE ပါတယ်ဟုပြောသည် APပြီ6ရက် F ကို AN Online Portal, နောက်ထပ် ၁၀ ရက် သော 17 မှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့သော ANDပြီလနှင့်မစ္စတာ TRUDEAU အိုင်တီကပြောပါတယ် အဘို့အနည်းငယ်သောနေ့ရက်ကာလယူ 27 ရဲ့ SO စစ်ဆေးပါ။ လူတွေဒီပိုက်ဆံတကယ်လိုအပ်နေတယ် ချက်ချင်း AND သင်ကသူတို့ကိုပြောပြနေပါတယ် သင့်ရဲ့အချိန်ကနေ 27 ရက် ပထမ ဦး ဆုံးကြေငြာချက်နှင့်အခါ စစ်ဆေးပါ။ သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော IS လက်ရှိအခြေအနေ။ သင်ဤကဲ့သို့သောတရားမျှတမှုကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း နှောင့်နှေး? >> အဖြေ: သင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်း။ >>> ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည် အခြေအနေကအရေးပေါ် IS ဘာကြောင့်ရိုးရိုးလေးရှာရတာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီပေးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်း AND ငါတို့အဆိုပြုထားသောအရာကိုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စနစ်တစ်ခုရှိတော့မည် သောလူမှကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည် လာမည့်အပတ်။ ကျနော်တို့စတင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ကြ 6ပြီ ၆ ရက်အပတ်ငါမပြောနိုင်ဘူး သင်ဖြစ်သည့်အတွက်အတိအကျသောနေ့စွဲတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုသေချာစေပါ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ငါတို့စနစ်မရှိခဲ့ပါ ဒီနည်းကိုပေါ်ပေါက်နိုင်စွမ်း စိန်ခေါ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်လိုတာလဲ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ယခုတစ်လမ်းရှာဖွေနေ ဒီနည်းကို။ အိုင်တီအရေးတကြီးအရေးကြီးတယ် AND ဒီမှာရှိမယ့်။ ငါနောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ယူလိမ့်မည်ငါ KNOW ငါအိုင်တီခက်ခဲတဲ့ KNOW လူတွေနှင့်သော စစျမှနျသော, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်းကပ်ရန်လိုသည် အခြေအနေများအပြင်အခြေအနေများ ဆိုးရွားလိမ့်မည်။ >>> ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နေ့ရက်များအတွင်း သွားနောက်ထပ်အသေးစိတ်ရှိသည်, သင့်ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် အတိအကျဘယ်လိုနှင့်ဘယ်အချိန်မှာ၏ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ရသည့်သင်တန်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ ချဉ်းကပ်မှုကောင်းရှိသည်။ >>> ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်အလွန်တိကျသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကနိုင်လျှင်ငါသေချာမသိဘူး ဒါကိုဖြေပါ။ သင်အဖြေမရှိလျှင် အဆင်ပြေပေမယ့်အလုပ်ရဲ့ ဒီနည်းကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နေ ရန်ပုံငွေဖြန့်ဝေရန်စနစ် ကနေဒါ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသောအခါ လုပ်ရန်အမှန်တကယ်စတင်လုပ်ဆောင်ပါ စနစ်အလုပ်လုပ်? ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်ကြေငြာချက်ကိုကြားခဲ့ရသည် အပတ်။ ကျနော်တို့ငွေတောင်းခံဖို့မျှော်လင့်ထား မွေးစားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာငါတို့သိချင်တယ် သငျသညျတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့သည် သင်သွားနေသည့်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်မှု? >> အဖြေ: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ WE စတင်ခဲ့သည် - ငါတို့သည်စတင်ခဲ့သည် ချဉ်းကပ်အတိတ်၏အနီးအနား SO SO ပြီးခဲ့သည့်အောက်၌ရှိ၏ ယခုငါတို့သေချာစေရန်လိုသည် အကြေးခွံနှင့်အဆင့်ပေးပါ ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည်ကိုတောင်းဆိုပါ ပိုက်ဆံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည် အဲဒီမှာလူ။ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ >>> နောက်ထပ်ယူရန်သွားတော့မည် ဒီနည်းကိုသွားနှင့်အလုပျဖွစျသညျ လွန်ခဲ့သောအပတ်ထက်ပိုပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်အသုံးဖို့သွားမယ် အများဆုံးထိရောက်မှုစနစ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရသေချာစေရန် သောရန်ပုံငွေရှိပါတယ်။ >>> AND WE ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် တစ် ဦး တည်းရှိသည်ဖို့ဒီအပတ် အားလုံးအတှကျအကြိုးခံစား ဘယ်မှာအခြေအနေမျိုးမှာကနေဒါ သူတို့သည်ဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့် COVID-19 ၏အကြောင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စနစ်တစ်ခုရှိထားသည် ထိရောက်မှုနှင့်လုံလောက်သည် ငါတို့သေချာပါစေအဲဒီမှာ သူတို့အဘို့ငါတှေ့တှေ့ A ကောင်းသောအဖြေနှင့်ကျွန်တော်သွားပါလိမ့်မယ် ထိုအရာကိုသေချာစေရန်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ အဆိုပါစနစ်အိုင်တီအဖြစ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် သင့်၏။ >>> နောက်မေးခွန်း, ကျေးဇူးပြု။ >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Alex ၏ထံမှလာမည့်မေးခွန်း "Toronto ကြယ်ပွင့်။ " >> မေးခွန်း: နောက်လာမည့် ငါဘဏ္THEာရေး၏ခန့်မှန်းအဆင့် ကဏ္Sအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့်အကူအညီ \_ t ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုလုပ်သည် THE ပေးရမည်အထက်လွှတ်တော် BY ဖြတ် အစိုးရမှအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပါဝါ ထဲကပေးပို့ဖို့, အသုံး ဒီနည်းကိုအတွက်နောက်တစ်ခုခြေလှမ်း ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိဘဲ? နောက်ထပ်ငွေတောင်းခံခြင်းမရှိဘဲ? >> အဖြေ: ငါဒီမေးခွန်းကိုထင် ငါ့အတွက်လား >> မေးခွန်း: ဟုတ်သည်။ >>> ငါအရမ်းလုပ်ပါ။ >> အဖြေ: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရာ စွမ်းရည်ရှိဖို့လိုတယ် လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အစိုးရ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းဒီနည်းကိုစဉ်းစားရန်လိုသည် ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှု။ ကြှနျုပျတို့ရရှိသော KNOW ချေးငွေအဘို့အခွင့်အလမ်း အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ LARGE သည်အရေးကြီးသည်။ ကြှနျုပျတို့လုပျဆောငျဖို့အမိန့်ကိုသိ ကျနော်တို့အခွင့်အာဏာရှိဖို့လိုတယ် ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေချာစေရန် ကနေဒါဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် AND ပို့ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်လယ်ယာမြေနိုင် AS ငွေတောင်းခံခရက်ဒစ်ကနေဒါ အိုင်တီယခုတွင်ကြည့်ရှုနေရဲ့ SENATE ထိုသူတို့ကို LIFT ဖို့စေသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်လွှတ်နိုင်သည့်ကန့်သတ်ချက်များ ဘဏ္FINာရေးချေးငွေ၏ပမာဏ အားလုံးဆီသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား သူတို့အားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါလီမန်ကဒီအတည်ပြုခဲ့သည် နံနက် ၆ နာရီမှာသင်သိတဲ့အတိုင်း သောလုပ်ပေးသောငါတို့ကိုခွင့်ပြု သောစွမ်းရည်။ ငါတို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်း ရရန်အတွက်အတူတကွအတူတကွ ဘယ်လိုနိဂုံးချုပ်နိုင်သလဲ WE အိုင်တီရရှိသောအကောင်းဆုံးအာမခံပါ စီးပွားရေး BS မှအမြန်လမ်းအတွက် ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများ။ >> မေးခွန်း: ့တစ် ဦး အဖြစ် နောက်ဆက်တွဲ, ငါဒီနည်းကိုထင်စေခြင်းငှါ ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ်၊ အဆိုပါပြဌာန်းထားသော mandatorju ဤအရာအများကြီးကိုငါတို့သိကြ၏ Spring မှပြန်လာ၏ နံနက်ခင်း, ငါတို့နေရပ်ပြန်မြင်ကြပြီ လတ်တလောနေ့များသို့ပျံသန်းခြင်း။ ဒီနည်းကို RETROACTIVELY နဲ့သက်ဆိုင်လိမ့်မယ် ပြန်လာကြတဲ့လူတွေ မကြာသေးမီကကနေဒါ? ငါလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်ခန့်မှန်း RETROACTIVELY? >> NO ။ ပုံမှန်အထီးကျန်သက်ဆိုင်သည် အားလုံး FOR ညသန်းခေါင်တွင်ယနေ့ည ကနေဒါသို့ခရီးသွားများ။ ပြီးတော့ငါ့ကိုသတိရစေ လူတွေပြောတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ သူတို့အားကနေဒါသို့သူတို့ကို Kiosk ငါတို့မိသားစုနှင့်အတူရှိကြ၏ ခိုင်မာစွာသောမျက်နှာပြင်ကို GET သင့်အားသီးခြားခွဲထားရန်အကြံပြုသည် ၁၄ ရက်အတွင်းသင်ပြီးပြီ သင်၌ရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုပါ သောခိုင်ခံ့သောလက်ခံရရှိခဲ့သည် အကြံပြုချက်များ။ ဒီနေရာမှာပြီးသားဒါ, လူတွေရှိနေပြီးရှင်းလင်း, BEAR ဒီနည်းကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်၊ လိုအပ်တယ် သူတို့ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန် ဒီနည်းကိုလုပ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ WE သန်းခေါင်ယံမှယနေ့ညလိမ့်မည် ၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်ယူခြင်း အားလုံးပြန်လာ - ကောင်းပြီ, အားလုံး ကနေဒါသို့ရောက်ရှိလာသောလူများနှင့် ထိုအခါသူတို့နှင့်အတူလိုက်ကြလိမ့်မည် သူတို့ IndEED ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် ၏အကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန် မွန်းတည့်သောညသန်းခေါင်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုသရုပ်ဖော်ပါစေ, သင်ရပါမည် ပြီးသားအိုင်တီလုပ်နေ။ ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတတ်နိုင်သည့်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးရန် ကနေဒါနှင့်အဆုံးစွန်၏ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပြန်အမ်းငွေသေချာစေရန် ပိုမိုလျင်မြန်စွာလာ။ ကျနော်တို့ CURVTEN ချနိုင်လျှင် WE သာမန်ဘဝသို့ပြန်သွားနိုင်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ။ >>> အိုကေ၊ နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထို့နောက်ဖုန်းနှင့်မေးခွန်း ကျနော်တို့ထဲကနေယူပါလိမ့်မယ် AND အိုင်တီ A ခေါ်ပါ >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ [Y ။ E ရှိပြီးသား ကနေဒါနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လူတွေလိုအပ်တဲ့ရိက္ခာ၊ အသက်ရှင်ရန်နှင့်ပင်ရှင်သန်ရန် ကနေဒါ။ သို့သော် COUE, EA ရှိသည် ဘာကိုသတိထားသင့်သလဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပျက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >> မေးခွန်း။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှ KE ။ သင်ရပါပြီ။ ဖုန်းပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမေးခွန်း ထိုအခါ။ အော်ပရေတာ။ >> ဆက်ဆက်။ နောက်လာမည့်မေးခွန်းသည် Lorn ထံမှဖြစ်သည် နိုင်ငံရေးကနေဥယျာဉ်မှူး။ သွားကြပါ။ သင်၏လိုင်းကိုဖွင့်ထားသည်။ [ပြင်သစ်စကားပြောခြင်း] >> ယူဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်း။ နှစ် ဦး စလုံးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးကဒီအချက်ကိုညွှန်ပြပြီးပြီ မှာကန့်သတ်ချက်များကြည့်ပါ ကနေဒါ / အမေရိကန်နယ်နိမိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် နောက်ထပ်မှီခိုပင်ဆန့် ပြOFနာအရေအတွက်ပေါ်ပေါက် ထဲက, အထဲက ဝန်ကြီးလည်းယုံ အထူးဖော်ပြခဲ့သောလုပ်သားများ သော။ ဘာကိုသတိရနိုင်မလဲ ယူ, အဘယျသို့ယူနိုငျသညျ ထို့ထက်ပိုမိုသောအစိုးရအတွက် မကြာခင်ကဘာတွေဖြစ်နေသလဲတင်းကျပ် နယ်စပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် သန္ဓေတားခြင်းအစီအစဉ် TH THE နေ့လည်ခင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ST နယ်စပ်ဒေသနဲ့တူလား။ >> ကောင်းပြီ, ငါတို့မြင်ပြီထင်ပါတယ် ယနေ့အချို့သောအဆက်အသွယ် ဝန်ကြီးချုပ်စီစဉ် လာရည်ညွှန်းခဲ့သည် ၏တရားဝင်, အုပ်ချုပ်ရေး Quantantine ကနေဒါသို့ရောက်သောသူတိုင်းတစ် ဦး Fရာမနောက်ထပ်ခြေလှမ်း။ အရေးကြီးသောအဆင့်နှင့်အိုင်တီ ကနေဒါအားလုံးခံစားသင့်တယ် အများကြီးပိုလုံခြုံ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးအပတ်များစွာဂရုစိုက်သည် အလွန်အရေးပါတိုင်းတာခြင်း ငါတို့နှင့်အတူနယ်နိမိတ်သို့ကြွလာသောအခါ အမေရိကန်ကဒီတိုင်းတာ ကျနော်တို့အများကြီးယူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်အိမ်နီးချင်းများ၊ ဂရုတစိုက်ရှိသောတိုင်းတာမှုများ သောထိုသေချာစေရန်ဒီဇိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်, အဓိကကုန်သွယ်ရေး ဆက်နိုင် သငျသညျယနေ့ငါတို့အားလုံးကိုကြားရပြီ ဖို့တကယ်ကိုအလေးပေး ငါတို့စားပွဲပေါ်ကအစားအစာ၊ ငါတို့ရဲ့အငွေ့အသက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဆိုင်များတွင်အမှန်တကယ်ဆေးများရှိသည် သောဖြတ်ကျော်မှီခို ကုန်သွယ်ရေး AND ငါယူလို WHO က TRUCKERS ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်သို့နှင့်ကားမောင်းနေကြသည် နေ့တိုင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး သူတို့သည်အရေးကြီးသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည် အမှန်တကယ် WETO သော ရှင်သန်ရပ်တည်။ ကျနော်တို့စဉ်းစား, သင်တန်း၏ ထို့အပြင်အကြောင်းဂရုတစိုက် တိုင်းတာမှုများ။ သငျသညျသူ၌အကြှနျုပျတို့ကိုမြင်မွငျ ရုံအတိတ်ဆယ်ရက်နေ့၏သင်တန်း တစ် ဦး ကိုမှန်ကန်ခြေလှမ်းများယူပါ နယ်စပ်ဒေသတွင်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ တာဝန်ဝတ္တရားပါဝင်သည် Quantantine ။ ငါတို့တစ်စုံတစ်ခု အစဉ်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကျနော်တို့ပါလိမ့်မယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆက်လက်။ ငါသည်လည်းပြောချင်တယ် ဖြတ်ကျော် - နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သွားတယ် သိသိသာသာလျော့ကျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလူကိုမြင်ကြပြီ ထိုနှစ် ဦး စလုံးတုံ့ပြန် ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လည်း လူတွေထားတဲ့ထုတ်လွှင့်သတင်းစကား သူတို့၏ထံမှကြားနေကြသည် နှစ် ဦး စလုံးကနေဒါအစိုးရများနှင့် အမေရိကန်နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်သော MESSAGE သည်ယခုအချိန်ဖြစ်သည် အိမ်မှာတည်းခိုရန်ယခုအချိန်သည်အချိန်ဖြစ်သည် လေ့ကျင့်ခန်းရူပဗေဒအကွာအဝေး ငါတို့သည်မြင်နေကြသည်ကားအဘယ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်မှာငါတို့အဆက်အသွယ်ပေါ်မှာ နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ >> နှင့်တစ် ဦး ကနောက်ဆက်တွဲ UP အဖြစ်ဝန်ကြီး ဖရီးယား, သင်နိုင်လျှင်အံ့သြ ကဲ့သို့သောအရာကိုရောင်ပြန်ဟပ် ဤခေါ်ဆိုမှု၏ဤအမှုအရာလုပ်ပါ သငျသညျဖော်ပြရန်ခဲ့ကြပြီ နားမလည် IN နားလည်မှု နယ်မြေနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရကိုပေး၏ ဖြစ်တည်မှုသမိုင်းကြောင်းရှိသည် - ဖွင့်သောစီမံကိန်း ကွဲပြားခြားနားမှလာလူတွေ ကဲ့သို့သောနေရာများ ဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုပါစေ တချို့ရဲ့စုစုပေါင်း 180 လေးစားပါတယ်? >> IHEY ကို AT ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရ၏အဓိကပြနာများ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ နည်းလမ်း။ ငါတို့အစိုးရစုစုပေါင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းမဲ့အာဏာကိုနားလည်သည် ဦး စားပေးကျန်းမာရေးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် နှင့်ကနေဒါလုံခြုံမှု။ သောအရာ၏, ဖက်ဒရယ် အစိုးရ, Provinci အစိုးရများ၊ မြူနီစီပယ်ခေါင်းဆောင်များ၊ ဌာနေ ဦး ဆောင်သူများ၊ ကနေဒါ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ထူးခြားသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသည်ကျောင်းတွင်မဟုတ်ပါ။ အလွန်များပြားတဲ့လူတွေ အိမ်မှအလုပ်လုပ်။ လူတွေများများအလုပ်မလုပ်ကြဘူး အားလုံး။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး US ကိုလေ့ကျင့်နေကြသည် လူမှုရေးအကွာအဝေး။ ငါအားလုံးငါတို့လေ့ကျင့်နေကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ် ကြီးမားသောနည်းလမ်းများ၌အိုင်တီ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ဤသူတို့သည်ထူးခြားသောဖြစ်ကြသည် အချိန်။ ငါအားလုံး GET TT ငါတို့သိတယ် သော။ AND သူတို့အားထူးခြားသောအပြောင်းအလဲများ လုံးဝ AN လိုအပ်ပါတယ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သက်ရောက်ဖူး ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ နယ်နိမိတ်။ ဒီနည်းကို SHIFT ၏မည်သည့်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရ၏အမြင်များ။ ဒီနည်းကိုအကြောင်းအများကြီးယူ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့ခြေလှမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှု ကနေဒါ။ ၁၄ ရက်ကြာမြင့်မားမှုအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည် ထိုလမ်းပေါ်မှာနောက်ထပ်ခြေလှမ်း, ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်အမြဲကျန်းမာရေးကိုထားပါလိမ့်မယ် ကနေဒါ၏ပထမနှင့်လုံခြုံမှု AND ငါငါတို့ရှိသမျှသည်တှေးအလွန်ခံစားရတယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်မှု ဤသည်ကိုမှန်ကန်သောညွှန်ကြားချက်သည်။ >> Mercy BEAUCOUP ။ >> (Tto Voice: အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့ဖိအားကိုပျက်စေသော ဒီနေ့စည်းဝေးပွဲ။ >> ပေတရု: တစ်ဖန်ပေတရု နှင့်အတူစောင့်ကြည့်ခြင်းမိတ်ဆက် မင်း အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်လာ ဖက်ဒရယ်၏ update ကိုမှ ဒီနေ့ဝန်ကြီးများ။ သူတို့ကိုတစ် ဦး ကနားထောင်ခဲ့သည် နံပါတ်
ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးများနှင့်ကျန်းမာရေးအရာရှိများသည် COVID-19 update ကို - မတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၀
< start="190.854" dur="5.238"> ငါတို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့လိုတယ် >
< start="193.257" dur="4.337"> ခရီးသွား - တင်သွင်းမှု၏သက်ရောက်မှု >
< start="195.759" dur="3.137"> ပြ.နာများ။ >
< start="196.226" dur="3.637"> သူတို့အားလုံးအဘို့ >
< start="197.728" dur="3.803"> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ခြင်း၊ ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိတယ် >
< start="199.029" dur="5.272"> ခက်ခဲပြီး WE ငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ >
< start="199.997" dur="5.538"> သင့်ရဲ့ပူဇော်ရာယဇ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="201.665" dur="4.938"> အခြားသူများကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ >
< start="204.434" dur="4.271"> [ပြင်သစ်စကားပြော] >
< start="205.669" dur="4.805"> >> (ဘာသာပြန်၏အသံ) >
< start="206.737" dur="7.04"> သင်လုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်လက္ခဏာမျှမရှိစေရ >
< start="208.872" dur="7.474"> အပြင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့အပြင် GO >
< start="210.607" dur="8.775"> မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအနည်းဆုံးသင်နေထိုင်ပါ >
< start="213.91" dur="7.374"> အခြားသူများထံမှနှစ် ဦး ကိုမီတာ။ >
< start="216.48" dur="6.873"> အစဉ်အမြဲအဖြစ်, ထိတွေ့ထိမိပါဘူး >
< start="219.516" dur="6.273"> မျက်နှာပြင်တံခါးလက်ကိုင်ကဲ့သို့၎င်း >
< start="221.418" dur="7.641"> ပြီးနောက်လက်များကိုဂရုတစိုက်ဆေးကြောပါ >
< start="223.52" dur="7.674"> သင်အိမ်သို့နှင့်အဖြစ်မကြာမီထွက်ခွာမည် >
< start="225.923" dur="6.539"> သင်သည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသည်။ >
< start="229.193" dur="6.239"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့သူတွေ >
< start="231.328" dur="6.039"> ရောဂါလက္ခဏာများ, မည်သို့မည်ပုံ >
< start="232.596" dur="7.675"> ရာမသူတို့, သင်နေရမည် >
< start="235.566" dur="8.841"> အားလုံးအချိန်အိမ်မှာ။ >
< start="237.501" dur="9.476"> အွန်လိုင်းကိရိယာများကသင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည် >
< start="240.404" dur="7.907"> အကယ်၍ သင်သာလိုအပ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ပါ >
< start="244.541" dur="8.675"> အကဲဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည် >
< start="247.111" dur="8.341"> တစ် ဦး က COVID-19 စမ်းသပ်မှု။ >
< start="248.445" dur="8.676"> >>> AT ဆိုတာဘာလဲကြည့်ပါ >
< start="253.35" dur="5.505"> CANADA.ca - သွားနိုင်ပြီ >
< start="255.586" dur="6.439"> အပြင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့ပြင်ပ >
< start="257.287" dur="7.407"> သင်နှစ်မီတာအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည် >
< start="258.989" dur="6.306"> အခြားအချိန်များအားလုံးထံမှ, သို့သော် AS >
< start="262.159" dur="4.304"> ဆက်သွယ်မှုကိုအစဉ်မပြတ်ရှောင်ပါ >
< start="264.828" dur="3.47"> လက်နှင့်တူန်ဆောင်မှုများ >
< start="265.428" dur="4.505"> လက်ကိုင်နှင့်သင့်လက်များကိုဆေးကြောပါ >
< start="266.597" dur="5.405"> သင်အိမ်နှင့် AS မထွက်ခွာမီ >
< start="268.432" dur="5.872"> သင်ပြန်လာပြီမကြာခင်မှာပဲ။ >
< start="270.067" dur="6.94"> >>> သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောသူတို့အဘို့ >
< start="272.136" dur="7.073"> ရောဂါသည်မည်သည့်အရာကိုပျော့ပြောင်းစေသနည်း >
< start="274.437" dur="6.74"> သင်မှတ်မိရမယ် >
< start="277.14" dur="5.44"> အားလုံးအချိန်အိမ်မှာရှိနေဆဲ။ >
< start="279.376" dur="3.904"> ကူညီရန်အတွက်အွန်လိုင်းကိရိယာများရှိပါသည် >
< start="281.311" dur="3.503"> သင်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ >
< start="282.713" dur="4.304"> နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှု >
< start="283.414" dur="4.471"> COVID-19 သည်။ >
< start="284.948" dur="4.337"> >>> ONE ON ထဲကစစ်ဆေးပါ >
< start="287.151" dur="3.402"> CANADA.ca ။ >
< start="288.018" dur="4.704"> >>> အခုအချိန်မှာအလွန်ထူးခြားသည် >
< start="289.419" dur="5.873"> ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးသောအချိန် >
< start="290.687" dur="7.374"> မှန်အောင်လုပ်။ >
< start="292.856" dur="5.672"> ကျနော်တို့ဒီနည်းကို DONE GET လိုအပ်ပါတယ်ရဲ့ >
< start="295.425" dur="5.038"> ကျေးဇူးတင်စကားကိုကုလားအုတ်စီပါ။ >
< start="298.195" dur="3.236"> မာစီ။ >
< start="298.662" dur="4.371"> >>> အိုကေ၊ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ >
< start="300.63" dur="4.605"> DR ။ NJOO ။ >
< start="301.565" dur="4.237"> အခုတော့ဝန်ကြီးထံမှနားထောင်ပါလိမ့်မယ် >
< start="303.167" dur="3.703"> ဌာနေဝန်ဆောင်မှုများအမှတ်အသား၏ >
< start="305.369" dur="2.035"> Miller ။ >
< start="305.969" dur="2.636"> မာကု >
< start="307.538" dur="3.002"> [ပြင်သစ်စကားပြော] >
< start="308.739" dur="3.569"> >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): ကောင်း >
< start="309.807" dur="3.703"> နေ့လည်ပိုင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="310.674" dur="5.238"> >>> ပထမ ဦး ဆုံး Nation INUIT AND >
< start="312.442" dur="4.404"> မက်ဒီအက်စ်အများစုဟာ >
< start="313.644" dur="5.738"> ကနေဒါရှိအားနည်းသောအုပ်စုများ၊ >
< start="316.046" dur="4.404"> အထူးသဖြင့်ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း >
< start="316.98" dur="4.204"> ဝေးဝေး FLY-IN >
< start="319.516" dur="5.405"> နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းများ >
< start="320.584" dur="6.306"> ထူးခြားအားနည်းချက်။ >
< start="321.318" dur="6.606"> AND ငါငါ့အ REITERATE ချင်တယ် >
< start="325.055" dur="3.87"> အားဖြင့်မျှဝေတစ် ဦး တည်း ဦး စားပေး >
< start="327.057" dur="3.603"> ကနေဒါအစိုးရသည် >
< start="328.058" dur="3.437"> ဌာနေကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှု >
< start="329.059" dur="3.536"> လူတွေ >
< start="330.794" dur="2.869"> [ပြင်သစ်စကားပြော] >
< start="331.628" dur="5.038"> >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): WE >
< start="332.729" dur="4.471"> COVID-19 ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ >
< start="333.797" dur="4.772"> ကနေဒါရှိအခြေအနေများတိုးတက်နေသည် >
< start="336.8" dur="4.271"> လျင်မြန်စွာ။ >
< start="337.334" dur="5.038"> >> COVID-19 စီးပွားရေး >
< start="338.702" dur="7.307"> BY ကြေညာခဲ့သည်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ် >
< start="341.238" dur="6.773"> ကာလအပိုင်းအခြားနောက်ဆုံးအပတ် >
< start="342.506" dur="7.241"> ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည်စီမံပေးနေသည် >
< start="346.176" dur="5.939"> $ 305 သန်းတိုက်ရိုက် TLOI ပထမ >
< start="348.145" dur="5.939"> NATIONAL INUIT AND METIS >
< start="349.88" dur="5.905"> သူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ >
< start="352.249" dur="5.972"> လုပ်ဖို့အမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် >
< start="354.218" dur="5.771"> သူတို့ဘာကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုသလဲ >
< start="355.919" dur="6.606"> အကျပ်အတည်းကာလ၌လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ >
< start="358.388" dur="9.677"> ရန်ပုံငွေခွဲဝေသတ်မှတ်ချက် >
< start="360.123" dur="9.076"> ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံများနှင့်အတူဆွေးနွေးမှုများ >
< start="362.659" dur="8.842"> INUIT AND - ဦး စားပေးကာလ >
< start="368.198" dur="4.305"> ဒီနည်းကိုကူးစက်ရောဂါ။ >
< start="369.332" dur="4.038"> >>> ဒီရန်ပုံငွေစီးဆင်းလိမ့်မည် >
< start="371.635" dur="4.137"> Indigenous တိုက်ရိုက် >
< start="372.636" dur="4.437"> အများဆုံးနှင့်ဆက်သွယ်သောရပ်ရွာများ >
< start="373.503" dur="4.104"> လိုက်လျောညီထွေရှိအောင်ကူညီရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် >
< start="375.906" dur="6.339"> ဒေသတွင်းလိပ်စာတုံ့ပြန်မှု >
< start="377.207" dur="5.805"> လိုအပ်ချက်များ။ >
< start="377.774" dur="8.075"> WE ဒီနည်းကိုမြန်ဆန်စွာနဲ့လုပ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="382.379" dur="6.172"> အရေးတကြီးသဘောထား။ >
< start="383.146" dur="8.075"> >>> ငါဒီနည်းကိုအလေးပေးချင်တယ် >
< start="385.982" dur="7.708"> ဘဏ္Nာရေးသူနာပြုတစ် ဦး တည်းသာ >
< start="388.685" dur="8.608"> WE ပထမ ဦး ဆုံးအဘို့အစဉ်းစားနေကြသည် >
< start="391.355" dur="7.74"> နိုင်ငံများ, INUIT နှင့် METIS ။ >
< start="393.857" dur="7.807"> >> ဒီနည်းကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည် >
< start="397.427" dur="6.373"> သက်ကြီးရွယ်အိုများ, အစားအစာထောက်ခံမှု >
< start="399.229" dur="5.539"> ပံ့ပိုးမှု, ကလေးများအတွက်အကူအညီနှင့် >
< start="401.798" dur="8.709"> နေသောသူတို့ကိုကူညီပါ >
< start="403.934" dur="8.842"> အလုပ်လက်မဲ့ >
< start="404.901" dur="9.676"> စိတ်ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့သို့မဟုတ်ပင် >
< start="410.641" dur="5.705"> အရေးပေါ်ကြားဝင်ဝန်ဆောင်မှု။ >
< start="412.91" dur="5.771"> ့ဖွင့်။ >
< start="414.711" dur="5.439"> >>> ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီရလိမ့်မည် >
< start="416.48" dur="5.071"> အခြေစိုက်စခန်းပမာဏ >
< start="418.815" dur="4.304"> လူ ဦး ရေ, အဝေးမှနှင့် >
< start="420.317" dur="4.637"> ရပ်ရွာကောင်းကောင်း။ >
< start="421.685" dur="5.171"> INUIT ဆိပ်ကမ်းသည် ၄၅ သန်း >
< start="423.253" dur="4.704"> တစ်ခုချင်းစီကိုစီးဆင်းလိမ့်မည် >
< start="425.121" dur="5.606"> လေး INUIT မြေယာတောင်းဆိုမှု >
< start="426.99" dur="6.072"> AN မှတဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ >
< start="428.091" dur="7.107"> အိုင်တီကဆုံးဖြတ်ခွဲဝေ AND >
< start="430.861" dur="9.042"> မက်ဒီစ်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး ဆောင်မှု >
< start="433.263" dur="7.24"> အဲဒီမှာသန်း 30 သန်းရှိလိမ့်မည် >
< start="435.332" dur="6.64"> အစိုးရတစ်ခုစီမှစီးဆင်းလိမ့်မည် >
< start="440.037" dur="3.403"> အဖွဲ့ဝင်။ >
< start="440.637" dur="7.24"> အနားယူ AT ကိုဒေသသို့သွား >
< start="442.138" dur="6.741"> သူတို့ကိုကူညီပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်း >
< start="443.573" dur="5.74"> ဝေးနေတဲ့ WHO က >
< start="448.011" dur="2.903"> [ပြင်သစ်စကားပြော] >
< start="449.012" dur="2.803"> >> (အသံ) >
< start="449.446" dur="5.372"> FU သည်ရန်ပုံငွေကိုထပ်ဆောင်းထားသည် >
< start="451.047" dur="6.14"> ပြီးသားကြေငြာခဲ့သည် >
< start="452.048" dur="8.041"> အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အိုင်တီကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် >
< start="454.951" dur="6.407"> ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြADနာများကိုဖြေရှင်းရန် >
< start="457.321" dur="4.504"> ဥပမာအားဖြင့်ပေး FOR ဥပမာ >
< start="460.223" dur="2.57"> ကိရိယာနှင့်အရေးပေါ်စီစဉ်ခြင်း >
< start="461.491" dur="2.536"> အထောက်အပံ့။ >
< start="461.958" dur="4.805"> >>> BY ယူအတိုင်းအတာ >
< start="462.926" dur="5.306"> သူတို့ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသိုင်းအဝိုင်း >
< start="464.16" dur="5.339"> သူတို့ပိတ်ပစ်မှလူ ဦး ရေ >
< start="466.896" dur="3.938"> ဒေသခံကြေညာရန်နယ်နိမိတ် >
< start="468.365" dur="4.004"> အရေးပေါ်အခြေအနေ။ >
< start="469.633" dur="3.736"> ငါသူတို့အသိအမှတ်ပြုချင်တယ် >
< start="470.968" dur="4.237"> အရေးကြီးသောအလုပ်နှင့်ခွန်အား >
< start="472.502" dur="3.403"> သူတို့ပြပေမယ့်ငါ့ကိုကြကုန်အံ့ >
< start="473.536" dur="3.737"> ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ဒီနည်းကို IS >
< start="475.339" dur="3.669"> စတင်။ >
< start="476.039" dur="4.504"> နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြစ်လိမ့်မည်ငါတို့သိကြ၏ >
< start="477.407" dur="3.837"> လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ငါတို့လုပ်လိမ့်မည် >
< start="479.142" dur="4.337"> ဌာနေလူထုမပါ ၀ င်ပါ >
< start="480.677" dur="6.139"> နောက်မှာချန်ခဲ့သည်။ >
< start="481.378" dur="7.441"> ငါတို့အစိုးရဒီမှာ >
< start="483.613" dur="6.073"> ဤအချိန်ကာလအတွင်းသင်ကူညီပေးပါ။ >
< start="486.983" dur="5.105"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="488.952" dur="5.839"> >>> အိုကေ။ >
< start="489.82" dur="8.641"> သငျသညျအများကြီး, မာကုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="492.222" dur="7.34"> အခုဆိုရင်ငါတို့ထံမှနားထောင်ကြလိမ့်မည် >
< start="494.925" dur="8.574"> အသိုင်းအဝိုင်းဝန်ကြီးနှင့် >
< start="498.595" dur="5.472"> အမွေဆက်ခံသူမစ္စတာစတီဗင် >
< start="499.696" dur="6.107"> GUILBEAULT, ကြမ်းပြင်သည်သင်၏ဥစ္စာဖြစ်၏။ >
< start="503.633" dur="4.204"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="504.201" dur="5.138"> >> ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါတို့ထင် >
< start="505.936" dur="5.004"> အချိန်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲ >
< start="507.971" dur="4.204"> လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသသည် >
< start="509.506" dur="4.037"> ကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုပြီးဂရုစိုက်တယ် >
< start="511.074" dur="5.238"> အခြားတစ်ခု၏။ >
< start="512.309" dur="6.806"> ဒီနည်းကရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် >
< start="513.676" dur="6.707"> လျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်နေသည်။ >
< start="516.446" dur="5.472"> ကဏ္ S အားလုံးပါ ၀ င်ရမယ် >
< start="519.315" dur="3.671"> အကောင့်ထဲသို့ယူ။ >
< start="520.517" dur="4.738"> အဲဒီမှာ WHO ကဂျာနယ်လစ်ရှိပါတယ် >
< start="522.052" dur="4.437"> ပုံမှန်အခြေအနေနှင့် >
< start="523.12" dur="6.072"> အကျပ်အတည်းတွင်အထူးသဖြင့် >
< start="525.388" dur="5.172"> အခြေအနေများသည်အတွေ့အကြုံရှိသည် >
< start="526.623" dur="6.006"> သူတို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအခက်အခဲများ >
< start="529.326" dur="5.572"> ဆုံးရှုံးမှုအေဒီဝင်ငွေဆုံးရှုံး။ >
< start="530.694" dur="5.705"> >> နိုင်အောင်ကနေဒါနိုင်သလား >
< start="532.762" dur="4.938"> ကောင်းပြီအရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ >
< start="535.031" dur="3.57"> COVID-19 သို့။ >
< start="536.533" dur="3.57"> ဤသည်အစိုးရ၏ဘာကြောင့်လဲ >
< start="537.834" dur="4.805"> ကနေဒါချက်ချင်းလက်ငင်းယူ >
< start="538.735" dur="4.938"> ဒီတော့ကနေဒါဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် >
< start="540.237" dur="4.07"> မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ >
< start="542.772" dur="2.236"> သတင်း၏အရင်းအမြစ်များ။ >
< start="544.441" dur="3.636"> [စကားပြော FRENC] >
< start="545.142" dur="5.371"> >> (Trato ၏အသံ >
< start="545.642" dur="6.573"> ငါကြေညာဖို့ဝမ်းသာပါတယ် >
< start="548.211" dur="6.406"> ငါ၏အကောလိပ်၏ BEHALF >
< start="550.647" dur="7.074"> ကနေဒါနိုင်ငံအခွန်ဝန်ကြီးဌာန >
< start="552.348" dur="6.607"> လွတ်လပ်သောကော်မတီကသော >
< start="554.751" dur="5.372"> သော CRA နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေတယ် >
< start="557.854" dur="3.336"> အကောင်အထည်ဖော်ရေးအခွန်သွားနေသည် >
< start="559.089" dur="5.238"> INOUNCE တိုင်းတာမှုများ >
< start="560.257" dur="6.472"> 2019 ဘတ်ဂျက်။ >
< start="561.324" dur="7.574"> သူတို့ကယခုတရားဝင်, ပို။ ဖြစ်ကြသည် >
< start="564.461" dur="6.473"> သန်း ၃၀ ကိုအခြေခံသည် >
< start="566.896" dur="7.441"> တစ် ဦး ၌ငါတို့အစိုးရအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည် >
< start="569.032" dur="6.64"> အမျိုးသားရေးအသိပညာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး >
< start="571.067" dur="7.008"> COVID-19 အကြောင်း, ငါတို့ - ဒီနည်းကိုလိမ့်မည် >
< start="574.471" dur="4.737"> ကနေဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည် >
< start="575.806" dur="5.872"> မီဒီယာဆိုတာအိုင်တီရဲ့တီဗီ၊ သတင်းစာပဲဖြစ်ဖြစ် >
< start="578.208" dur="6.806"> ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်း။ >
< start="579.375" dur="7.342"> >>> ဒါကြောင့်ဖွင့် >
< start="581.812" dur="5.639"> ဒီနည်းကိုကမ်ပိန်းအားဖြင့် Generated >
< start="585.148" dur="3.503"> ဘဝအသစ်ကိုအသက်သွင်းနိုင်သည် >
< start="586.85" dur="4.371"> မီဒီယာ, ပြည်သူ့ဝန်ကြီး >
< start="587.584" dur="4.637"> အလုပ်လုပ်ပုံ FILE SO အလုပ်လုပ်သည် >
< start="588.785" dur="4.037"> ဒီနည်းကိုလျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သလား။ >
< start="591.454" dur="3.437"> >>> သတင်းအချက်အလက်များ AT စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး >
< start="592.355" dur="5.038"> TI M ကဒီနည်းကိုပွိုင့် >
< start="592.955" dur="5.773"> ကနေဒါ၏အစပြု >
< start="595.025" dur="5.705"> ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့, တော်ဝင် >
< start="597.56" dur="4.639"> မိသားစုရူပဗေဒကောလိပ်နှင့် >
< start="598.928" dur="3.871"> မိသားစုရူပဗေဒ၏ကောလိပ် >
< start="600.864" dur="3.837"> ကနေညှိနှိုင်းကနေဒါ၏ >
< start="602.332" dur="4.004"> ကနေဒါပြည်သူ့ကျန်းမာရေး >
< start="602.933" dur="4.604"> ASSOCIATION နှင့်ထောက်ခံပါတယ် >
< start="604.835" dur="3.836"> စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်နှင့်ကြော်ငြာ >
< start="606.47" dur="4.237"> OR အေဂျင်စီ။ >
< start="607.671" dur="4.404"> >>> သူတို့ပြင်ဆင်နေကြသည် >
< start="608.805" dur="4.971"> အများပြည်သူကျန်းမာရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် >
< start="610.907" dur="3.336"> ကနေဒါနှင့်အတူမိတ်ဖက် >
< start="612.208" dur="3.337"> လေကြောင်းရန်မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း >
< start="613.91" dur="3.671"> အိုင်တီ >
< start="614.377" dur="4.972"> >>> ဤသည်ကိုဘယ်လိုသတိပေးသည် >
< start="615.679" dur="5.104"> ကနေဒါမှစုရုံးနိုင် >
< start="617.714" dur="6.273"> တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူညီရိုင်းပင်းပါ။ >
< start="619.482" dur="6.974"> နောက်ဆုံးတွင်ချက်ချင်းဖြစ်သောကြောင့် >
< start="620.984" dur="9.143"> ငွေရရှိမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည် >
< start="624.121" dur="7.073"> အယ်ဒီတာများနှင့်ထုတ်ဝေသူများ >
< start="626.59" dur="7.64"> ရိုးရှင်းစွာနေရာချခြင်း >
< start="630.26" dur="7.04"> ကနေဒါစာအုပ်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ် >
< start="631.361" dur="7.04"> ရန်ပုံငွေနှင့်ကနေဒါကာလ >
< start="634.364" dur="6.339"> အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆိုလိုသည်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ >
< start="637.434" dur="4.604"> ဤအစီအစဉ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် >
< start="640.837" dur="4.572"> ဆန့်ကျင်သောအပတ်အနည်းငယ်အနည်းငယ် >
< start="642.172" dur="4.571"> နောက်လအနည်းငယ် \_ t >
< start="643.406" dur="5.405"> ဤအတိုင်းအတာကိုကောင်းစွာယူပါ >
< start="645.542" dur="4.804"> ကနေဒါအာမခံနိုင်သေချာပါစေ >
< start="646.877" dur="4.804"> ဆက်စပ်အချက်အလက်အချက်အလက်များ >
< start="648.945" dur="3.77"> COVID-19 နှင့်မီဒီယာကိုထောက်ပံ့သည် >
< start="650.48" dur="2.836"> နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ။ >
< start="651.815" dur="2.702"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="652.849" dur="2.736"> မာစီ။ >
< start="653.45" dur="3.403"> >>> အိုကေမာစီ၊ Stephen ။ >
< start="654.651" dur="2.97"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Stephen ။ >
< start="655.718" dur="4.138"> ယခုငါတို့ငါတို့ထံမှနားထောင်ပါလိမ့်မယ် >
< start="656.986" dur="3.771"> ဘဏ္MINာရေးဝန်ကြီး။ >
< start="657.754" dur="3.337"> >>> ဘီလ်, ပေးပါ။ >
< start="659.99" dur="5.271"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="661.224" dur="10.677"> [အသံမရှိ] >
< start="671.368" dur="4.303"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="672.035" dur="4.905"> အားလုံးပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="673.203" dur="5.171"> သငျသညျသောအပေါငျးတို့သရန် >
< start="675.805" dur="3.937"> နောက်ဆုံးညအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ >
< start="677.106" dur="4.204"> တညီတညွတ်တည်းသဘောတူညီချက်ရယူပါ >
< start="678.508" dur="5.005"> ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေ့ပြောင်းခွင့်ပြုသည့်ဥပဒေ >
< start="679.876" dur="5.071"> WE တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူ >
< start="681.444" dur="5.673"> ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့ရွေ့ရမည်ကိုသိထားပါ >
< start="683.647" dur="4.971"> ကာလအတွင်းကနေဒါထောက်ခံမှုနှင့်အတူ >
< start="685.081" dur="6.207"> ထူးခြားတဲ့အချိန်။ >
< start="687.25" dur="5.205"> သငျသညျအကြှနျုပျကိုကြားသကဲ့သို့ငါ >
< start="688.752" dur="5.405"> အထူးစိန်ခေါ်မှုများ >
< start="691.421" dur="4.17"> လိုအပ်သည် >
< start="692.589" dur="5.605"> တိုင်းတာခြင်းနှင့်မည်သို့ Indeed >
< start="694.291" dur="5.271"> ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေပြီလဲ >
< start="695.725" dur="5.072"> ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ >
< start="698.328" dur="3.67"> ပံ့ပိုးမှုအတွက်ရှေ့ဆက်ချခြင်း >
< start="699.796" dur="3.436"> ကနေဒါ, ငါတို့အကျိုးကျေးဇူးများ >
< start="700.997" dur="4.237"> ပံ့ပိုးမှုအတွက်ရှေ့ဆက်ချခြင်း >
< start="702.132" dur="4.404"> စီးပွားရေးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ >
< start="703.399" dur="5.205"> ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့ရှေ့ဆက်ထားပါတယ် >
< start="705.368" dur="4.204"> ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး။ >
< start="706.67" dur="5.806"> ဒါနဲ့ငါလမ်းလျှောက်ဖို့လိုပါတယ် >
< start="708.738" dur="6.139"> ငါတို့ဘယ်မှာလဲ။ >
< start="709.706" dur="7.574"> ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်သဘောပေါက်ပြီ >
< start="712.609" dur="7.507"> အလွန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအပတ် >
< start="715.011" dur="6.106"> OUT နေသောကနေဒါထောက်ခံမှု >
< start="717.447" dur="4.671"> အလုပ်ဖြစ်သူ၊ ဖျားနာသူ၊ တစ် ဦး ၌ရှိသည် >
< start="720.25" dur="3.236"> သူတို့ဘယ်မှာအခြေအနေ >
< start="721.251" dur="3.403"> သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ >
< start="722.285" dur="4.371"> မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသနည်း >
< start="723.62" dur="4.637"> သူတို့နေသောကြောင့်အိမ်မှာပါပဲ >
< start="724.788" dur="4.604"> မိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ >
< start="726.79" dur="5.238"> မိသားစုများတစ်ခုမှာရှိခြင်း >
< start="728.424" dur="5.673"> အရေးပေါ်အကျိုးခံစားခွင့်။ >
< start="729.526" dur="6.172"> ဒါကြောင့်ငါတို့ရွှေ့ >
< start="732.161" dur="5.839"> ကြိုတင်အိုင်တီတစ်ခုနှင့်အတူ >
< start="734.231" dur="5.504"> ကနေဒါအရေးပေါ်အကျိုးကျေးဇူး >
< start="735.832" dur="6.172"> IDEA တွင်တုံ့ပြန်မှုအကျိုးကျေးဇူးသည် >
< start="738.134" dur="5.472"> ငါတို့ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသွားကြသည် >
< start="739.869" dur="5.172"> ကနေဒါတိုင်းတွေ့ရှိချက် >
< start="742.138" dur="5.072"> ဘယ်နေရာမှာအခြေအနေမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ >
< start="743.74" dur="5.672"> သူတို့ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="745.175" dur="6.606"> $ 5,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏လွန်ခဲ့သော 12 လ >
< start="747.344" dur="6.239"> သူတို့သည်အဘယ်သူမျှမဝင်ငွေရှိသည် >
< start="749.545" dur="5.406"> COVID-19 ၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ >
< start="751.915" dur="6.039"> ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်သလား >
< start="753.717" dur="6.072"> လေးလအတွက်တစ်လဒေါ်လာ ၂၀၀၀ >
< start="755.085" dur="5.738"> ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်နေတာသေချာပါတယ် >
< start="758.088" dur="5.439"> ငါတို့လူတွေကိုတံတားဖွင့်နိုင် >
< start="760.022" dur="5.139"> ဒီနည်းကိုခက်ခဲတဲ့အချိန် >
< start="760.957" dur="4.771"> ဒီတော့သူတို့ကသူတို့အရင်းအမြစ်များရှိသည် >
< start="763.66" dur="4.604"> သူတို့လိုအပ်, သူတို့ >
< start="765.295" dur="5.138"> မိသားစုများ။ >
< start="765.862" dur="7.04"> WE ဒီနည်းကိုနည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည် >
< start="768.398" dur="4.938"> အိုင်တီလုပ်အားခပေးချေသည် >
< start="770.567" dur="4.404"> အလုပ်ရှင်များသို့တိုက်ရိုက် >
< start="773.036" dur="4.838"> လူတွေ။ >
< start="773.47" dur="6.906"> >>> ဒီတော့ဒီနည်းကိုဆိုလိုတာကဘာလဲ >
< start="775.105" dur="6.806"> အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်အတွက်တော့မဟုတ်ပါ >
< start="778.007" dur="4.538"> အလုပ်အကိုင်ကိုသီးခြားခွဲထားရမည် >
< start="780.51" dur="3.536"> သူတို့ထဲကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင် >
< start="782.045" dur="2.836"> အဖွဲ့အစည်း။ >
< start="782.679" dur="4.871"> ဒီနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်ပါပဲ >
< start="784.18" dur="6.707"> အလုပ်ရှင်များကိုထောက်ပံ့။ >
< start="785.015" dur="7.173"> သူတို့တစ်တွေအခြေအနေမှာဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="787.684" dur="5.806"> ဒီနေရာမှာအလုပ်ရှင်မရှိရင်ဘယ်မှာလဲ >
< start="791.021" dur="3.537"> FROM မှပိုက်ဆံကြာကြာခံ >
< start="792.322" dur="5.038"> သူတို့အာမခံနိုင်ပါကုမ္ပဏီ >
< start="793.623" dur="5.972"> ဒီအလုပ်ရှင်နိုင်လိမ့်မယ် >
< start="794.691" dur="6.272"> ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းဖြင့်လျှောက်ထားပါ >
< start="797.494" dur="5.038"> တစ်လအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ရရှိသည် >
< start="799.729" dur="3.47"> လေးလ။ >
< start="801.097" dur="3.603"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးအကြီးဆုံးစဉ်းစားသည် >
< start="802.665" dur="4.238"> အရေးကြီးတယ် >
< start="803.333" dur="4.838"> သင်တန်းကျော်ငါတို့ဘာပါတယ် >
< start="804.834" dur="4.905"> နောက်ဆုံးအပတ်၏သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည် >
< start="807.037" dur="4.904"> ဒီအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="808.305" dur="5.605"> ပို့ဆောင်တစ် ဦး ၌အပ်ရနိုင် >
< start="809.873" dur="4.57"> ရလွယ်ကူပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်း >
< start="812.075" dur="4.07"> လူတွေရဲ့အိတ်ထဲမှာပိုက်ဆံ >
< start="814.044" dur="4.071"> မြန်။ >
< start="814.577" dur="5.272"> >>> လုပ်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်နေပြီ >
< start="816.279" dur="5.605"> စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ >
< start="818.248" dur="5.939"> DONE ဖြစ်စေခြင်းငှါ, WE ပစ်မှတ်ထားပါတယ် >
< start="819.983" dur="5.238"> ကျွန်ုပ်တို့အတွက်6ပြီ ၆ ရက်အပတ် >
< start="822.051" dur="5.273"> လူတွေဒီနည်းကိုအပ်။ >
< start="824.32" dur="4.472"> >>> အရေးကြီးပါတယ်ရဲ့ >
< start="825.355" dur="5.839"> လုပ်ရန်နောက်ထပ်လုပ်ရန်သေချာစေရန် >
< start="827.457" dur="7.674"> ငါတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်သောလူများ >
< start="828.925" dur="7.941"> အလွန်ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် >
< start="831.328" dur="8.174"> ငါ့အသင်းကလုပ်နေပြီ၊ >
< start="835.265" dur="8.808"> Carla QAULTROUGH, ငါ့ကောလိပ် >
< start="837" dur="9.475"> DEANNE အခုအချိန်မှာ။ >
< start="839.635" dur="9.276"> ငါတို့၏အလုံးစုံအတွက်ဒီနည်းကိုဆိုလိုတာက >
< start="844.207" dur="6.172"> စီးပွားရေး, ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှု >
< start="846.642" dur="5.372"> ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ >
< start="849.078" dur="4.037"> ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်နည်းကိုဆိုလိုသည် >
< start="850.513" dur="4.404"> ဒီနည်းကိုလုံးလုံးရန်ပုံငွေရှာ >
< start="852.148" dur="4.538"> ဗဟိုအစိုးရနှင့်သော >
< start="853.349" dur="4.805"> ဆိုလိုသည်မှာခန့်မှန်းချက် >
< start="855.051" dur="4.404"> စီးပွားရေးအမျိုးအစားများ >
< start="856.82" dur="4.537"> ကျွန်ုပ်တို့ပေးနေသည့်ထောက်ပံ့မှု >
< start="858.288" dur="4.971"> သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည် >
< start="859.589" dur="6.106"> သူတို့သည်နောက်ဆုံးအပတ်ရှိခဲ့သည်။ >
< start="861.491" dur="5.805"> >>> SO ထက် RATHER >
< start="863.393" dur="6.473"> တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုမျှော်လင့် >
< start="865.829" dur="6.205"> ကနေဒါနှင့်အသေးစားရန် >
< start="867.43" dur="7.207"> WE $ 27 ဘီလီယံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ >
< start="869.999" dur="7.04"> သောအခုချက်ချင်းမျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="872.168" dur="6.306"> တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မှုကိုဘတ်ဂျက်ရလိမ့်မည် >
< start="874.771" dur="6.439"> တစ် ဦး ကဒါ $ 52 ဘီလီယံ >
< start="877.206" dur="5.205"> သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုကြောင့် >
< start="878.641" dur="6.34"> စကေးနှင့်သိသာထင်ရှားသော >
< start="881.344" dur="5.472"> ဒီအကျိုးကျေးဇူးများကိုလူတွေ။ >
< start="882.545" dur="6.073"> ဒါဆိုငါတို့ဘယ်လောက်ကြည့်နေလဲ >
< start="885.114" dur="7.108"> $ 52 ဘီလီယံအတွင်းရှိ DONON >
< start="886.95" dur="7.373"> မျှော်လင့်ထားသည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မှု >
< start="888.752" dur="6.639"> အဲဒီမှာရဲ့ $ 55 ဘီလီယံရှိပါတယ် >
< start="892.355" dur="4.337"> အခွန်ဘဏ္Fာရေးများတွင်ငါတို့ပြောပြီ >
< start="894.457" dur="4.071"> မရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ >
< start="895.525" dur="6.506"> တစ် ဦး ချင်းစီမဟုတ်သလိုကော်ပိုရေးရှင်း >
< start="896.826" dur="8.775"> သူတို့ဆပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလိမ့်မည် >
< start="898.661" dur="8.275"> သြဂုတ် ၃၁ မတိုင်မီဝင်ငွေခွန်။ >
< start="902.165" dur="7.073"> SO ၏စုစုပေါင်း Package >
< start="905.735" dur="5.005"> ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးထဲသို့ $ 107 ဘီလီယံ။ >
< start="907.07" dur="5.004"> ငါတွင် TIME နေ့ကိုလွန် >
< start="909.372" dur="4.804"> JEEPS FINANZA နှင့်အတူဖုန်း >
< start="910.873" dur="4.138"> ငါမတိုင်မီဝန်ကြီးများ >
< start="912.241" dur="5.005"> နှင့်ဖုန်းတွင်အချိန်ဖြုန်းခဲ့သည် >
< start="914.31" dur="5.739"> JEEPT ဘဏ္MINာရေးဝန်ကြီးများနှင့်ငါ >
< start="915.144" dur="6.74"> ကနေဒါဆိုတာကိုမင်းပြောပြနိုင်သလား >
< start="917.38" dur="6.106"> အရမ်းယူ, ငါပြောနိုင်ပါတယ်, >
< start="920.183" dur="4.304"> သင့်လျော်ပေမယ့်လည်းသိသာထင်ရှားသော >
< start="922.018" dur="3.003"> တုံ့ပြန်ရန်ချဉ်းကပ်မှု >
< start="923.62" dur="2.201"> ကျနော်တို့မမြင်နိုင်သောအခက်အခဲ >
< start="924.654" dur="4.371"> ရင်ဆိုင်နေရသည် >
< start="925.155" dur="6.906"> [ပြင်သစ်စကားပြော] >
< start="925.955" dur="8.542"> >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): ငါကစားစရာ >
< start="929.159" dur="8.208"> US ရှိရန်အရေးကြီးသည် >
< start="932.195" dur="7.04"> လူတွေဘယ်မှာအခြေအနေ၊ >
< start="934.631" dur="6.372"> သူတို့၏အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိစေ၊ >
< start="937.5" dur="6.807"> သူတို့ဝင်ငွေမရှိကြပါဘူး >
< start="939.369" dur="6.039"> သူတို့ကိုလာမည့်လေးလ >
< start="941.17" dur="9.61"> တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ရှိရန် >
< start="944.441" dur="8.275"> လေးလ။ >
< start="945.542" dur="8.608"> ဆိုလိုတာကတိုက်ရိုက်လုပ်အားခ >
< start="950.914" dur="5.071"> လူတွေအများကြီးနှင့်လည်းလိမ့်မည် >
< start="952.849" dur="5.672"> ကုမ္ပဏီများကိုကူညီပါ။ >
< start="954.284" dur="10.71"> အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ >
< start="956.185" dur="11.945"> >>> ဒီတော့ဆက်သွားမယ် >
< start="958.654" dur="10.544"> ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကြည့်နိုင်ကြောင်းကြည့်ရှုရန် - သို့သော် >
< start="965.128" dur="6.34"> ဤတိုင်းတာမှုများနှင့်အတူယခုချက်ချင်း >
< start="968.264" dur="6.239"> ငါတို့ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ် >
< start="969.365" dur="10.277"> လူတွေအတွက်အကူအညီ >
< start="971.601" dur="10.276"> တိုက်ရိုက် 52 ဘီလီယံစုစုပေါင်း >
< start="974.637" dur="9.309"> ထောက်ပံ့မှုနှင့်အခွန်နှင့်အတူ >
< start="979.776" dur="6.94"> သီးခြားအတွက်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် >
< start="982.011" dur="6.506"> သူတို့ယူနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီများ >
< start="984.08" dur="6.606"> သူတို့ရဲ့အခွန်ပေးဆောင်ရန် 31 သြဂုတ် >
< start="986.85" dur="6.839"> နောက်ထပ် 55 ဘီလီယံအထိထိုး >
< start="988.651" dur="8.141"> စီးပွားရေးသို့ဝင်ငွေ။ >
< start="990.853" dur="8.041"> >>> အိုင်တီစုစုပေါင်းရဲ့ >
< start="993.823" dur="8.074"> $ 107 ဘီလီယံ။ >
< start="996.926" dur="5.839"> >>> ဒီတော့ငါတို့ကြည့်ရှုနိုင်သလားဘယ်လိုကြည့်လို့လဲ >
< start="999.061" dur="4.805"> ဒီနည်းကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် Aggressive Be >
< start="1002.031" dur="5.806"> ယနေ့အခြေအနေ။ >
< start="1002.899" dur="6.139"> >>> အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1004" dur="5.872"> AND ငါသင်တန်းမှငါ >
< start="1007.971" dur="4.837"> သင့်မေးခွန်း၏အဖြေ။ >
< start="1009.172" dur="5.272"> >> ငွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် AND >
< start="1010.172" dur="8.709"> အားလုံးကောလိပ်များနှင့်ငါတို့ IndEED နေကြသည် >
< start="1012.942" dur="7.441"> သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေရန်အဆင်သင့်။ >
< start="1014.577" dur="7.808"> >>> ကြီးစွာသော WE နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် >
< start="1019.048" dur="4.438"> ဖုန်းနှင့်နောက်သို့မေးခွန်းများ >
< start="1020.616" dur="5.539"> အခန်း။ >
< start="1022.519" dur="6.472"> SO အော်ပရေတာ။ >
< start="1023.62" dur="9.008"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မာစီ။ >
< start="1026.289" dur="13.012"> ဤအချိန်တွင်စာနယ်ဇင်း STAR 1 ကိုနှစ်သက်ပါ >
< start="1029.125" dur="14.881"> သင်၌မေးခွန်းရှိပါက။ >
< start="1032.762" dur="19.352"> အဲဒီမှာတစ် ဦး အတိုချုပ်ပါလိမ့်မည်။ >
< start="1039.435" dur="15.015"> သင့်ရဲ့စိတ်ရှည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1044.14" dur="10.977"> ပထမမေးခွန်းကနေ >
< start="1052.248" dur="3.603"> THE မှ "KRISTY Kirkup >
< start="1054.584" dur="3.237"> AND MAIL ။ " >
< start="1055.251" dur="3.07"> >> မေးခွန်း - နေ့လည်ခင်းကောင်း >
< start="1055.985" dur="4.205"> ထပ်လုပ်ခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1057.954" dur="4.17"> ဒီနေ့ >
< start="1058.454" dur="5.105"> ကျန်းမာရေးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် >
< start="1060.423" dur="3.904"> ဝန်ကြီးကအပေါ်ထပ်သို့ပြောသည် >
< start="1062.291" dur="4.304"> ညဥ့်နက်၏ AS >
< start="1063.693" dur="4.237"> သော quarantine ၌ပါဝါ >
< start="1064.46" dur="5.906"> အသုံးပြုရန်သွားတော့မည် >
< start="1066.729" dur="6.106"> အခြားခရီးသွားများသေချာအောင် >
< start="1068.064" dur="6.639"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများသွားနေကြသည် >
< start="1070.5" dur="5.572"> လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်လက်အောက်ခံရန် ၁၄ >
< start="1072.969" dur="4.104"> နေ့အထီးကျန်, ငါ့မေးခွန်း IS >
< start="1074.837" dur="4.037"> ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ်အတွက်၊ >
< start="1076.205" dur="4.004"> ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောနိုင်ပါသလား >
< start="1077.206" dur="5.305"> အစိုးရအခုအချိန်မှာဒီယူ >
< start="1079.008" dur="5.005"> သောကြောင့်သေချာစေရန်အဆင့် >
< start="1080.376" dur="4.905"> FOR ဒီနည်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားစီ >
< start="1082.711" dur="4.038"> နယ်လှည့်ခရီးသည်များသည်လွတ်လပ်မှုရှိသည် >
< start="1084.147" dur="5.104"> AND သင်တစ် ဦး စီစဉ်နေကြသည် >
< start="1085.415" dur="4.704"> ဒီနည်းကိုနှင့်အတူလိုက်ရန်စည်းရုံးရေးကိရိယာ >
< start="1086.883" dur="6.205"> ဘာကြောင့်လဲ >
< start="1089.385" dur="6.773"> ပြည်သူ့ရဲလား >
< start="1090.253" dur="8.908"> >> အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1093.222" dur="8.242"> မေးခွန်းနှင့်ငါ့ကိုပဲကြပါစို့ >
< start="1096.292" dur="7.04"> သောဟုတ်သည်, ကျန်းမာရေး REITERATE >
< start="1099.295" dur="6.273"> ပါဝါကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဝန်ကြီး >
< start="1101.598" dur="7.039"> သူအောက်မှာရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="1103.466" dur="9.609"> AT စတင်စ quantantine လှုပ်ရှားမှု >
< start="1105.701" dur="10.477"> တစ်ညဉ့်နက်ဖို့ယနေ့ည >
< start="1108.771" dur="12.379"> Mandatory 14-Day ကာလ >
< start="1113.209" dur="10.777"> လူအားလုံးအပေါ်အထီးကျန်မှုတွေ >
< start="1116.312" dur="9.376"> ပြင်ပကနေဒါမှကနေဒါသို့။ >
< start="1121.284" dur="9.509"> ဒီစာစောင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည် >
< start="1124.12" dur="9.609"> Coronavirus မှာအရှည် >
< start="1125.821" dur="11.478"> တနင်္လာနေ့တွင်ဗီရိုကော်မတီ။ >
< start="1130.927" dur="7.774"> ကနေဒါနိုင်ငံသားအားလုံးအလုပ်လုပ်ကြပြီ >
< start="1133.863" dur="8.942"> လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန်အလွန်ခဲယဉ်း >
< start="1137.433" dur="8.141"> သူတို့ရဲ့ရူပဗေဒအကွာအဝေး >
< start="1138.835" dur="11.278"> ဘဝနှင့်ငါတို့သည်တစ်ချိန်ကအဘို့, >
< start="1142.939" dur="10.71"> အခုဆိုရင်ချက်ချင်းအကြံပေးခဲ့သည် >
< start="1145.708" dur="9.343"> ကနေဒါသို့ရောက်ရှိလာသောလူများ >
< start="1150.246" dur="8.075"> မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန် ၁၄ ရက်အထိ >
< start="1153.783" dur="8.575"> သူတို့ရဲ့ပြန်လာ။ >
< start="1155.184" dur="7.908"> WE အခု IS ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပြီ >
< start="1158.454" dur="8.109"> ထိုအတိုင်းအတာစေရန်အချိန် >
< start="1162.525" dur="7.54"> မန္တလေး။ >
< start="1163.226" dur="10.009"> ငါတို့အားလုံးကိုတကယ်ပဲတန်ဖိုးထားတယ်ထင်ပါတယ် >
< start="1166.696" dur="9.008"> ရှိသည်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ် >
< start="1170.199" dur="6.173"> ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီနည်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားစီ >
< start="1173.369" dur="5.305"> ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှု >
< start="1175.838" dur="4.738"> ကနေဒါ။ >
< start="1176.505" dur="6.306"> AND ငါ DR သို့လှည့်စေခြင်းငှါ NJOO TO >
< start="1178.808" dur="4.637"> ကမ်းလှမ်းချက် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် >
< start="1180.71" dur="3.67"> အများပြည်သူကျန်းမာရေး AURORA >
< start="1182.945" dur="2.769"> ရှုထောင့်? >
< start="1183.579" dur="3.603"> >> ဟုတ်ကဲ့။ >
< start="1184.514" dur="5.072"> ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမှရှာဖွေပါ >
< start="1185.848" dur="5.539"> ရှုထောင့်ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲ >
< start="1187.349" dur="5.239"> အချိန်ကောင်းတွေ၊ အရေးကြီးတယ် >
< start="1189.719" dur="4.47"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး SO >
< start="1191.521" dur="4.103"> တစ် ဦး ချင်းစီဖော်ထုတ်မထားဘူး >
< start="1192.789" dur="4.804"> အခြားအလားအလာများ >
< start="1194.323" dur="5.873"> အများပြည်သူလည်းအများပြည်သူ >
< start="1195.758" dur="6.44"> ၁၄ ရက်၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူ >
< start="1197.76" dur="5.839"> AN အတွက်အပြင်ဘက်ကန့်သတ်ဖြစ်ခြင်း >
< start="1200.329" dur="5.505"> ထိုမျှလောက်လေးစားခြင်းဖြင့်ပေါက်ဖွားသောကာလ >
< start="1202.331" dur="4.671"> ထိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအခြေခံမူ >
< start="1203.766" dur="5.306"> ၀ န်ကြီးဌာနကလည်းပြောကြားခဲ့သည် >
< start="1205.968" dur="4.638"> ထပ်ခါတလဲလဲလာခရီးသွားများ >
< start="1207.136" dur="5.138"> ကနေဒါသို့ပြန်သွားသင့်သည် >
< start="1209.205" dur="4.404"> နေရာတိုင်းမှာကြောင့်ဖော်ထုတ်ခံခဲ့ရသည် >
< start="1210.74" dur="5.438"> COVID-19 SO ကမ္ဘာပေါ်တွင် >
< start="1212.408" dur="5.872"> သင်အိမ်သို့လာတဲ့အခါအိုင်တီပါပဲ >
< start="1213.743" dur="7.507"> သင်၏အပေါင်းအဖော်များကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသည် >
< start="1216.312" dur="6.039"> ကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်မိမိကိုယ်ကိုသီးသန့်ဖယ်ထားခြင်းဖြစ်သည် >
< start="1218.414" dur="4.605"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုပဲ >
< start="1221.384" dur="2.902"> အထူးသဖြင့်ထံမှအဆင့် >
< start="1222.485" dur="3.903"> ပြည်သူ့ရှုထောင့်။ >
< start="1223.152" dur="4.805"> >>> ငါ PRIM ခဲ့ ADD ပါလိမ့်မယ် >
< start="1224.42" dur="6.907"> ဝန်ကြီးနှင့်အတူတစ် ဦး ကခေါ်သံ LED >
< start="1226.655" dur="6.573"> သုာန်များ >
< start="1228.091" dur="9.308"> ဒီနည်းကိုအစောပိုင်းနယ်မြေများ။ >
< start="1231.461" dur="7.507"> ကျနော်တို့ PROVINES မြင်ကြပြီ >
< start="1233.362" dur="8.276"> တက်ပြီးနောက်ထပ်ယူ >
< start="1237.566" dur="6.24"> စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ရှင်းလင်းသောတိုင်းတာမှုများ >
< start="1239.102" dur="7.139"> နှင့်အချို့သောပါဝင်သောနယ်မြေများ >
< start="1241.771" dur="7.273"> ပြည်နယ်နှင့်နယ်မြေများ >
< start="1243.94" dur="5.905"> ခရီးသွားလာရန်ကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း >
< start="1246.375" dur="5.305"> အပြင်ဘက်မှ AND >
< start="1249.178" dur="4.204"> နယ်မြေ။ >
< start="1250.079" dur="3.937"> ငါနားလည်သဘောပေါက်အားလုံးကနေဒါ >
< start="1251.814" dur="3.97"> ဒါကလေးနက်သော IS >
< start="1253.516" dur="2.836"> အခြေအနေ။ >
< start="1254.183" dur="4.905"> အိုင်တီမတိုင်မီအိုင်တီဆိုးရလိမ့်မည် >
< start="1255.918" dur="6.139"> ပိုကောင်း။ >
< start="1256.486" dur="7.073"> ကျနော်တို့ကံကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ >
< start="1259.222" dur="4.938"> ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိသည် >
< start="1262.191" dur="3.737"> ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့်တင်းကြပ် >
< start="1263.693" dur="4.404"> ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု WE PROFSUT >
< start="1264.293" dur="5.139"> ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ရန်လိုသည် >
< start="1266.062" dur="5.471"> DR ထံမှကြား၏ ကို AT မှာ NJOO >
< start="1268.231" dur="5.838"> ဒီနည်းကို၏အစ, ပြားချပ် >
< start="1269.565" dur="5.906"> THE CURVE AND THE CURVE စီစဉ် >
< start="1271.667" dur="8.942"> AND ဒီနည်းကိုမဖြစ်မနေအထီးကျန် >
< start="1274.203" dur="7.107"> အမေရိကန်လုပ်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ >
< start="1275.605" dur="7.74"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1280.743" dur="3.304"> နောက်ဆက်တွဲ။ >
< start="1281.443" dur="4.672"> >> မေးခွန်း: ငါသည်အံ့ AS ခြင်းခံခဲ့ရသည် >
< start="1283.479" dur="4.438"> ဘဏ္FINာရေးဝန်ကြီး WE >
< start="1284.18" dur="5.004"> သင်၏ဌာနကိုနားလည်ရန် >
< start="1286.248" dur="4.605"> အကြောင်းဘဏ်အကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည် >
< start="1288.05" dur="3.503"> ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း >
< start="1289.318" dur="3.837"> စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုငွေခွဲဝေပါ >
< start="1290.987" dur="5.305"> အထူးသ။ >
< start="1291.687" dur="8.242"> ၀ န်ကြီးချုပ်ဆိုပါစို့ >
< start="1293.289" dur="7.207"> ကျွန်ုပ်တို့အားသတ်မှတ်ထားသောအမေရိကန်တစ် ဦး ကိုပေးပါ >
< start="1296.425" dur="4.538"> ဒီဟောပြောချက်တွေဘယ်လို UPDATE >
< start="1300.062" dur="2.97"> သွား။ >
< start="1300.63" dur="3.603"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1301.097" dur="5.538"> ဘဏ်စနစ်သည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="1303.166" dur="5.071"> ကနေဒါ FOR ခွန်အား၏။ >
< start="1304.366" dur="4.305"> ငါယုံကြည်သည် >
< start="1306.769" dur="3.837"> တွင်အပြင်းထန်ဆုံးဘဏ်စနစ် >
< start="1308.371" dur="4.07"> ကမ္ဘာ။ >
< start="1308.805" dur="5.838"> အတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးသည် >
< start="1310.739" dur="5.572"> စေရန်ဘဏ်စနစ်နှင့်အတူ >
< start="1312.575" dur="6.739"> ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် >
< start="1314.777" dur="6.006"> စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား >
< start="1316.445" dur="6.206"> လိုအပ်အားလုံးအရွယ်အစား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ >
< start="1319.582" dur="4.404"> >>> ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသည် >
< start="1320.917" dur="4.804"> LITERALLY အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြ >
< start="1322.852" dur="4.237"> လတ်တလောနေ့တွေတစ်နေ့လုံးည >
< start="1324.153" dur="5.171"> ကျွန်ုပ်တို့မရှိကြောင်းသေချာစေရန် >
< start="1325.855" dur="5.271"> WE သောတစ်ခုတည်းသောထောက်ခံမှု >
< start="1327.223" dur="6.139"> နောက်ဆုံးအပတ်, စီးပွားရေးပြီးစီး >
< start="1329.458" dur="5.872"> ချေးငွေရရှိနိုင်သောအစီအစဉ်, THE >
< start="1331.26" dur="5.539"> စီးပွားရေးနောက်ကျော >
< start="1333.529" dur="4.571"> ကနေဒါဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် AND >
< start="1335.464" dur="3.804"> ပို့ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်ပိုရေးရှင်း >
< start="1336.933" dur="5.138"> အသေးစားစီးပွားရေးနှင့် >
< start="1338.234" dur="5.472"> အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေများပေမယ့် >
< start="1339.401" dur="5.74"> ထို့အပြင်ဘဏ်များအတွက်စွမ်းရည် >
< start="1342.205" dur="4.871"> အားလုံးအရွယ်အစားအပေါ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ >
< start="1343.84" dur="4.937"> စီးပွားရေးချေးငွေအမျိုးအစား >
< start="1345.274" dur="4.938"> သူတို့ GET လိုအပ်မယ့်နေကြသည် >
< start="1347.21" dur="3.736"> အခက်အခဲတစ်ခုကြုံတွေ့ရ။ >
< start="1348.944" dur="4.071"> ငါသူတို့ဆွေးနွေးချက်များကိုပြောပါလိမ့်မယ် >
< start="1350.346" dur="4.271"> အရမ်းကောင်းပါတယ်။ >
< start="1351.113" dur="5.405"> နှင့်ဘဏ်များအလုပ်လုပ်နေကြသည် >
< start="1353.148" dur="5.239"> အမေရိကန်နှင့်အတူတကွ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မဟုတ်ပါဘူး >
< start="1354.75" dur="6.506"> မည်သည့်အရာမျှအစီရင်ခံရန် IN IN >
< start="1356.652" dur="6.941"> အတိအကျ parameter ၏စည်းကမ်းချက်များ >
< start="1358.554" dur="6.606"> ဘယ်လိုရှေ့ကိုရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ >
< start="1361.423" dur="5.873"> ငါနောက်ဆုံးသူတို့ရှိတဲ့အခါ >
< start="1363.759" dur="4.204"> ငါလာမယ့်ပါလိမ့်မယ် >
< start="1365.361" dur="4.704"> ပွင့်လင်း AS ပွင့်လင်း >
< start="1367.43" dur="4.27"> ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ >
< start="1368.097" dur="5.338"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1370.199" dur="6.339"> အော်ပရေတာ, နောက်မေးခွန်း, ကျေးဇူးပြု။ >
< start="1371.834" dur="7.841"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1373.602" dur="9.109"> နောက်လာမည့်မေးခွန်းသည်စာပေမှဖြစ်သည် >
< start="1376.705" dur="8.142"> ကနေဒါစာနယ်ဇင်းမှ DIB ။ >
< start="1379.808" dur="7.041"> သွားကြ, သငျ့လိုင်းကို IS >
< start="1382.845" dur="7.44"> ဖွင့်လှစ်။ >
< start="1384.98" dur="7.241"> >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1386.983" dur="6.706"> မစ္စတာ MORE Morene, ငါတစ် ဦး ရှိသည် >
< start="1390.452" dur="4.805"> အကျိုးကျေးဇူးအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်း၊ >
< start="1392.355" dur="4.203"> လူတိုင်းပြောဆိုသည့်မေးခွန်း >
< start="1393.823" dur="4.204"> ရန်ပုံငွေများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် >
< start="1395.391" dur="3.003"> တချို့လူတွေကဒီမရကြဘူး >
< start="1396.692" dur="3.003"> အနည်းဆုံးသုံးပတ်အတွင်းရန်ပုံငွေ >
< start="1398.16" dur="3.904"> အနည်းဆုံး။ >
< start="1398.527" dur="6.506"> ဒီတော့သင်လုပ်မယ့်အရာ >
< start="1399.861" dur="7.241"> လူတွေသူတို့ရပြီသေချာသည် >
< start="1402.231" dur="6.74"> ရံပုံငွေများ? >
< start="1405.167" dur="5.339"> လူတိုင်းကိုသင်ရောက်ရှိနိုင်သလား။ >
< start="1407.236" dur="4.838"> >> အဖြေ: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1409.138" dur="6.339"> အလွန်အရေးကြီးပါတယ် >
< start="1410.64" dur="7.673"> မေးခွန်း။ >
< start="1412.208" dur="10.076"> လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်နှင့်အပတ်များအတွင်း >
< start="1415.611" dur="8.942"> ကျနော်တို့သေချာစေရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် >
< start="1418.447" dur="7.641"> ငါတို့ရိုးရှင်းပြီးနိုင်သလား >
< start="1422.418" dur="6.74"> WE သောဤထိရောက်သောချဉ်းကပ်နည်း >
< start="1424.687" dur="5.672"> လျင်မြန်စွာရန်ပုံငွေရနိုင် >
< start="1426.222" dur="7.908"> လိုအပ်သောကနေဒါ >
< start="1429.292" dur="6.572"> ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအခြေအနေ။ >
< start="1430.526" dur="8.108"> ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းစနစ်အနည်းငယ်သာတွေ့ရှိခဲ့သည် >
< start="1434.263" dur="5.505"> ဖွစျနိုငျသောဖက်ဒရယ်အစိုးရ >
< start="1435.998" dur="7.041"> အလွန်ထိရောက်မှုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါ >
< start="1438.768" dur="5.772"> ချဉ်းကပ်လျင်မြန်စွာ။ >
< start="1439.902" dur="7.975"> အိုင်တီရက်အနည်းငယ်ယူ။ ငါသေချာပါတယ် >
< start="1443.172" dur="6.573"> ငါတို့သေချာအောင်ရှိသည် >
< start="1444.673" dur="6.54"> စနစ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ >
< start="1448.01" dur="8.642"> >>> AND ငါ၌ငါသိ၏ >
< start="1449.879" dur="7.206"> ဒီနည်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှမြန်အောင်လုပ်ပါ >
< start="1451.414" dur="7.84"> AND ငါတို့လိုချင်အတိအကျပါပဲ >
< start="1456.786" dur="5.405"> လုပ်ရန်။ >
< start="1457.286" dur="8.174"> ယနေ့ငါတို့အထင်ထိုအပတ် >
< start="1459.388" dur="6.574"> BEပြီ ၆ ရက်မှာငါတို့ဖြစ်လိမ့်မယ် >
< start="1462.325" dur="7.206"> ဤရန်ပုံငွေများကိုပေးပို့နိုင်ပါ >
< start="1465.594" dur="5.872"> ကနေဒါ။ >
< start="1466.095" dur="8.609"> >>> သို့သော်အသစ်တစ်ခုရှိလျှင် - >
< start="1469.665" dur="5.639"> အသစ်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိပါက >
< start="1471.6" dur="6.406"> ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပေးမည် >
< start="1474.837" dur="4.738"> တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့။ >
< start="1475.438" dur="5.438"> သိဖို့တကယ်အရေးကြီးတယ် >
< start="1478.14" dur="5.472"> ငါတို့တစ် ဦး လုံး၌လုံးဝပါပဲ >
< start="1479.709" dur="9.942"> အခြေအနေ - ဒီဟာအများဆုံးပါ >
< start="1481.01" dur="11.444"> ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခု >
< start="1483.746" dur="10.41"> နေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့် Carl QAULTROUGH >
< start="1489.785" dur="6.64"> SYSTEMS ကိုကြည့်နေကြသည်။ >
< start="1492.588" dur="5.105"> သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် >
< start="1494.29" dur="4.504"> မြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ >
< start="1496.559" dur="3.569"> အိုင်တီနောက်ထပ်ယူလိမ့်မည် >
< start="1497.827" dur="3.904"> သုံးပတ်။ >
< start="1498.927" dur="5.639"> >> မေးခွန်း: ငါတို့စကားပြောနိုင်ရင်တောင် >
< start="1500.262" dur="7.441"> ဖြစ်နိုင်သည်ဆယ်ရက်ပတ်လုံးအကြောင်းကို >
< start="1501.864" dur="7.941"> 6ပြီ ၆ ရက်နေ့တွင်ထပ်တိုးခဲ့သည် >
< start="1504.7" dur="6.907"> ၀ န်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့သလို >
< start="1507.837" dur="6.506"> ဒါကြောင့်ပင်ဆိပ်ကမ်းရှိနိုင်ပါတယ် >
< start="1509.972" dur="5.772"> AND အိုင်တီအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ။ >
< start="1511.741" dur="5.739"> သငျသညျမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်သလား။ >
< start="1514.477" dur="4.704"> ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသေးတယ် >
< start="1515.878" dur="4.904"> အဆိုပါ Quantant ဝန်ကြီး >
< start="1517.613" dur="6.206"> HAJDU ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ပေးသည် >
< start="1519.315" dur="8.107"> အမေရိကန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ >
< start="1520.916" dur="8.408"> သင်ဘာလုပ်မလဲ >
< start="1523.953" dur="6.974"> ဒီ quarantine စည်းကြပ်? >
< start="1527.556" dur="4.404"> ငါမိန့်မှာထားကြောင်းနားလည်ပါတယ် >
< start="1529.458" dur="3.537"> သူတို့ကိုယ်သူတို့ Quantantine >
< start="1531.06" dur="4.204"> သို့သော်သင်ဖို့ဆိုလိုတာက >
< start="1532.094" dur="6.139"> ဝင်သောလူများကိုစစ်ဆေးပါ >
< start="1533.128" dur="6.907"> တိုင်းပြည်နှင့်နောက်သို့ -Up ရန် >
< start="1535.398" dur="8.141"> ပြီးနောက်သူတို့ကို 14 ရက်အတွင်း >
< start="1538.367" dur="5.939"> သူတို့နိုင်ငံသို့ဝင်? >
< start="1540.169" dur="6.706"> >> အဖြေ: သင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1543.672" dur="4.071"> မေးခွန်း။ >
< start="1544.44" dur="6.005"> quarantine နှင့်အတူ, >
< start="1547.009" dur="8.041"> ဒီနည်းကိုအပြောင်းအလဲ IS ။ >
< start="1547.877" dur="8.174"> အခုဆိုရင်ငါတို့အကြောင်းတစ် ဦး ကအကြောင်းပြောနေတာပါ >
< start="1550.579" dur="8.109"> mandantory quarantine နှင့်, >
< start="1555.184" dur="5.071"> သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် >
< start="1556.185" dur="7.14"> လိုက်နာရန်နေရာများတွင်ယန္တရားများ >
< start="1558.854" dur="7.507"> Quantantine ။ >
< start="1560.389" dur="11.578"> သောခရီးသွားများအတွက်အားလုံးဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="1563.459" dur="10.844"> ABROAD မှပါ ၀ င်သောခရီးသွားများ >
< start="1566.495" dur="9.109"> အမေရိကန်မှလုပ်သားများအတွက်မှလွဲ >
< start="1572.101" dur="5.271"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူလုပ်သလဲ >
< start="1574.437" dur="5.472"> အလားပဲ။ >
< start="1575.738" dur="5.705"> >> သူဆိုသည်မှာအဘယ်ယန္တရားများ။ >
< start="1577.506" dur="9.276"> >> အဖြေ: ငါကြိုက်လိမ့်မယ် >
< start="1580.042" dur="10.277"> ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်ကိုမှတ်သားပါ >
< start="1581.577" dur="12.212"> မပြောင်းလဲပါ >
< start="1586.916" dur="11.344"> ရက်အနည်းငယ်လောက်တိုင်ကျွန်တော်တို့အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့တယ် >
< start="1590.453" dur="8.841"> အထက်မှခရီးသွားများအားလုံး >
< start="1593.922" dur="9.443"> သူတို့တစ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားထား >
< start="1598.394" dur="10.611"> ကနေဒါ။ >
< start="1599.428" dur="11.111"> ပြောင်းလဲမှုယခုအချိန်အထိ IS >
< start="1603.532" dur="9.376"> ယနေ့ညဥ့်, Quantantine >
< start="1609.138" dur="7.507"> မသင်မနေရဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="1610.673" dur="7.573"> >> မေးခွန်း: သို့သော်မည်သို့သောယန္တရားများ >
< start="1613.041" dur="7.074"> သင်အကြောင်းမေးနေပါသလား။ >
< start="1616.778" dur="11.111"> PER နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်း >
< start="1618.38" dur="10.177"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောလိပ်ကျောင်း။ >
< start="1620.249" dur="9.342"> >>> နောက်လာမည့်မေးခွန်းကလာပါသည် >
< start="1628.023" dur="4.271"> AL-THEA ။ >
< start="1628.691" dur="5.438"> သင်၏လိုင်းကိုဖွင့်ထားသည်။ >
< start="1629.725" dur="10.043"> >>> သင်မဖြေပါ။ >
< start="1632.427" dur="8.409"> မည်သည့်အကောင်အထည်ဖော်မှုစနစ်များ AR >
< start="1634.263" dur="9.976"> လူတွေအိမ်မှာနေကြတယ် >
< start="1639.902" dur="7.474"> အဆိုပါ Quantantine နေခြင်း? >
< start="1642.638" dur="7.241"> အိုင်တီ WT >
< start="1644.373" dur="6.94"> ယနေ့ည၏တရားဝင်တာဝန်ဖြစ် >
< start="1647.543" dur="5.972"> ကနေဒါမှလူများ >
< start="1650.012" dur="6.506"> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ဖို့ကနေဒါအပြင်ဘက် >
< start="1651.447" dur="7.507"> ၁၄ ရက်အတွင်း။ >
< start="1653.649" dur="7.407"> ငါ ESSENTIAL အလေးပေးချင်တယ် >
< start="1656.652" dur="5.906"> လုပ်သားများအဖြစ်ထုတ်ပယ်နေကြသည် >
< start="1659.088" dur="5.739"> ခိုင်ခံ့သောအကြံဥာဏ်နှင့်အတူပြCASနာ >
< start="1661.19" dur="4.171"> ဝန်ကြီးချုပ် FROM မှ >
< start="1662.691" dur="4.037"> အချို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရုံး >
< start="1664.96" dur="3.47"> နေ့ရက်များ။ >
< start="1665.494" dur="4.905"> အထူးသတ်မှတ်ချက်များ >
< start="1666.862" dur="5.772"> ပြစ်ဒဏ်များနှင့်အာဏာတည်ခြင်း >
< start="1668.564" dur="4.537"> ယန္တရား, ငါတို့ပေးလိမ့်မည် >
< start="1670.532" dur="3.136"> သင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပို >
< start="1672.768" dur="1.368"> ဒီနေ့ >
< start="1673.235" dur="3.27"> >> မေးခွန်း: အိုကေ။ >
< start="1673.802" dur="3.337"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1674.27" dur="4.07"> ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်အမှန်စင်စစ်ငွေအတွက်ဖြစ်ပါသည် >
< start="1676.639" dur="2.802"> မနော်။ >
< start="1677.273" dur="3.936"> ငါငွေကြောအကြောင်းပြောဆိုချင်တယ် >
< start="1678.474" dur="4.837"> မနေ့ကငွေကောက်ခံ။ >
< start="1679.575" dur="6.739"> မင်းကိုဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသိချင်တယ် >
< start="1681.343" dur="7.841"> ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင် >
< start="1683.445" dur="7.808"> ပါလီမန်အားတောင်းဆိုရန်စိတ်ကူး >
< start="1686.448" dur="6.841"> အခွန်ကောက်ရန်နှင့်ငွေမဖြုန်းရန်ပါဝါများ >
< start="1689.351" dur="4.504"> အဆုံးတိုင်အောင်သူတို့၏အတည်ပြုချက် >
< start="1691.386" dur="4.238"> ဒီနှစ်မှာတောင် 2021 မဟုတ်ပေမယ့်နောက်တစ်ခု >
< start="1693.422" dur="3.336"> နှစ် >
< start="1693.989" dur="3.336"> သင်ထင်ခဲ့တဲ့အရာ >
< start="1695.758" dur="3.67"> ဒီနည်းကိုဆီလျော်စွာတုံ့ပြန်ပါ >
< start="1696.892" dur="3.436"> အကျပ်အတည်းလား >
< start="1697.592" dur="4.238"> >> အဖြေ: ကောင်းပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1699.562" dur="4.871"> မေးခွန်း။ >
< start="1700.462" dur="6.139"> AND ငါငါစတင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ် >
< start="1701.964" dur="6.073"> ပြောတာနှင့်အတူငါနှစ်သက်ပါတယ် >
< start="1704.567" dur="4.804"> ကျနော်တို့နောက်ဆုံးညနောက်ဆုံး၌ရရှိသော >
< start="1706.735" dur="4.237"> ဒီမနက် ၆:၀၀ နာရီမှာ >
< start="1708.17" dur="4.938"> အခြားနှင့်အတူတညီတညွတ်တည်းသဘောတူညီချက် >
< start="1709.538" dur="5.105"> ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့သို့ရှေ့ဆက်ဖို့အစိတ်အပိုင်းများ >
< start="1711.106" dur="5.105"> ကနေဒါနိုင်ငံသားများအတွက်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်။ >
< start="1713.242" dur="6.206"> ဒီနည်းကို AN ဆိုတာငါတို့သိတယ် >
< start="1714.777" dur="5.371"> အထူးအချိန်အတွက်စိန်ခေါ်မှု >
< start="1716.345" dur="5.872"> လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ရန်လိုသည် >
< start="1719.581" dur="3.738"> လျောက်ပတ်စွာ။ >
< start="1720.282" dur="6.072"> ကျနော်တို့ရပြီသောငွေတောင်းခံ >
< start="1722.384" dur="6.54"> System မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့တ >
< start="1723.452" dur="7.374"> သောသူတို့အားရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည် >
< start="1726.488" dur="6.54"> ငါတို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်။ >
< start="1729.058" dur="5.905"> ငါပြောနိုင်ရာနောက်ဆုံးအပတ် >
< start="1730.96" dur="5.538"> သငျသညျအကြှနျုပျကိုကြားကနေဒါမှပြော၏ >
< start="1733.162" dur="5.305"> ငါတို့ဘာပဲလုပ်လုပ်ငါတို့ >
< start="1735.097" dur="5.405"> သူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ယူ >
< start="1736.632" dur="5.038"> ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုဤအကူအညီဖြင့်ထောက်ပံ့ပါ >
< start="1738.6" dur="4.338"> အချိန်နှင့်သင်ဘာကိုစိန်ခေါ်သည် >
< start="1740.636" dur="4.738"> မြင်နေကျနော်တို့ငါတို့ရွှေ့အဖြစ် >
< start="1741.804" dur="7.04"> ကျနော်တို့လုပ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="1743.072" dur="7.94"> ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မည် >
< start="1745.507" dur="6.94"> လျင်မြန်စွာရွှေ့နိုင်စွမ်းရှိသည် >
< start="1748.978" dur="5.204"> အခက်အခဲများ၊ အဖြစ်အပျက်များကိုတုံ့ပြန်ရန် >
< start="1751.146" dur="5.005"> မြားစှာသောဖြစ်ရပ်များ >
< start="1752.581" dur="4.939"> လုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲ, ငါတို့ဘာ >
< start="1754.316" dur="5.105"> ကနေဒါတွင်တစ်ခုတည်းသောမမြင်ရပါ >
< start="1756.285" dur="4.204"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသောသော >
< start="1757.653" dur="4.003"> ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စများ >
< start="1759.554" dur="4.104"> ကွဲပြားခြားနားသောအပတ်, >
< start="1760.623" dur="4.103"> သိသိသာသာကွဲပြားခြားနား >
< start="1761.79" dur="4.204"> ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်ပြISနာများမှဖြစ်ရပ်များ >
< start="1763.792" dur="3.97"> မတိုင်မီအပတ်။ >
< start="1764.86" dur="4.07"> ကနေဒါကအမေရိကန်ကိုမျှော်လင့်နေသည် >
< start="1766.128" dur="5.539"> ဒီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပြင်ဆင်နေ >
< start="1767.896" dur="5.772"> စွမ်းရည်ရှိသည်ဖို့အခက်အခဲများ >
< start="1769.064" dur="7.24"> လျင်မြန်စွာရွှေ့ဖို့, ရှိသည်ဖို့ >
< start="1771.8" dur="7.674"> ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း >
< start="1773.802" dur="8.408"> ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန် >
< start="1776.438" dur="7.274"> WE အကြောင်းပြချက်တစ်ခု MOMENT ရဲ့အသိပေးစာပေါ်မှာ >
< start="1779.608" dur="4.971"> ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်နေရာတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည် >
< start="1782.344" dur="3.17"> အကြောင်းကြောင့်တစ် ဦး က PROVINCE ထောက်ခံပါတယ် >
< start="1783.846" dur="3.77"> ငါတို့ရှိသည်သောသူတို့၏အခြေအနေ >
< start="1784.713" dur="5.138"> အဲဒီလိုလုပ်ဖို့စွမ်းရည်။ >
< start="1785.648" dur="4.57"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သေချာစေရန်ရှာကြသည် >
< start="1787.749" dur="5.139"> ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည် >
< start="1789.985" dur="4.505"> သော။ >
< start="1790.352" dur="6.14"> ဤအရာအချို့ကိုငါတို့သိကြ၏ >
< start="1793.022" dur="4.871"> အာဏာပိုင်များကိုလိုအပ်လိမ့်မည် >
< start="1794.623" dur="4.938"> ထူးခြားတဲ့မြန်နှုန်းတစ်ခု၊ >
< start="1796.625" dur="4.304"> ယနေ့ခေတ်စကားပြောကြားခြင်း >
< start="1798.026" dur="4.338"> US ဖို့လိုအပျသောအကြောင်း >
< start="1799.695" dur="4.204"> ဒီနည်းကိုအသေးစိတ်ဖြင့်သင်တို့ဆီသို့ပြန်သွားပါ >
< start="1801.129" dur="5.873"> နေ့လည်ခင်းအရေးကြီးသောအစီအမံများ။ >
< start="1802.497" dur="5.707"> ကျနော်တို့လုပ်ဖို့အမိန့်များအလုပ်လုပ်နေကြသည် >
< start="1804.032" dur="5.239"> ကျနော်တို့စွမ်းရည်ရှိသည်သေချာအောင် >
< start="1807.136" dur="3.87"> ကနေဒါကာကွယ်ပေးရန်, GET >
< start="1808.337" dur="4.838"> ဒီနည်းကိုမှတဆင့်မိမိကိုယ်ကို >
< start="1809.405" dur="5.071"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းကို၏ထွက်လာဒီနည်းကို >
< start="1811.14" dur="5.371"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုမျှော်လင့်ထားပါသလား >
< start="1813.375" dur="4.905"> အချိန်, သို့သော်တစ် ဦး အတွက်ခေတ္တခဏ >
< start="1814.643" dur="6.04"> ဒီနည်းကိုနှင့်အတူထဲကလာ >
< start="1816.645" dur="5.305"> ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနဂိုအတိုင်း။ >
< start="1818.414" dur="5.271"> ကျွန်ုပ်တို့မသိမသာမသိပါ >
< start="1820.816" dur="4.738"> ဖြစ်စေနက်ရှိုင်းသောဖြစ်စေ >
< start="1822.084" dur="5.171"> အခက်အခဲကာလနှင့် >
< start="1823.819" dur="5.438"> ငါတို့ဘာကြောင့်စိတ်အားထက်သန်ရတာလဲ >
< start="1825.688" dur="5.271"> အတူတူအလုပ်လုပ်အတူတူ >
< start="1827.456" dur="6.907"> ကျနော်တို့ဆက်လက်သေချာစေရန်အစိတ်အပိုင်းများ >
< start="1829.391" dur="6.406"> တုံ့ပြန်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည် >
< start="1831.159" dur="9.176"> အလွန်အချိန်ဇယားဖို့နည်းလမ်း >
< start="1834.496" dur="8.241"> ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသောအခက်အခဲတိုင်း။ >
< start="1835.931" dur="9.109"> >>> အခန်းသုံးခန်း >
< start="1840.469" dur="6.473"> ဖုန်းများမပြန်မီ။ >
< start="1842.904" dur="5.306"> >> မေးခွန်း: ဂျူလီဗန်ဒူဆန်၊ >
< start="1845.174" dur="5.738"> မစ္စ Frereand, Donald TRUMP >
< start="1847.075" dur="5.038"> အမေရိကန်သမ္မတကြည့်နေသည် >
< start="1848.377" dur="6.172"> AN ဟူသည်အီစတာဆီသို့ >
< start="1851.046" dur="6.072"> 12 ,ပြီ, သူအမေရိကန်လို >
< start="1852.247" dur="5.706"> အလုပ်မှာ E-BACK အလုပ်လုပ်။ >
< start="1854.683" dur="7.307"> ကနေဒါနိုင်ငံသားများမျှော်လင့်နိုင်သည် >
< start="1857.252" dur="5.238"> နောက်ကျော - အလုပ်အတူတူအချိန်တွင်? >
< start="1858.086" dur="8.208"> >>> မေးခွန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ >
< start="1862.157" dur="7.507"> ဂျူလီ။ >
< start="1862.624" dur="9.844"> >>> ကနေဒါရှိကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်နည်းသည် >
< start="1866.428" dur="9.409"> နှင့်အညီအလွန်လှုပ်ရှားပါ >
< start="1869.798" dur="6.74"> သိပ္ပံနှင့်အကွံဉာဏျနှငျ့အတူ >
< start="1872.601" dur="7.173"> ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးချွန်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေး >
< start="1875.971" dur="5.005"> ရုံး။ >
< start="1876.672" dur="6.94"> ကနေဒါနိုင်ငံသားများစွာသည်ယနေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည် >
< start="1879.908" dur="6.707"> အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် >
< start="1881.11" dur="6.405"> ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိ၏ >
< start="1883.746" dur="6.472"> သူတို့ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1886.749" dur="5.272"> ကနေဒါ။ >
< start="1887.649" dur="7.441"> လုပ်ဆောင်နေကြသူကနေဒါ FOR >
< start="1890.352" dur="6.94"> မရှိသောအလုပ်သို့မဟုတ်နိုင် >
< start="1892.154" dur="8.575"> အိမ်မှအလုပ်လုပ်, ငါတို့လိုအပ်ပါတယ် >
< start="1895.224" dur="7.073"> ဒီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် >
< start="1897.426" dur="6.44"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး၏အလေ့အကျင့် >
< start="1900.896" dur="5.505"> ငါတို့ချနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန် >
< start="1902.431" dur="6.506"> THE CURVE သို့မဟုတ်ကာလ၌ >
< start="1903.999" dur="6.974"> DR ။ NJOO နှင့် TAMM ခဲ့ကြပြီ >
< start="1906.535" dur="5.638"> အသုံးပြုခြင်း, CURVE AND ငါ >
< start="1909.071" dur="5.572"> ငါတို့ရှိသမျှသည်တန်ဖိုးထားကြောင်းသိမှတ်ကြလော့ >
< start="1911.106" dur="5.805"> ငြင်းခုံပြီးနောက်ဆက်ဆက် >
< start="1912.34" dur="7.508"> ပါလီမန်နောက်ဆုံးည, WE >
< start="1914.777" dur="6.573"> နောက်ထပ်အိုင်တီတန်ဖိုးထားပါ။ >
< start="1917.045" dur="5.673"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးလာ >
< start="1919.981" dur="5.039"> စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်။ >
< start="1921.483" dur="5.105"> ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည်ယူ။ , >
< start="1922.851" dur="4.938"> ဒီအကြောင်းကိုသင်နောက်ထပ်ကြားရပြီ၊ >
< start="1925.187" dur="3.837"> အလွန်အရေးပါတိုင်းတာရန် >
< start="1926.722" dur="4.871"> ဒီနည်းကိုမှတဆင့်ကနေဒါထောက်ခံပါတယ် >
< start="1927.923" dur="7.006"> အချိန်, ငါမူကားငါကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ် >
< start="1929.158" dur="7.84"> ကနေဒါကိုပြောပါနဲ့ငါထင် >
< start="1931.727" dur="7.74"> ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရရှိသည် IS >
< start="1935.063" dur="7.942"> ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်ပိုကောင်း >
< start="1937.132" dur="7.908"> ကနေဒါနှင့်အလယ်အလတ်၏ >
< start="1939.601" dur="9.409"> ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးအတွက်ပိုကောင်းသည် >
< start="1943.138" dur="8.642"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကိုလေ့ကျင့်ရန် >
< start="1945.174" dur="8.408"> အခု CURVTEN နှင့်ဖို့ >
< start="1949.144" dur="6.907"> ဒီနည်းကိုရနိုင်ပါ။ >
< start="1951.914" dur="6.939"> သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလများတွင် >
< start="1953.782" dur="7.073"> ငါလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာစဉ်းစား >
< start="1956.185" dur="6.639"> လုပ်နေကြသိပ္ပံနောက်လိုက် >
< start="1958.987" dur="5.906"> အခြေအနေဘယ်လိုကြည့်ပါ >
< start="1960.989" dur="5.806"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ငါတို့နေသောအရာကိုပါပဲ >
< start="1962.958" dur="4.738"> သွားမယ့်နှင့် DR ဖြစ်နိုင်သည်။ NJOO >
< start="1965.093" dur="3.637"> တစ်ခုခု add ချင်တယ်။ >
< start="1966.929" dur="3.536"> >>> သင်ကြည့်ရှုလျှင်ဆက်ဆက် >
< start="1967.83" dur="4.303"> သိပ္ပံနှင့်အထောက်အထားနှင့် >
< start="1968.93" dur="5.305"> အခြားအတှေ့အကွုံမြား >
< start="1970.632" dur="6.273"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများ >
< start="1972.267" dur="5.739"> THE COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ, ငါပြောနိုင်ပါတယ် >
< start="1974.369" dur="5.839"> သောနေ့ရက်ကာလနှင့်အပတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ >
< start="1977.039" dur="4.637"> ဒီနည်းကိုဒီလပေါင်းများစွာ >
< start="1978.14" dur="4.237"> ရောဂါကူးစက်ခံရလိမ့်မယ် >
< start="1980.342" dur="5.572"> အများပြည်သူကျန်းမာရေးမှအထူးသဖြင့် >
< start="1981.81" dur="5.572"> ရှုထောင့် WE N စဉ်းစားပါ >
< start="1982.51" dur="6.54"> အိုင်တီအနည်းငယ်ကျော်သွားဖို့သွားမယ့် >
< start="1986.048" dur="5.204"> နေ့ရက်များသို့မဟုတ် SO ။ >
< start="1987.516" dur="5.271"> >> မေးခွန်း: ဒီအစီအစဉ်တွင် >
< start="1989.184" dur="5.805"> သက်ရောက်မှုဖို့မျက်စိကန်းသောစည်းကမ်းချက်များ >
< start="1991.386" dur="6.406"> သင်၏အစီအစဉ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်၏ >
< start="1992.921" dur="6.44"> THE ကိုမျက်နှာပြင်တက်ဖို့ >
< start="1995.123" dur="6.507"> လူတိုင်းအတွက်နယ်နိမိတ် >
< start="1997.926" dur="6.64"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်သမားများပါဝင်သည်? >
< start="1999.495" dur="7.039"> >> အဖြေ: ကောင်းပြီ, ငါငါထင် >
< start="2001.763" dur="6.807"> ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြေညာခဲ့ကြတချို့စဉ်းစားပါ >
< start="2004.7" dur="5.538"> အဆင့်မြင့်သောနယ်နိမိတ်တိုင်းတာမှုများ >
< start="2006.668" dur="6.54"> အလွန်အရေးကြီးသောသူတို့သည်။ >
< start="2008.703" dur="6.074"> လိုအပ်သော Quantantine ငါ >
< start="2010.372" dur="5.705"> ထိုသူတွေအကြောင်းပြောချင်တယ် >
< start="2013.342" dur="5.338"> ငါယုံကြည်စိတ်ချရသောနယ်နိမိတ်တိုင်းတာမှုများ >
< start="2014.91" dur="5.739"> ကနေဒါဒီလောက်များတယ်။ >
< start="2016.211" dur="5.805"> ကနေဒါလူမျိုးတွေဟာကြီးပြီးလူတွေပါ >
< start="2018.847" dur="4.738"> စစ်မှန်သောပုဂ္ဂိုလ်လုပ်နေခဲ့ကြပြီ >
< start="2020.782" dur="4.905"> မိမိကိုယ်ကိုသီးခြားထားရန်အနုပညာနှင့် >
< start="2022.15" dur="6.674"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကိုလေ့ကျင့်ရန်။ >
< start="2023.718" dur="7.675"> ငါစဉ်းစားတူညီတဲ့အချိန်တွင် >
< start="2025.821" dur="7.608"> အမေရိကန်သွားနှင့်ခံစားရလိမ့်မယ် >
< start="2028.957" dur="9.409"> Mandant Quantantine နှင့်အတူပိုမိုလုံခြုံသည် >
< start="2031.527" dur="9.809"> ကနေဒါတွင်ဝင်သောမည်သူမဆို။ >
< start="2033.595" dur="9.91"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစည်းကမ်းချက်များ၌၊ >
< start="2038.5" dur="6.84"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် >
< start="2041.47" dur="5.038"> သင်ဘာလုပ်သနည်း >
< start="2043.639" dur="4.304"> ဥပမာပေးရမယ် >
< start="2045.474" dur="6.44"> ငါတို့တစ်ခုခု, ကုန်တင်ကားများ >
< start="2046.641" dur="5.906"> အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည် >
< start="2048.076" dur="7.24"> စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်သမား ဦး ဆောင်သူများ >
< start="2052.047" dur="6.439"> အလွန်အမင်း။ >
< start="2052.681" dur="8.308"> နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှီခိုရသည် >
< start="2055.45" dur="8.842"> ကဲ့သို့သောအဓိကထုတ်ကုန်များအတွက် >
< start="2058.653" dur="11.612"> ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံရှိအစားအစာများ >
< start="2061.122" dur="9.71"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးများနှင့် >
< start="2064.426" dur="8.942"> သူတို့အားကုန်ပစ္စည်းများမကြာခဏရောက်လာ >
< start="2070.399" dur="6.073"> ကားလမ်း >
< start="2070.966" dur="7.073"> ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်သည် >
< start="2073.502" dur="6.239"> ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေအကြောင်း >
< start="2076.605" dur="7.674"> သူတို့အားအထူးဝန်ဆောင်မှု >
< start="2078.173" dur="8.975"> ပံ့ပိုးမှုပါဝင်သည် >
< start="2079.875" dur="8.741"> နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးကိုကုသသည် >
< start="2084.413" dur="5.571"> AND ဤသည်ဝန်ကြီး HAJDU ဘာလဲ >
< start="2087.282" dur="5.372"> ယနေ့ကြောင်းပြောခဲ့သည် >
< start="2088.75" dur="6.874"> quarantine လျှောက်ထားမည်မဟုတ်ပါ >
< start="2090.151" dur="7.308"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများ။ >
< start="2092.788" dur="8.274"> ကျနော်တို့နားလည်မှု, သင်တန်း၏ >
< start="2095.757" dur="7.474"> ကမ္ဘာ့အခြေအနေနှင့် >
< start="2097.593" dur="8.107"> ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်တွင် FLU သည် >
< start="2101.196" dur="6.873"> ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေနှင့်အဖြစ် >
< start="2103.398" dur="6.173"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်မပြတ် AND BY ဖြစ်ကြသည် >
< start="2105.834" dur="5.839"> တစ်ချိန်လုံးငါဆိုလိုတာပါ >
< start="2108.203" dur="4.504"> နာရီ, ပြန်လည်သုံးသပ်အပိုဆောင်း >
< start="2109.705" dur="7.14"> တိုင်းတာမှုများပါ ၀ င်သည့်တိုင်းတာမှုများ >
< start="2111.807" dur="5.571"> နယ်နိမိတ်။ >
< start="2112.841" dur="6.473"> >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="2116.979" dur="3.904"> Dylon ။ >
< start="2117.512" dur="5.939"> >> ဒေါက်တာတောင်းပန်ပါတယ်ငါနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် >
< start="2119.448" dur="5.304"> ဝန်ကြီး Miller ကျနော်တို့ကြားနာပါတယ် >
< start="2121.016" dur="5.072"> တစ် ဦး စွမ်းရည်လွှဲပြောင်းအကြောင်း >
< start="2123.585" dur="3.737"> တောင်ပိုင်း, သောဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည် >
< start="2124.886" dur="4.672"> RES ROM RESROM ROM RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES ER RES RES RES RES RES >
< start="2126.221" dur="4.471"> လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ် >
< start="2127.456" dur="6.339"> Tele- ကျန်းမာရေး၏အားပေးမှု IS >
< start="2129.691" dur="10.778"> ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ >
< start="2130.826" dur="10.21"> DOCTORS မှလာရှိပါတယ် >
< start="2133.929" dur="9.009"> ဖြည့်စွက်ရန်နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်တယ် >
< start="2140.836" dur="3.336"> သော - >
< start="2141.169" dur="4.037"> >> Answe ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Dylon AND >
< start="2143.071" dur="3.804"> ထူးချွန်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="2144.306" dur="4.671"> သင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုအစီရင်ခံပါ >
< start="2145.54" dur="4.972"> အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စများ။ >
< start="2147.009" dur="5.005"> REALTIES ၏နံပါတ်ရှိပါတယ် >
< start="2149.11" dur="4.805"> သောဌာနေအသိုင်းအဝိုင်းရင်ဆိုင်နေရ >
< start="2150.646" dur="4.771"> သူနာပြုများ၏ရှားပါးမှုပါဝင်သည် >
< start="2152.147" dur="3.937"> နှင့်ဆရာဝန်များနှင့်၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် >
< start="2154.049" dur="3.57"> ကျွန်တော်နှင့်အတူဆွေးနွေးမှုများ >
< start="2155.55" dur="5.138"> ဌာနေလူမှုဆက်သွယ်ရေး INUIT >
< start="2156.217" dur="8.943"> ကြည့်ရှု METIS နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံများ >
< start="2157.753" dur="8.441"> စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ဆိုတာဘာလဲနှင့်ဘယ်လို >
< start="2160.822" dur="6.507"> အများဆုံးဖြည့်စွက်ရန် >
< start="2165.293" dur="3.37"> လျင်မြန်စွာအပြုအမူ။ >
< start="2166.328" dur="4.371"> ဒီနည်းကိုလက်ရှိဆွေးနွေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="2167.462" dur="6.406"> အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ >
< start="2168.797" dur="7.34"> တစ် ဦး မှအဖြေကိုငါမှဆြငျးပါလိမ့်မယ် >
< start="2170.832" dur="8.608"> တိုက်ရိုက်မေးခွန်းတွေအများကြီးပေမယ့် >
< start="2174.035" dur="8.942"> ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း >
< start="2176.271" dur="7.974"> ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်စွမ်းရည်ကိုရှာဖွေပါ >
< start="2179.574" dur="6.44"> THE - နှင့်ထောက်ပံ့အမြန် OR >
< start="2183.111" dur="4.805"> သောသတင်းစကားထဲက >
< start="2184.379" dur="5.739"> အများကြီးဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူလာ >
< start="2186.148" dur="4.871"> ငါရသောဘဏ္RESာရေးအရင်းအမြစ်များကိုကျော် >
< start="2188.05" dur="4.003"> ဒီနေ့မင်းစကားပြောပေမယ့်လည်း >
< start="2190.251" dur="3.904"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းမြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး >
< start="2191.186" dur="4.438"> ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာနှင့် >
< start="2192.187" dur="6.639"> ဆရာဝန်ရရှိရန်စွမ်းရည်နှင့် >
< start="2194.289" dur="5.639"> RAPID တွင်ဆိုဒ်ရှိသူနာပြုများ >
< start="2195.757" dur="5.839"> အကောင်းဆုံးလိမ့်မည်တစ်လမ်းအတွက်ဖက်ရှင် >
< start="2198.96" dur="4.305"> သူတို့အားအသိုင်းအဝိုင်းအစေခံ။ >
< start="2200.062" dur="3.937"> ကြွင်းသောအရာ TOM အဖြေကိုငါလွှတ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="2201.73" dur="4.037"> မေးခွန်း။ >
< start="2203.398" dur="5.238"> >>> မင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="2204.132" dur="6.106"> မေးခွန်း, ကြှနျုပျတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည် >
< start="2205.934" dur="5.672"> PHYSICIANS ၏ကွန်ယက်နှင့် >
< start="2208.77" dur="4.571"> သူနာပြုများနှင့်အခြားကျန်းမာရေး >
< start="2210.372" dur="6.039"> သူတို့ကိုအမိန့်မှာရှိတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် >
< start="2211.773" dur="5.105"> ရှာဖွေမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် >
< start="2213.475" dur="4.037"> စွမ်းရည်သည်ရပ်ရွာလိုအပ်သည် >
< start="2216.545" dur="2.602"> သော။ >
< start="2217.012" dur="4.737"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="2217.646" dur="6.139"> >> မေးခွန်း: DR အတွက်မေးခွန်း။ >
< start="2219.281" dur="6.506"> NJOO, ငါတို့ဖြစ်ကြောင်း PROINCES ရှိသည် >
< start="2221.883" dur="5.972"> ဂြိုလ်တု LABS သို့ပြောင်းရွှေ့ >
< start="2223.952" dur="6.606"> သူတို့ရဲ့ဗဟို Labs မှ။ >
< start="2225.921" dur="6.773"> အရာအားလုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ် >
< start="2227.989" dur="7.074"> အမျိုးသားရေး Lab ကအတည်ပြု? >
< start="2230.692" dur="7.641"> ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစံနှုန်းကားအဘယ်နည်း >
< start="2232.828" dur="10.377"> ရလဒ်များမှရလဒ်များပြန်သွား >
< start="2235.197" dur="8.608"> နှင့်လက်ရှိနောက်ခံကဘာလဲ >
< start="2238.467" dur="7.573"> ကို AT စမ်းသပ်ခံရဖို့နမူနာ၏ >
< start="2243.371" dur="4.204"> MNL ။ >
< start="2243.939" dur="5.538"> >>> စမ်းသပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ >
< start="2246.174" dur="5.739"> အစပျိုး, အစ >
< start="2247.709" dur="7.574"> ဇန်နဝါရီလအတွင်းအခြေအနေ >
< start="2249.611" dur="7.474"> ဓာတ်ခွဲခန်းအားလုံး >
< start="2252.047" dur="6.606"> ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုပြီးပြီ >
< start="2255.417" dur="4.671"> MIKRO ဇီဝဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း။ >
< start="2257.219" dur="4.937"> ထင်ရှားသောအရာဆိုတာထင်ရှားပါတယ် >
< start="2258.853" dur="4.571"> ငါတို့အကြားကောငျးတဲ့စုဆောင်းမှု >
< start="2260.222" dur="4.304"> အတွင်းခန်းနှင့် >
< start="2262.29" dur="5.439"> Provinces နှင့်နယ်မြေများနှင့် >
< start="2263.558" dur="6.973"> NOW ကကျွန်ုပ်တို့တွင်စည်းမျဉ်းများစွာရှိသည် >
< start="2264.659" dur="8.642"> ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်အရာရှိသည် >
< start="2267.863" dur="9.976"> အကဲဖြတ်အတည်ပြုနိုင်အောင်မရှိပါ >
< start="2270.665" dur="9.209"> သောစမ်းသပ်နိုင်သူရှိဖို့လို >
< start="2273.435" dur="9.042"> အယ်လ်ဘာတာလျှင် MNL တွင်အတည်ပြုသည်။ >
< start="2277.972" dur="7.642"> အွန်တိုရီယို, Quebec, ကြောင်းအတည်ပြု >
< start="2280.008" dur="7.808"> သောအတည်ပြုသည်, အိုင်တီမပါ >
< start="2282.611" dur="7.707"> DMNL သွားရန်ရှိသည်။ ကူညီပေးဖို့ >
< start="2285.747" dur="6.206"> မသေးသောသေးငယ်တဲ့စီရင်စုများ >
< start="2287.949" dur="6.807"> သောစွမ်းရည်နှင့်ဆက်ရှိနေရှိသည် >
< start="2290.452" dur="5.606"> လှည့်ပတ်ပတ်လည်စည်းကမ်းချက်များ၌ >
< start="2292.086" dur="5.639"> တစ်ခါသူတို့အိုင်တီရပြီ >
< start="2294.89" dur="5.738"> တစ်ရက်ထက်နည်းနည်းယူ။ >
< start="2296.191" dur="8.007"> >>> အိုကေ။ >
< start="2297.859" dur="7.474"> မတိုင်မီနောက်ဆုံး FOR ခန်း >
< start="2300.762" dur="5.772"> ဖုန်းကိုပြန်သွား။ >
< start="2304.332" dur="4.739"> ကယ်လီ, REUTERS ။ >
< start="2305.5" dur="6.439"> >> မေးခွန်း: ကျွန်ုပ်၏ပထမမေးခွန်း >
< start="2306.668" dur="6.74"> DR FOR IS NJOO, အိုင်တီခွင့်ပြုသည် >
< start="2309.303" dur="5.272"> အသုံးပြုရန်နှင့်ရောင်းချရန်အစိုးရ >
< start="2312.073" dur="3.136"> မူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှု >
< start="2313.542" dur="2.835"> တုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည် >
< start="2314.709" dur="5.772"> ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်။ >
< start="2315.343" dur="10.41"> >>> ငါအံ့သြစရာဒီနည်းကိုလုပ်ပါတယ် >
< start="2316.511" dur="13.013"> မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်၎င်းကိုခဲစေနိုင်သည် >
< start="2320.615" dur="10.844"> မသင်မနေရလိုင်စင်များကို? >
< start="2325.92" dur="7.641"> >> ငါ၏အနယ်ပယ်ထဲက >
< start="2329.658" dur="5.171"> ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ။ >
< start="2331.593" dur="5.071"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည် >
< start="2333.695" dur="4.504"> ကနေဒါဒါပေမဲ့သင်ကြည့်နေရင် >
< start="2334.963" dur="6.005"> လိုင်စင်ချထားပေးသောစည်းကမ်းများကျွန်ုပ်မပါ ၀ င်ပါ >
< start="2336.798" dur="5.539"> အဖြေတစ်ခု။ >
< start="2338.366" dur="5.84"> >>> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသိသာသာသိကျွမ်းသည် >
< start="2341.102" dur="5.94"> ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး >
< start="2342.47" dur="7.04"> HAJDU ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတည်ပြုခဲ့သည် >
< start="2344.339" dur="6.139"> အသစ်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းပညာ SO ငါ >
< start="2347.175" dur="4.438"> POSTURE PUTTING သို့စကားပြောနိုင်သည် >
< start="2349.644" dur="3.404"> ၏စည်းကမ်းချက်များရှေ့သို့ >
< start="2350.612" dur="5.606"> လော်ရာချဉ်းကပ်နည်းစမ်းသပ် >
< start="2351.746" dur="5.005"> အထူးလိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ >
< start="2353.181" dur="6.44"> ငါမပြောနိုင်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ >
< start="2356.351" dur="3.871"> သော။ >
< start="2356.885" dur="4.704"> >>> တစ် ဦး ကိုရိုက်ကူး Worth ။ >
< start="2359.754" dur="3.671"> [ရယ်သံများ] >
< start="2360.355" dur="3.937"> >> မေးခွန်းမေးခွန်း - ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်သည် >
< start="2361.723" dur="4.671"> ဝန်ကြီး MORNEAU, သင်ကပြောခဲ့ပြီ >
< start="2363.558" dur="4.171"> အဲဒီမှာသွားမယ့် >
< start="2364.426" dur="5.305"> အပိုဆောင်းအကူအညီနှင့်အပိုဆောင်း >
< start="2366.528" dur="4.871"> တိုင်းတာခြင်းလာ။ >
< start="2367.863" dur="4.837"> ငါဘယ်အချိန်မှာသင်သိနိုင်အံ့အံ့သြတယ် >
< start="2369.864" dur="5.706"> ဒီအကူအညီနဲ့ဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင် >
< start="2371.533" dur="5.805"> အိုင်တီ၌ရှိမယ့် Areas >
< start="2372.834" dur="8.375"> ငါတို့မြင်သွားကြသကဲ့သို့ကောင်းစွာ >
< start="2375.704" dur="7.34"> စွမ်းအင် Package? >
< start="2377.472" dur="7.54"> >> အဖြေ: ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ >
< start="2381.343" dur="5.772"> ငါတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသေချာသွားပါ >
< start="2383.211" dur="5.405"> အရေးပေါ်နှင့်အရေးကြီးဆုံး >
< start="2385.146" dur="5.505"> ကျွန်ုပ်တို့ထံမှပထမနှင့်အဘယ်အရာထုတ်ပေးသနည်း >
< start="2387.249" dur="4.637"> ကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီအမြင် >
< start="2388.75" dur="4.371"> အဲဒီမှာကနေဒါဖြစ်လိမ့်မည်, >
< start="2390.785" dur="3.337"> ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကနေဒါအများအပြား >
< start="2392.02" dur="4.771"> ဝင်ငွေမရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့ >
< start="2393.255" dur="5.972"> ဖြစ်နိုင်ပြီးသောအတိတ်တွင် >
< start="2394.256" dur="6.573"> လာမည့်နေ့များနှင့်ဘာကြောင့်လဲ >
< start="2396.925" dur="5.405"> ကျနော်တို့သောပထမ ဦး ဆုံးထားပါတယ် >
< start="2399.361" dur="4.438"> THE AGENDA တော်တော်လေးကိုအရာ >
< start="2400.962" dur="3.904"> ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြောခဲ့တယ် >
< start="2402.464" dur="3.836"> သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောကျပံ့ဖို့ >
< start="2403.932" dur="3.369"> ဘယ်မှာမှဤအချိန်ကိုဖြတ်ကူးနိုင်သလား >
< start="2405" dur="3.703"> WE GET တဲ့အခါငါတို့ယနေ့ဖြစ်ကြသည် >
< start="2406.434" dur="3.604"> ဒီစာစောင်မှတဆင့်။ >
< start="2407.435" dur="3.103"> ဒါကြောင့်ငါတို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည် >
< start="2408.837" dur="4.437"> Multiple Front တွင်အလုပ်လုပ်ရန် >
< start="2410.204" dur="5.406"> တူညီတဲ့အချိန်။ >
< start="2410.672" dur="6.439"> ကျွန်ုပ်တို့သေချာစေရန်လိုအပ်သည် >
< start="2413.408" dur="6.273"> ဘဏ္FINာရေးလုံလောက်သောပြီ >
< start="2415.776" dur="5.406"> လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီများအတွက်စွမ်းရည် >
< start="2417.245" dur="5.772"> သောအချိန်ဖြစ်နိုင်သမျှဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲ >
< start="2419.814" dur="4.405"> ကျနော်တို့လုပ်ရန်ဘဏ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် >
< start="2421.316" dur="5.905"> ချေးငွေရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာသည် >
< start="2423.151" dur="5.739"> အသေးစားနှင့်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ >
< start="2424.352" dur="5.706"> AND အိုင်တီငါတို့ဖြစ်ရမည်ဆိုလိုတာက >
< start="2427.355" dur="3.537"> တစ်ခုတည်းမဟုတ်အကြောင်းစဉ်းစား >
< start="2429.024" dur="3.169"> ကုမ္ပဏီများ၏အကြေးခွံဒါပေမယ့်လည်း >
< start="2430.191" dur="3.437"> အထူးကဏ္Sများ။ >
< start="2431.026" dur="5.705"> သငျသညျဖော်ပြလိုသောဓာတ်ငွေ့လို >
< start="2432.36" dur="5.806"> ရေနံကဏ္,၊ စွမ်းအင်ကဏ္ IT >
< start="2433.762" dur="5.872"> သောကဏ္ECTတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="2436.865" dur="6.839"> အထူးသဖြင့် Hard HIT ကြောင့် >
< start="2438.299" dur="7.341"> သူတို့နှစ် ဦး စလုံးထုတ်ပေးရှိသည် >
< start="2439.768" dur="7.74"> COVID-19 အခက်အခဲနှင့် >
< start="2443.838" dur="4.371"> ဓာတ်ငွေ့၏နိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့် >
< start="2445.773" dur="3.67"> OPEC ၏ရလာဒ်အဖြစ် OIL >
< start="2447.642" dur="3.837"> ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ >
< start="2448.343" dur="4.27"> ဒါငါတို့ AT ရဲ့ဆိုလိုတာကငါတို့သိတယ် >
< start="2449.61" dur="5.172"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာများ၏ရှေ့မှောက်နီး >
< start="2451.612" dur="4.471"> နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခံရဖို့လိုပါတယ် >
< start="2452.78" dur="4.138"> သောသူတို့သည်အသေးစား AND >
< start="2454.916" dur="2.603"> သောအလယ်အလတ်အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ >
< start="2456.217" dur="3.27"> ကဏ္အထူးသဖြင့်ဖြစ်ကြသည် >
< start="2457.052" dur="5.071"> အားနည်းချက်။ >
< start="2457.652" dur="6.506"> ဒါပေမဲ့ငါသေချာအောင်ချင်တယ် >
< start="2459.62" dur="7.075"> လူတွေအိုင်တီယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက် >
< start="2462.257" dur="6.506"> ကျနော်တို့ကြည့်ရှုပါကဏ္များ >
< start="2464.292" dur="5.539"> THE မှာလေကြောင်းကဏ္ S >
< start="2466.828" dur="3.937"> IS ဆေးရုံကဏ္ S >
< start="2468.897" dur="4.171"> ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ခြင်း၊ >
< start="2469.965" dur="3.703"> သူတို့အဘို့အပ်။ >
< start="2470.899" dur="5.138"> ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရှိသည်လိမ့်မည်သည့်အခါစည်းကမ်းချက်များ၌ >
< start="2473.201" dur="4.337"> ပြောရန်။ >
< start="2473.802" dur="6.739"> ထဲမှာ, veneer ပြောပြသည် >
< start="2476.171" dur="6.873"> ကျနော်တို့ပေးချင်သောနေ့ရက်များ >
< start="2477.772" dur="6.74"> နားလည်မှုပိုပြည့်စုံသောလူများ >
< start="2480.675" dur="5.672"> ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများလိမ့်မည် >
< start="2483.178" dur="3.636"> အကောင်းဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိလျှော့ချထားသည် >
< start="2484.678" dur="3.437"> ဒီအခက်အခဲအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="2486.481" dur="4.237"> အချိန်။ >
< start="2486.948" dur="5.639"> ဒီနေ့ငါအမေရိကန်ကြားသိတာကိုငါစဉ်းစားမိတယ် >
< start="2488.249" dur="6.006"> IS မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောငါတို့မဟုတ် >
< start="2490.852" dur="5.205"> လူတွေရရှိရန်အာမခံချက် >
< start="2492.721" dur="4.837"> လေးလအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သို့ဖြစ်သော်လည်း၊ >
< start="2494.389" dur="5.238"> သောအရာတစ်ခုခု >
< start="2496.191" dur="4.904"> ကုမ္ပဏီများတိုက်ရိုက်အားသာချက် >
< start="2497.692" dur="4.271"> ကုမ္ပဏီများမလိုအပ်သောကြောင့် >
< start="2499.761" dur="3.803"> သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုခွဲခြားရန် >
< start="2501.229" dur="4.738"> သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ။ >
< start="2502.097" dur="5.671"> သူတို့မပြောနိုင်လောက်အောင်လိုသေးတယ် >
< start="2503.698" dur="5.639"> ဤအချိန်အတွင်းသင်ပေးဆပ်ပါ >
< start="2506.101" dur="4.837"> အဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါတစ် ဦး >
< start="2507.902" dur="4.504"> လူများအားတိုက်ရိုက်လုပ်ခပေးချေမှု၊ >
< start="2509.471" dur="4.771"> သူတို့တတ်နိုင်သမျှအလုပ်ရှင်များ >
< start="2511.072" dur="4.671"> တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအသက်ရှင် >
< start="2512.54" dur="6.24"> ဒီနည်းကို Done, သူတို့ပြန်သွားနိုင်သလား >
< start="2514.376" dur="4.971"> သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့် >
< start="2515.877" dur="5.939"> ကျနော်တို့ဝေဖန်စဉ်းစားပါ >
< start="2518.913" dur="4.438"> အရေးကြီးတယ် >
< start="2519.48" dur="6.507"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="2521.95" dur="4.638"> ကျနော်တို့သုံးယူသွားတော့မည် >
< start="2523.485" dur="4.003"> ပြင်သစ်တွင်မေးခွန်းများ >
< start="2526.12" dur="6.607"> စတင်။ >
< start="2526.721" dur="10.578"> [ပြင်သစ်စကားပြော] >
< start="2527.622" dur="12.646"> >> (ဘာသာပြန်၏အသံ): >
< start="2532.861" dur="10.043"> >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="2537.432" dur="7.106"> Mr. MORNEAU၊ ငါကြိုက်လိမ့်မယ် >
< start="2540.402" dur="7.707"> သင်၏ပထမဆုံးအကူအညီကိုနားလည်ပါ >
< start="2543.038" dur="8.374"> ကြေငြာချက်တစ်ပတ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="2544.672" dur="9.343"> ပြီးပြီသင် WE ပါတယ်ဟုပြောသည် >
< start="2548.376" dur="8.775"> APပြီ6ရက် F ကို AN >
< start="2551.546" dur="7.273"> Online Portal, နောက်ထပ် ၁၀ ရက် >
< start="2554.148" dur="8.575"> သော 17 မှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့သော >
< start="2557.285" dur="7.874"> ANDပြီလနှင့်မစ္စတာ TRUDEAU အိုင်တီကပြောပါတယ် >
< start="2558.953" dur="7.874"> အဘို့အနည်းငယ်သောနေ့ရက်ကာလယူ >
< start="2562.857" dur="5.305"> 27 ရဲ့ SO စစ်ဆေးပါ။ >
< start="2565.293" dur="4.537"> လူတွေဒီပိုက်ဆံတကယ်လိုအပ်နေတယ် >
< start="2566.961" dur="4.571"> ချက်ချင်း AND သင်ကသူတို့ကိုပြောပြနေပါတယ် >
< start="2568.296" dur="4.471"> သင့်ရဲ့အချိန်ကနေ 27 ရက် >
< start="2569.964" dur="3.938"> ပထမ ဦး ဆုံးကြေငြာချက်နှင့်အခါ >
< start="2571.666" dur="3.304"> စစ်ဆေးပါ။ >
< start="2572.901" dur="3.369"> သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော IS >
< start="2574.102" dur="3.803"> လက်ရှိအခြေအနေ။ >
< start="2575.103" dur="4.003"> သင်ဤကဲ့သို့သောတရားမျှတမှုကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း >
< start="2576.404" dur="3.303"> နှောင့်နှေး? >
< start="2578.039" dur="6.072"> >> အဖြေ: သင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="2579.24" dur="8.775"> မေးခွန်း။ >
< start="2579.841" dur="9.742"> >>> ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည် >
< start="2584.245" dur="9.876"> အခြေအနေကအရေးပေါ် IS >
< start="2588.149" dur="7.941"> ဘာကြောင့်ရိုးရိုးလေးရှာရတာလဲ >
< start="2589.717" dur="9.009"> ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီပေးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်း >
< start="2594.255" dur="8.142"> AND ငါတို့အဆိုပြုထားသောအရာကိုပါပဲ။ >
< start="2596.224" dur="8.908"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်စနစ်တစ်ခုရှိတော့မည် >
< start="2598.927" dur="8.007"> သောလူမှကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည် >
< start="2602.53" dur="8.642"> လာမည့်အပတ်။ >
< start="2605.266" dur="8.175"> ကျနော်တို့စတင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ကြ >
< start="2607.101" dur="13.914"> 6ပြီ ၆ ရက်အပတ်ငါမပြောနိုင်ဘူး >
< start="2611.306" dur="10.611"> သင်ဖြစ်သည့်အတွက်အတိအကျသောနေ့စွဲတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="2613.575" dur="11.011"> ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုသေချာစေပါ >
< start="2621.149" dur="5.839"> အလုပ်လုပ်ခြင်း။ >
< start="2622.05" dur="6.339"> ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ငါတို့စနစ်မရှိခဲ့ပါ >
< start="2624.719" dur="5.305"> ဒီနည်းကိုပေါ်ပေါက်နိုင်စွမ်း >
< start="2627.121" dur="3.403"> စိန်ခေါ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်လိုတာလဲ >
< start="2628.556" dur="3.503"> ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ယခုတစ်လမ်းရှာဖွေနေ >
< start="2630.158" dur="3.503"> ဒီနည်းကို။ >
< start="2630.658" dur="6.073"> အိုင်တီအရေးတကြီးအရေးကြီးတယ် AND >
< start="2632.193" dur="5.772"> ဒီမှာရှိမယ့်။ >
< start="2633.795" dur="5.772"> ငါနောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ယူလိမ့်မည်ငါ >
< start="2636.865" dur="4.003"> KNOW ငါအိုင်တီခက်ခဲတဲ့ KNOW >
< start="2638.099" dur="6.973"> လူတွေနှင့်သော >
< start="2639.701" dur="7.607"> စစျမှနျသော, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီလုပ်ဖို့ရှိသည်။ >
< start="2641.002" dur="7.24"> ကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်းကပ်ရန်လိုသည် >
< start="2645.206" dur="5.172"> အခြေအနေများအပြင်အခြေအနေများ >
< start="2647.442" dur="4.304"> ဆိုးရွားလိမ့်မည်။ >
< start="2648.476" dur="6.039"> >>> ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နေ့ရက်များအတွင်း >
< start="2650.512" dur="7.173"> သွားနောက်ထပ်အသေးစိတ်ရှိသည်, >
< start="2651.88" dur="7.908"> သင့်ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် >
< start="2654.649" dur="8.641"> အတိအကျဘယ်လိုနှင့်ဘယ်အချိန်မှာ၏ >
< start="2657.852" dur="8.042"> ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ရသည့်သင်တန်း >
< start="2659.921" dur="8.108"> ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ >
< start="2663.424" dur="6.273"> ချဉ်းကပ်မှုကောင်းရှိသည်။ >
< start="2666.027" dur="4.871"> >>> ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်အလွန်တိကျသည်။ >
< start="2668.163" dur="5.471"> တစ်စုံတစ် ဦး ကနိုင်လျှင်ငါသေချာမသိဘူး >
< start="2669.831" dur="8.308"> ဒါကိုဖြေပါ။ >
< start="2671.032" dur="10.51"> သင်အဖြေမရှိလျှင် >
< start="2673.768" dur="10.01"> အဆင်ပြေပေမယ့်အလုပ်ရဲ့ >
< start="2678.273" dur="6.639"> ဒီနည်းကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နေ >
< start="2681.676" dur="5.105"> ရန်ပုံငွေဖြန့်ဝေရန်စနစ် >
< start="2683.912" dur="3.77"> ကနေဒါ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသောအခါ >
< start="2685.046" dur="3.837"> လုပ်ရန်အမှန်တကယ်စတင်လုပ်ဆောင်ပါ >
< start="2686.915" dur="2.468"> စနစ်အလုပ်လုပ်? >
< start="2687.815" dur="3.103"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်ကြေငြာချက်ကိုကြားခဲ့ရသည် >
< start="2689.017" dur="4.57"> အပတ်။ >
< start="2689.517" dur="6.806"> ကျနော်တို့ငွေတောင်းခံဖို့မျှော်လင့်ထား >
< start="2691.052" dur="7.141"> မွေးစားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာငါတို့သိချင်တယ် >
< start="2693.721" dur="5.339"> သငျသညျတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့သည် >
< start="2696.457" dur="5.606"> သင်သွားနေသည့်စနစ် >
< start="2698.326" dur="7.04"> အကောင်အထည်ဖော်မှု? >
< start="2699.194" dur="8.608"> >> အဖြေ: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="2702.197" dur="8.174"> WE စတင်ခဲ့သည် - ငါတို့သည်စတင်ခဲ့သည် >
< start="2705.5" dur="8.675"> ချဉ်းကပ်အတိတ်၏အနီးအနား SO SO >
< start="2707.936" dur="7.441"> ပြီးခဲ့သည့်အောက်၌ရှိ၏ >
< start="2710.538" dur="8.341"> ယခုငါတို့သေချာစေရန်လိုသည် >
< start="2714.309" dur="5.638"> အကြေးခွံနှင့်အဆင့်ပေးပါ >
< start="2715.51" dur="5.706"> ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည်ကိုတောင်းဆိုပါ >
< start="2719.013" dur="3.303"> ပိုက်ဆံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည် >
< start="2720.081" dur="5.038"> အဲဒီမှာလူ။ >
< start="2721.349" dur="12.045"> အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ >
< start="2722.45" dur="14.014"> >>> နောက်ထပ်ယူရန်သွားတော့မည် >
< start="2725.253" dur="13.08"> ဒီနည်းကိုသွားနှင့်အလုပျဖွစျသညျ >
< start="2733.527" dur="6.641"> လွန်ခဲ့သောအပတ်ထက်ပိုပြီးစတင်ခဲ့သည်။ >
< start="2736.597" dur="5.873"> ငါတို့သည်အသုံးဖို့သွားမယ် >
< start="2738.466" dur="5.372"> အများဆုံးထိရောက်မှုစနစ် >
< start="2740.301" dur="7.374"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရသေချာစေရန် >
< start="2742.603" dur="7.508"> သောရန်ပုံငွေရှိပါတယ်။ >
< start="2743.971" dur="8.542"> >>> AND WE ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် >
< start="2747.809" dur="6.205"> တစ် ဦး တည်းရှိသည်ဖို့ဒီအပတ် >
< start="2750.245" dur="6.305"> အားလုံးအတှကျအကြိုးခံစား >
< start="2752.647" dur="7.006"> ဘယ်မှာအခြေအနေမျိုးမှာကနေဒါ >
< start="2754.148" dur="9.242"> သူတို့သည်ဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့် >
< start="2756.684" dur="10.51"> COVID-19 ၏အကြောင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်။ >
< start="2759.787" dur="9.376"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်စနစ်တစ်ခုရှိထားသည် >
< start="2763.524" dur="7.441"> ထိရောက်မှုနှင့်လုံလောက်သည် >
< start="2767.328" dur="5.705"> ငါတို့သေချာပါစေအဲဒီမှာ >
< start="2769.297" dur="6.773"> သူတို့အဘို့ငါတှေ့တှေ့ A >
< start="2771.099" dur="10.476"> ကောင်းသောအဖြေနှင့်ကျွန်တော်သွားပါလိမ့်မယ် >
< start="2773.167" dur="8.875"> ထိုအရာကိုသေချာစေရန်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ >
< start="2776.204" dur="9.476"> အဆိုပါစနစ်အိုင်တီအဖြစ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် >
< start="2781.709" dur="7.608"> သင့်၏။ >
< start="2782.176" dur="10.444"> >>> နောက်မေးခွန်း, ကျေးဇူးပြု။ >
< start="2785.813" dur="7.908"> >>> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="2789.45" dur="6.606"> Alex ၏ထံမှလာမည့်မေးခွန်း >
< start="2792.754" dur="5.271"> "Toronto ကြယ်ပွင့်။ " >
< start="2793.855" dur="5.805"> >> မေးခွန်း: နောက်လာမည့် >
< start="2796.223" dur="8.076"> ငါဘဏ္THEာရေး၏ခန့်မှန်းအဆင့် >
< start="2798.159" dur="8.041"> ကဏ္Sအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့်အကူအညီ \_ t >
< start="2799.794" dur="7.474"> ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုလုပ်သည် >
< start="2804.432" dur="5.839"> THE ပေးရမည်အထက်လွှတ်တော် BY ဖြတ် >
< start="2806.334" dur="5.772"> အစိုးရမှအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပါဝါ >
< start="2807.402" dur="7.707"> ထဲကပေးပို့ဖို့, အသုံး >
< start="2810.405" dur="6.205"> ဒီနည်းကိုအတွက်နောက်တစ်ခုခြေလှမ်း >
< start="2812.239" dur="6.84"> ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိဘဲ? >
< start="2815.243" dur="5.138"> နောက်ထပ်ငွေတောင်းခံခြင်းမရှိဘဲ? >
< start="2816.744" dur="5.639"> >> အဖြေ: ငါဒီမေးခွန်းကိုထင် >
< start="2819.213" dur="4.004"> ငါ့အတွက်လား >
< start="2820.514" dur="5.039"> >> မေးခွန်း: ဟုတ်သည်။ >
< start="2822.517" dur="5.305"> >>> ငါအရမ်းလုပ်ပါ။ >
< start="2823.351" dur="6.172"> >> အဖြေ: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရာ >
< start="2825.686" dur="5.473"> စွမ်းရည်ရှိဖို့လိုတယ် >
< start="2827.955" dur="6.14"> လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အစိုးရ။ >
< start="2829.657" dur="7.507"> ကျွန်ုပ်တို့လည်းဒီနည်းကိုစဉ်းစားရန်လိုသည် >
< start="2831.292" dur="7.374"> ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှု။ >
< start="2834.228" dur="6.239"> ကြှနျုပျတို့ရရှိသော KNOW >
< start="2837.298" dur="6.139"> ချေးငွေအဘို့အခွင့်အလမ်း >
< start="2838.8" dur="7.84"> အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ >
< start="2840.601" dur="9.176"> LARGE သည်အရေးကြီးသည်။ >
< start="2843.571" dur="7.675"> ကြှနျုပျတို့လုပျဆောငျဖို့အမိန့်ကိုသိ >
< start="2846.807" dur="9.143"> ကျနော်တို့အခွင့်အာဏာရှိဖို့လိုတယ် >
< start="2850.01" dur="8.275"> ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေချာစေရန် >
< start="2851.379" dur="9.275"> ကနေဒါဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် AND >
< start="2856.083" dur="5.906"> ပို့ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည် >
< start="2858.419" dur="5.939"> ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်လယ်ယာမြေနိုင် >
< start="2860.788" dur="5.672"> AS ငွေတောင်းခံခရက်ဒစ်ကနေဒါ >
< start="2862.123" dur="6.873"> အိုင်တီယခုတွင်ကြည့်ရှုနေရဲ့ >
< start="2864.525" dur="9.61"> SENATE ထိုသူတို့ကို LIFT ဖို့စေသည် >
< start="2866.594" dur="9.209"> ကျွန်ုပ်တို့ကယ်လွှတ်နိုင်သည့်ကန့်သတ်ချက်များ >
< start="2869.13" dur="8.842"> ဘဏ္FINာရေးချေးငွေ၏ပမာဏ >
< start="2874.268" dur="6.607"> အားလုံးဆီသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား >
< start="2875.936" dur="6.44"> သူတို့အားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် >
< start="2878.106" dur="6.84"> ပါလီမန်ကဒီအတည်ပြုခဲ့သည် >
< start="2881.008" dur="4.871"> နံနက် ၆ နာရီမှာသင်သိတဲ့အတိုင်း >
< start="2882.51" dur="4.537"> သောလုပ်ပေးသောငါတို့ကိုခွင့်ပြု >
< start="2885.079" dur="3.303"> သောစွမ်းရည်။ >
< start="2886.013" dur="3.837"> ငါတို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်း >
< start="2887.181" dur="4.505"> ရရန်အတွက်အတူတကွအတူတကွ >
< start="2888.516" dur="6.139"> ဘယ်လိုနိဂုံးချုပ်နိုင်သလဲ >
< start="2890.05" dur="6.407"> WE အိုင်တီရရှိသောအကောင်းဆုံးအာမခံပါ >
< start="2891.819" dur="6.039"> စီးပွားရေး BS မှအမြန်လမ်းအတွက် >
< start="2894.789" dur="5.872"> ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများ။ >
< start="2896.591" dur="5.972"> >> မေးခွန်း: ့တစ် ဦး အဖြစ် >
< start="2897.992" dur="6.507"> နောက်ဆက်တွဲ, ငါဒီနည်းကိုထင်စေခြင်းငှါ >
< start="2900.795" dur="6.64"> ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ်၊ >
< start="2902.697" dur="6.673"> အဆိုပါပြဌာန်းထားသော mandatorju >
< start="2904.632" dur="6.907"> ဤအရာအများကြီးကိုငါတို့သိကြ၏ >
< start="2907.568" dur="6.039"> Spring မှပြန်လာ၏ >
< start="2909.504" dur="7.173"> နံနက်ခင်း, ငါတို့နေရပ်ပြန်မြင်ကြပြီ >
< start="2911.739" dur="6.54"> လတ်တလောနေ့များသို့ပျံသန်းခြင်း။ >
< start="2913.741" dur="5.939"> ဒီနည်းကို RETROACTIVELY နဲ့သက်ဆိုင်လိမ့်မယ် >
< start="2916.811" dur="6.206"> ပြန်လာကြတဲ့လူတွေ >
< start="2918.413" dur="5.138"> မကြာသေးမီကကနေဒါ? >
< start="2919.814" dur="5.038"> ငါလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်ခန့်မှန်း >
< start="2923.684" dur="9.11"> >> NO ။ >
< start="2924.986" dur="9.642"> ပုံမှန်အထီးကျန်သက်ဆိုင်သည် >
< start="2929.99" dur="7.741"> အားလုံး FOR ညသန်းခေါင်တွင်ယနေ့ည >
< start="2932.927" dur="8.608"> ကနေဒါသို့ခရီးသွားများ။ >
< start="2934.762" dur="8.975"> ပြီးတော့ငါ့ကိုသတိရစေ >
< start="2937.865" dur="8.475"> လူတွေပြောတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ >
< start="2941.669" dur="7.741"> သူတို့အားကနေဒါသို့သူတို့ကို >
< start="2943.871" dur="7.073"> Kiosk ငါတို့မိသားစုနှင့်အတူရှိကြ၏ >
< start="2946.474" dur="7.44"> ခိုင်မာစွာသောမျက်နှာပြင်ကို GET >
< start="2949.577" dur="5.605"> သင့်အားသီးခြားခွဲထားရန်အကြံပြုသည် >
< start="2951.078" dur="6.039"> ၁၄ ရက်အတွင်းသင်ပြီးပြီ >
< start="2954.048" dur="3.67"> သင်၌ရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုပါ >
< start="2955.316" dur="4.671"> သောခိုင်ခံ့သောလက်ခံရရှိခဲ့သည် >
< start="2957.251" dur="4.538"> အကြံပြုချက်များ။ >
< start="2957.852" dur="5.572"> ဒီနေရာမှာပြီးသားဒါ, >
< start="2960.121" dur="4.938"> လူတွေရှိနေပြီးရှင်းလင်း, BEAR >
< start="2961.922" dur="5.639"> ဒီနည်းကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်၊ လိုအပ်တယ် >
< start="2963.558" dur="7.473"> သူတို့ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန် >
< start="2965.193" dur="8.274"> ဒီနည်းကိုလုပ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ >
< start="2967.695" dur="7.575"> WE သန်းခေါင်ယံမှယနေ့ညလိမ့်မည် >
< start="2971.165" dur="6.907"> ၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်ယူခြင်း >
< start="2973.601" dur="7.207"> အားလုံးပြန်လာ - ကောင်းပြီ, အားလုံး >
< start="2975.403" dur="8.408"> ကနေဒါသို့ရောက်ရှိလာသောလူများနှင့် >
< start="2978.206" dur="6.807"> ထိုအခါသူတို့နှင့်အတူလိုက်ကြလိမ့်မည် >
< start="2980.942" dur="5.371"> သူတို့ IndEED ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် >
< start="2983.945" dur="5.538"> ၏အကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန် >
< start="2985.146" dur="6.439"> မွန်းတည့်သောညသန်းခေါင်။ >
< start="2986.447" dur="7.574"> ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုသရုပ်ဖော်ပါစေ, သင်ရပါမည် >
< start="2989.617" dur="6.673"> ပြီးသားအိုင်တီလုပ်နေ။ >
< start="2991.719" dur="7.107"> ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတတ်နိုင်သည့်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="2994.155" dur="7.941"> ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးရန် >
< start="2996.424" dur="7.073"> ကနေဒါနှင့်အဆုံးစွန်၏ >
< start="2998.959" dur="6.006"> ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပြန်အမ်းငွေသေချာစေရန် >
< start="3002.229" dur="5.038"> ပိုမိုလျင်မြန်စွာလာ။ >
< start="3003.631" dur="4.07"> ကျနော်တို့ CURVTEN ချနိုင်လျှင် >
< start="3005.099" dur="6.406"> WE သာမန်ဘဝသို့ပြန်သွားနိုင်သည် >
< start="3007.401" dur="5.439"> ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ။ >
< start="3011.639" dur="6.506"> >>> အိုကေ၊ နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="3012.974" dur="6.239"> ထို့နောက်ဖုန်းနှင့်မေးခွန်း >
< start="3016.11" dur="4.104"> ကျနော်တို့ထဲကနေယူပါလိမ့်မယ် AND >
< start="3018.279" dur="19.153"> အိုင်တီ A ခေါ်ပါ >
< start="3019.346" dur="18.086"> >> မေးခွန်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="3149.543" dur="4.705"> ။ >
< start="3150.11" dur="6.307"> E ရှိပြီးသား >
< start="3151.679" dur="10.01"> ကနေဒါနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ >
< start="3154.315" dur="7.708"> လူတွေလိုအပ်တဲ့ရိက္ခာ၊ >
< start="3156.484" dur="6.94"> အသက်ရှင်ရန်နှင့်ပင်ရှင်သန်ရန် >
< start="3161.756" dur="3.136"> ကနေဒါ။ >
< start="3162.089" dur="6.072"> သို့သော် COUE, EA ရှိသည် >
< start="3163.491" dur="8.575"> ဘာကိုသတိထားသင့်သလဲ >
< start="3164.959" dur="7.607"> အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပျက်။ >
< start="3168.228" dur="5.272"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="3172.199" dur="2.169"> >> မေးခွန်း။ >
< start="3172.633" dur="3.637"> ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှ KE ။ >
< start="3173.567" dur="3.57"> သင်ရပါပြီ။ >
< start="3174.435" dur="4.304"> ဖုန်းပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမေးခွန်း >
< start="3176.337" dur="2.902"> ထိုအခါ။ >
< start="3177.204" dur="6.44"> အော်ပရေတာ။ >
< start="3178.872" dur="8.108"> >> ဆက်ဆက်။ >
< start="3179.306" dur="8.442"> နောက်လာမည့်မေးခွန်းသည် Lorn ထံမှဖြစ်သည် >
< start="3183.711" dur="5.204"> နိုင်ငံရေးကနေဥယျာဉ်မှူး။ >
< start="3187.047" dur="3.737"> သွားကြပါ။ >
< start="3187.815" dur="4.271"> သင်၏လိုင်းကိုဖွင့်ထားသည်။ >
< start="3188.982" dur="3.471"> [ပြင်သစ်စကားပြောခြင်း] >
< start="3190.917" dur="3.971"> >> ယူဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="3192.153" dur="4.137"> မေးခွန်း။ >
< start="3192.52" dur="5.705"> နှစ် ဦး စလုံးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် >
< start="3194.955" dur="5.339"> ဝန်ကြီးကဒီအချက်ကိုညွှန်ပြပြီးပြီ >
< start="3196.357" dur="4.838"> မှာကန့်သတ်ချက်များကြည့်ပါ >
< start="3198.292" dur="4.771"> ကနေဒါ / အမေရိကန်နယ်နိမိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="3200.361" dur="7.34"> နောက်ထပ်မှီခိုပင်ဆန့် >
< start="3201.262" dur="7.44"> ပြOFနာအရေအတွက်ပေါ်ပေါက် >
< start="3203.13" dur="6.807"> ထဲက, အထဲက >
< start="3207.768" dur="2.769"> ဝန်ကြီးလည်းယုံ >
< start="3208.769" dur="3.17"> အထူးဖော်ပြခဲ့သောလုပ်သားများ >
< start="3210.004" dur="3.069"> သော။ >
< start="3210.604" dur="4.671"> ဘာကိုသတိရနိုင်မလဲ >
< start="3212.006" dur="4.371"> ယူ, အဘယျသို့ယူနိုငျသညျ >
< start="3213.14" dur="7.074"> ထို့ထက်ပိုမိုသောအစိုးရအတွက် >
< start="3215.342" dur="5.473"> မကြာခင်ကဘာတွေဖြစ်နေသလဲတင်းကျပ် >
< start="3216.444" dur="5.672"> နယ်စပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် >
< start="3220.281" dur="3.47"> သန္ဓေတားခြင်းအစီအစဉ် TH THE >
< start="3220.881" dur="8.575"> နေ့လည်ခင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ST >
< start="3222.183" dur="9.742"> နယ်စပ်ဒေသနဲ့တူလား။ >
< start="3223.884" dur="10.744"> >> ကောင်းပြီ, ငါတို့မြင်ပြီထင်ပါတယ် >
< start="3229.523" dur="6.406"> ယနေ့အချို့သောအဆက်အသွယ် >
< start="3231.992" dur="5.706"> ဝန်ကြီးချုပ်စီစဉ် >
< start="3234.695" dur="4.671"> လာရည်ညွှန်းခဲ့သည် >
< start="3235.996" dur="4.505"> ၏တရားဝင်, အုပ်ချုပ်ရေး Quantantine >
< start="3237.765" dur="4.471"> ကနေဒါသို့ရောက်သောသူတိုင်းတစ် ဦး >
< start="3239.433" dur="8.775"> Fရာမနောက်ထပ်ခြေလှမ်း။ >
< start="3240.568" dur="9.476"> အရေးကြီးသောအဆင့်နှင့်အိုင်တီ >
< start="3242.303" dur="9.609"> ကနေဒါအားလုံးခံစားသင့်တယ် >
< start="3248.275" dur="4.471"> အများကြီးပိုလုံခြုံ >
< start="3250.111" dur="5.438"> ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးအပတ်များစွာဂရုစိုက်သည် >
< start="3251.979" dur="5.839"> အလွန်အရေးပါတိုင်းတာခြင်း >
< start="3252.813" dur="6.139"> ငါတို့နှင့်အတူနယ်နိမိတ်သို့ကြွလာသောအခါ >
< start="3255.616" dur="5.439"> အမေရိကန်ကဒီတိုင်းတာ >
< start="3257.885" dur="4.871"> ကျနော်တို့အများကြီးယူ >
< start="3259.019" dur="5.839"> ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း >
< start="3261.122" dur="7.74"> ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်အိမ်နီးချင်းများ၊ >
< start="3262.823" dur="8.242"> ဂရုတစိုက်ရှိသောတိုင်းတာမှုများ >
< start="3264.925" dur="7.074"> သောထိုသေချာစေရန်ဒီဇိုင်း >
< start="3268.929" dur="4.838"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်, အဓိကကုန်သွယ်ရေး >
< start="3271.132" dur="5.972"> ဆက်နိုင် >
< start="3272.066" dur="7.274"> သငျသညျယနေ့ငါတို့အားလုံးကိုကြားရပြီ >
< start="3273.834" dur="7.908"> ဖို့တကယ်ကိုအလေးပေး >
< start="3277.171" dur="8.708"> ငါတို့စားပွဲပေါ်ကအစားအစာ၊ >
< start="3279.407" dur="7.206"> ငါတို့ရဲ့အငွေ့အသက်များ - >
< start="3281.809" dur="6.306"> ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဆိုင်များတွင်အမှန်တကယ်ဆေးများရှိသည် >
< start="3285.946" dur="3.771"> သောဖြတ်ကျော်မှီခို >
< start="3286.68" dur="3.904"> ကုန်သွယ်ရေး AND ငါယူလို >
< start="3288.182" dur="3.837"> WHO က TRUCKERS ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="3289.784" dur="6.272"> နောက်သို့နှင့်ကားမောင်းနေကြသည် >
< start="3290.651" dur="7.607"> နေ့တိုင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး >
< start="3292.086" dur="6.539"> သူတို့သည်အရေးကြီးသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည် >
< start="3296.123" dur="5.606"> အမှန်တကယ် WETO သော >
< start="3298.325" dur="5.139"> ရှင်သန်ရပ်တည်။ >
< start="3298.692" dur="5.139"> ကျနော်တို့စဉ်းစား, သင်တန်း၏ >
< start="3301.796" dur="2.836"> ထို့အပြင်အကြောင်းဂရုတစိုက် >
< start="3303.531" dur="5.004"> တိုင်းတာမှုများ။ >
< start="3303.898" dur="8.508"> သငျသညျသူ၌အကြှနျုပျတို့ကိုမြင်မွငျ >
< start="3304.699" dur="10.743"> ရုံအတိတ်ဆယ်ရက်နေ့၏သင်တန်း >
< start="3308.602" dur="8.742"> တစ် ဦး ကိုမှန်ကန်ခြေလှမ်းများယူပါ >
< start="3312.473" dur="5.271"> နယ်စပ်ဒေသတွင်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ >
< start="3315.509" dur="3.403"> တာဝန်ဝတ္တရားပါဝင်သည် >
< start="3317.411" dur="3.47"> Quantantine ။ >
< start="3317.811" dur="4.672"> ငါတို့တစ်စုံတစ်ခု >
< start="3318.979" dur="8.575"> အစဉ်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကျနော်တို့ပါလိမ့်မယ် >
< start="3320.948" dur="9.042"> ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆက်လက်။ >
< start="3322.55" dur="9.442"> ငါသည်လည်းပြောချင်တယ် >
< start="3327.621" dur="8.142"> ဖြတ်ကျော် - နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သွားတယ် >
< start="3330.057" dur="7.708"> သိသိသာသာလျော့ကျ။ >
< start="3332.059" dur="7.441"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလူကိုမြင်ကြပြီ >
< start="3335.83" dur="5.505"> ထိုနှစ် ဦး စလုံးတုံ့ပြန် >
< start="3337.832" dur="5.571"> ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လည်း >
< start="3339.567" dur="6.239"> လူတွေထားတဲ့ထုတ်လွှင့်သတင်းစကား >
< start="3341.402" dur="5.438"> သူတို့၏ထံမှကြားနေကြသည် >
< start="3343.47" dur="4.605"> နှစ် ဦး စလုံးကနေဒါအစိုးရများနှင့် >
< start="3345.873" dur="4.037"> အမေရိကန်နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး >
< start="3346.907" dur="5.706"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်သော >
< start="3348.142" dur="5.705"> MESSAGE သည်ယခုအချိန်ဖြစ်သည် >
< start="3349.977" dur="5.605"> အိမ်မှာတည်းခိုရန်ယခုအချိန်သည်အချိန်ဖြစ်သည် >
< start="3352.68" dur="5.705"> လေ့ကျင့်ခန်းရူပဗေဒအကွာအဝေး >
< start="3353.914" dur="8.675"> ငါတို့သည်မြင်နေကြသည်ကားအဘယ်သို့ >
< start="3355.649" dur="8.942"> ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်မှာငါတို့အဆက်အသွယ်ပေါ်မှာ >
< start="3358.452" dur="9.309"> နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ >
< start="3362.722" dur="6.507"> >> နှင့်တစ် ဦး ကနောက်ဆက်တွဲ UP အဖြစ်ဝန်ကြီး >
< start="3364.658" dur="5.906"> ဖရီးယား, သင်နိုင်လျှင်အံ့သြ >
< start="3367.828" dur="4.705"> ကဲ့သို့သောအရာကိုရောင်ပြန်ဟပ် >
< start="3369.296" dur="4.738"> ဤခေါ်ဆိုမှု၏ဤအမှုအရာလုပ်ပါ >
< start="3370.631" dur="4.938"> သငျသညျဖော်ပြရန်ခဲ့ကြပြီ >
< start="3372.6" dur="4.37"> နားမလည် IN နားလည်မှု >
< start="3374.101" dur="5.572"> နယ်မြေနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ >
< start="3375.635" dur="5.273"> ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရကိုပေး၏ >
< start="3377.037" dur="5.806"> ဖြစ်တည်မှုသမိုင်းကြောင်းရှိသည် - >
< start="3379.74" dur="5.072"> ဖွင့်သောစီမံကိန်း >
< start="3380.975" dur="6.372"> ကွဲပြားခြားနားမှလာလူတွေ >
< start="3382.91" dur="8.575"> ကဲ့သို့သောနေရာများ >
< start="3384.879" dur="6.973"> ဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုပါစေ >
< start="3387.414" dur="5.572"> တချို့ရဲ့စုစုပေါင်း 180 >
< start="3391.552" dur="3.77"> လေးစားပါတယ်? >
< start="3391.985" dur="5.839"> >> IHEY ကို AT >
< start="3393.053" dur="7.007"> ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရ၏အဓိကပြနာများ >
< start="3395.388" dur="7.408"> ယုံကြည်ချက်တွေ၊ >
< start="3397.891" dur="7.041"> နည်းလမ်း။ >
< start="3400.127" dur="7.908"> ငါတို့အစိုးရစုစုပေါင်း >
< start="3402.863" dur="7.608"> ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းမဲ့အာဏာကိုနားလည်သည် >
< start="3404.998" dur="8.409"> ဦး စားပေးကျန်းမာရေးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် >
< start="3408.102" dur="6.74"> နှင့်ကနေဒါလုံခြုံမှု။ >
< start="3410.537" dur="5.806"> သောအရာ၏, ဖက်ဒရယ် >
< start="3413.474" dur="4.371"> အစိုးရ, Provinci >
< start="3414.909" dur="4.637"> အစိုးရများ၊ မြူနီစီပယ်ခေါင်းဆောင်များ၊ >
< start="3416.41" dur="5.305"> ဌာနေ ဦး ဆောင်သူများ၊ ကနေဒါ >
< start="3417.912" dur="7.54"> နိုင်ငံဖြတ်ကျော် >
< start="3419.613" dur="7.541"> ထူးခြားသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။ >
< start="3421.782" dur="6.94"> ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသည်ကျောင်းတွင်မဟုတ်ပါ။ >
< start="3425.519" dur="6.106"> အလွန်များပြားတဲ့လူတွေ >
< start="3427.221" dur="4.704"> အိမ်မှအလုပ်လုပ်။ >
< start="3428.789" dur="5.572"> လူတွေများများအလုပ်မလုပ်ကြဘူး >
< start="3431.692" dur="3.904"> အားလုံး။ >
< start="3431.992" dur="5.372"> ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး US ကိုလေ့ကျင့်နေကြသည် >
< start="3434.428" dur="5.138"> လူမှုရေးအကွာအဝေး။ >
< start="3435.662" dur="5.94"> ငါအားလုံးငါတို့လေ့ကျင့်နေကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="3437.431" dur="6.807"> ကြီးမားသောနည်းလမ်းများ၌အိုင်တီ >
< start="3439.633" dur="4.939"> ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ >
< start="3441.669" dur="5.371"> ဤသူတို့သည်ထူးခြားသောဖြစ်ကြသည် >
< start="3444.305" dur="3.035"> အချိန်။ >
< start="3444.638" dur="6.173"> ငါအားလုံး GET TT ငါတို့သိတယ် >
< start="3447.107" dur="4.972"> သော။ >
< start="3447.407" dur="6.54"> AND သူတို့အားထူးခြားသောအပြောင်းအလဲများ >
< start="3450.878" dur="5.438"> လုံးဝ AN လိုအပ်ပါတယ် >
< start="3452.146" dur="4.537"> အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သက်ရောက်ဖူး >
< start="3454.014" dur="6.74"> ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ >
< start="3456.383" dur="5.372"> နယ်နိမိတ်။ >
< start="3456.75" dur="8.442"> ဒီနည်းကို SHIFT ၏မည်သည့်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး >
< start="3460.821" dur="6.306"> ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရ၏အမြင်များ။ >
< start="3461.822" dur="8.375"> ဒီနည်းကိုအကြောင်းအများကြီးယူ >
< start="3465.258" dur="5.506"> ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့ခြေလှမ်းများ >
< start="3467.194" dur="6.406"> ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှု >
< start="3470.264" dur="5.905"> ကနေဒါ။ >
< start="3470.831" dur="7.207"> ၁၄ ရက်ကြာမြင့်မားမှုအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည် >
< start="3473.667" dur="7.574"> ထိုလမ်းပေါ်မှာနောက်ထပ်ခြေလှမ်း, >
< start="3476.236" dur="9.977"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်အမြဲကျန်းမာရေးကိုထားပါလိမ့်မယ် >
< start="3478.105" dur="10.243"> ကနေဒါ၏ပထမနှင့်လုံခြုံမှု >
< start="3481.308" dur="13.68"> AND ငါငါတို့ရှိသမျှသည်တှေးအလွန်ခံစားရတယ် >
< start="3486.28" dur="9.943"> ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်မှု >
< start="3488.415" dur="8.309"> ဤသည်ကိုမှန်ကန်သောညွှန်ကြားချက်သည်။ >
< start="3495.122" dur="2.402"> >> Mercy BEAUCOUP ။ >
< start="3496.29" dur="2.102"> >> (Tto Voice: >
< start="3496.79" dur="9.009"> အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="3497.591" dur="10.677"> ငါတို့ဖိအားကိုပျက်စေသော >
< start="3498.459" dur="11.144"> ဒီနေ့စည်းဝေးပွဲ။ >
< start="3505.866" dur="4.004"> >> ပေတရု: တစ်ဖန်ပေတရု >
< start="3508.335" dur="2.169"> နှင့်အတူစောင့်ကြည့်ခြင်းမိတ်ဆက် >
< start="3509.67" dur="2.235"> မင်း >
< start="3509.937" dur="3.303"> အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်လာ >
< start="3510.571" dur="4.838"> ဖက်ဒရယ်၏ update ကိုမှ >
< start="3511.972" dur="68.001"> ဒီနေ့ဝန်ကြီးများ။ >
< start="3513.307" dur="66.666"> သူတို့ကိုတစ် ဦး ကနားထောင်ခဲ့သည် >
< start="3515.476" dur="64.497"> နံပါတ် >